ကိုယ်ပြောချင်သမျှ LT အကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကိုယ်ပြောချင်သမျှ LT အကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ
ကိုယ်ပြောချင်သမျှ LT အကြောင်း သောင်းပြောင်းထွေလာ
Posted by San Hla Gyi on Mar 16, 2014 in Drama, Essays.., Think Different | 88 comments
ဟိုတလောဆီက ဂျာနယ်များတွင် ချစ်သူများနေ့အတွက် ပြင်ကြ ဆင်ကြ ပရိုမိုးရှင်းများ အပြိုင်အဆိုင် ပြုလုပ်ကြသော သတင်းများ ဖတ်လိုက်ရသည်။ ဒါနဲ့ တဆက်တည်း ပါလာသည်က စုံတွဲများအတွက် အခန်းများဌားခြင်း သတင်းများ ဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး စိုးရိမ်သော အချို့ ဆောင်းပါးရှင်များ၏ လူငယ်များကို ဆင်ခြင်ဖို့ တိုက်တွန်းသော ဆောင်းပါးများကိုလည်း တွေ့ရသည်။ ဒါနဲ့ ပက်သက်ပြီး မန်းဂေဇက်တွင်ပင် အတော် ငြင်းခုံကြသည်ကိုလည်း တွေ့လိုက်ရသည်။ ထိုအကြောင်းနဲ့ ဆက်နွယ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးအား စာရေးသူ ရေးဖြစ်တာ ဖြစ်ပါသည်။
အဓိက ဆွေးနွေးသွားကြသော အကြောင်းအရာမှာ လူငယ်များ လက်မထပ်ခင် ဒီလို sex ကိစ္စ လုပ်တာ သင့် မသင့်နဲ့ living together ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ထို living together အကြောင်းကိုပင် အပြန်အလှန် ငြင်းခုံ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်လာပါသည်။
ထို လစ်ဗင်းတူဂဲသား ကိစ္စမှာ ထိုပို့စ်များတွင် တယောက်က အဘိဓါန်မှ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရေးသွားသဖြင့် သိပ်ကောင်းသွားပါသည်။ အကျဉ်းချုပ်မှာ လူနှစ်ယောက် တအိမ်ထဲတွင် အတူနေကာ လင်မယား ဆက်ဆံရေးမျိုး ရှိသော်လည်း လက်ထပ်မထားသော လူများ ဖြစ်ပါသည်။
ရှေး မြန်မာ့ဖြတ်ထုံးမှာတော့ အိမ်နီးနားချင်း ခုနှစ်အိမ်ကို အသိပေးပြီး ကာယကံရှင် နှစ်ယောက် အလိုတူလို့ အိပ်ရာအတူ အိပ်လျှင် လင်မယားအရာ မြောက်သည်ဟု သိရပါသည်။ မြန်မာ့ထုံးစံကတော့ လက်မှတ်မထိုးလည်း အသိသက်သေရှိပြီ ဆိုသည်နှင့် အလိုလို လင်မယားအရာ မြောက်ပြီးသား ဖြစ်သည်။ နောက်ပိုင်းကိစ္စများမှာ အားလုံးကို လင်မယား ဥပဒေနဲ့ စဉ်းစားသည်။ လင်မယားကွဲရင် သရက်သီး ထက်ခြမ်းခြမ်းသလို ပစ္စည်းဥစ္စာ အညီအမျှ ဝေယူ စသည်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ဆိုတော့ ဒီကိစ္စကတော့ living together လို့ ဘယ်လိုမှ စဉ်းစားလို့ မရတော့။ ထိမ်းမြား လက်ထပ်ခြင်းထဲကို အလိုအလျှောက် ဝင်သွားပြီ ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ အနေနှင့်တော့ ထိုစဉ်က ကွန်မန့် အများကြီးနဲ့ ဆွေးနွေးခြင်းထက် နှစ်ဘက် အပြန်အလှန် ပြောနေသည်ကိုသာ ဘေးမှ စိတ်ဝင်တစားဖြင့် ကြည့်နေသည့် အချိန် ပိုများပါသည်။ အဓိကမှာ အယူအဆနှစ်မျိုး အုပ်စု နှစ်ခုကိုသာ အဓိက တွေ့ရပါသည်။
ပထမအုပ်စုမှာ ဒီကိစ္စမှာ ခွင့်မပြုသင့် မကောင်း living together မှာ လက်မထပ်ခင် နှစ်ယောက်အတူ အစမ်းသဘော နေကြည့်တာ ဖြစ်သည်။ မြန်မာ့ထုံးစံမရှိ မသင့်တော် ခွင့်မပြုနိုင်။ သမီးမိန်းကလေး မွေးထားသော မိဘများဘက်မှ ဝင်ကြည့်သင့်သည်။ ကိုယ့်သမီးလေးအား လာပြီး တဘဝလုံး လက်တွဲဖို့ သင့်မသင့် အစမ်းသဘော အဖြစ် တနှစ်လောက်တော့ နေကြည့်ပါရစေ။ အဆင်ပြေရင်တော့ လက်တွဲပါမည်။ အဆင်မပြေရင်တော့ ကန့်တော့ဆွမ်းပေါ့ဟု ဆိုသူအား ဓါးနဲ့ ပိုင်းသင့်ပိုင်းမည် ဆိုသည် အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ ထိုအုပ်စုမှာ အများစုဖြစ်သည်။ ဝင်မဆွေးနွေးသူ မြန်မာမိဘ အများစုမှာလည်း ထိုအစုထဲတွင် ပါမည်မှာ သေချာပါသည်။
ဒုတိယအဖွဲမှာ လစ်ဘရယ်ဆိုသူများ ပါသော အဖွဲ့ ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ကလည်း သူတို့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူတို့ပဲ။ သူတို့ ပြောတာတွေကလည်း မဆိုး။ သူတို့ အကြောင်းပြချက်တွေက အကျဉ်းချုပ်ဆိုရသော် လိင်ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး လက်မထပ်ပဲ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပွင့်ပွင်းလင်းလင်း ဆက်ဆံတာ အပြစ်လည်းမဟုတ် ရှက်စရာလည်း မဟုတ် ဒါကို ရှက်စရာလို့ ထင်နေသူများဟာ လူ့အခွင့်အရေးအရ အခြေခံကျကျ မှားနေသူများ ဖြစ်ကြောင်း။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် သဘောတူမျှလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း လုပ်တာကို ဘေးက အပြစ်ဆို နှိပ်ကွပ်သူသာ မှားကြောင်း။ ဒါက sex ကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ သူတို့အမြင်။
လစ်ဗင်းတူဂဲသားခေါ် လက်မထပ်ပဲ အစမ်းသဘော နေကြည့်တာနဲ့ ပက်သက်လို့တော့ သူတို့ အမြင်က ပိုစုံလင်သည်။ သူတို့ သဘောထားအရ ဒီလို နေကြည့်တာဟာ ယူအက်စ်လို နိုင်ငံမျိုးမှာတောင် လုပ်နေကျ ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတယောက်ဟာ သူ အဆင်ပြေမယ် ထင်တဲ့ ကောင်လေးတယောက်နဲ့ ညအိပ်ကြည့်မည်။ ကာမအရသာ ခံစား စံစား ကြည့်မည်။ ဒီလူကို အကျင့်စာရိတ္တ ငွေရှာတာ သုံးတာ ညအိပ်ရင် ဟောက်တတ်သလား အကုန်ကြည့်မည်။ တနှစ်လောက်ကြည့်မှ စိတ်ချရမည် ဆိုတာလည်း ပါသည်။ အဲဒီလို မနေကြည့်ပဲ တန်းယူလို့ အဆင်မပြေရင် ဘယ်လိုလုပ်မလည်း ဆိုတာလည်း ပါသည်။ နောက်ပြီး မြန်မာပြည်မှာ ဒါကို ခွင့်ပြုရင် ပိုအဆင်ပြေမည်။ တကယ်လို့ အချောင်စားချင်တဲ့ ယောကျာင်္းလေးမျိုးနဲ့ တွေ့ရင်လည်း ဒီလို လူမျိုးနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ရတာ ပိုကောင်းသည်။ အပျိုစင်ဖြစ်မှ လက်ထပ်မည် ဆိုတာက မြန်မာမိန်းကလေးတွေက သူတို့ကို နှိပ်ကွပ်ထားမှန်း မသိတာ ဆိုတာနဲ့ ဒါ တကယ့် ပညာအစစ်ကို မတတ်လို့ ဆိုတာလည်း ပါသည်။ အကျယ်ကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ တင်တဲ့ ပို့စ်တွေမှာ သွားဖတ်ကြည့်စေချင်ပါသည်။
အမှန်ဆိုရသော် ဒုတိယ အုပ်စုက လူနည်းတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် သူတို့ အကြောင်းပြချက်တွေက မြင်တဲ့အတိုင်း ပိုစုံလင်တာကို တွေ့ရမည်။ ပထမအုပ်စုကတော့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းပါပဲ။ ဒီတော့ စာရေးသူ သုံးသပ်ရရင်တော့ ဒုတိယအုပ်စု၏ အတွေးအခေါ်များပေါ်တွင် အဓိကထား သုံးသပ်ကြည့်ပါမည်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ပိုစုံလို့ပါ။
ပထမဆုံး တကယ့် ပညာအစစ်ကို တတ်တာနဲ့ Living together နေတာကတော့ စာရေးသူ အနေနဲ့ သိပ်မဆိုင်ဟု ထင်ပါသည်။ ကိုယ်နေချင်လို့ နေတာကို ကာကွယ်ရန်နှင့် နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေလို့ တကယ့် ပညာအစစ်ကို တတ်သည်ဆိုပြီး သူများကို နှိမ်ရန် ကြိုးစားသည်လို့ ထင်ပါသည်။
စာရေးသူတို့ နိုင်ငံတွင် လက်ရှိ နိုင်ငံရေးလောကတွင် ထင်ရှားလှသော အမျိုးသမီးကြီးတဦးမှာ ကမ္ဘာ့အဆင့် တက္ကသိုလ်များတွင်မှ တော်ဝင်သွေးတွေမှ တတ်နိုင်သည်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးသော တက္ကသိုလ်ကြီးတခုမှ ကျောင်းပြီးသူ ဖြစ်ပါသည်။ သူ့မှာ အင်္ဂလိပ်စကားပြော ကောင်းလှသလို မြန်မာစကား ပြောတော့လည်း အသုံးအနှုန်း ကောင်းလွန်းသဖြင့် တော်ရုံ မြန်မာစာ ကထိကတောင် သူ့လောက် ပြောတတ်ပါ့မလားဟု ထင်ရပါသည်။ မြန်မာဆန်ဆန် အဝတ်များကို ဝတ်လေ့ရှိပြီး ထိုအဆင်အပြင်နဲ့လည်း အလွန် ကျက်သရေရှိသော အမျိုးသမီးကြီး ဖြစ်ပါသည်။ နာမည်ကို ပြောစရာ မလိုတော့ဟု ထင်ပါသည်။ အားလုံးလည်း သိနေလောက်ပါပြီ။
သူလည်း နိုင်ငံခြားက တက္ကသိုလ်ကြီးမှ ဘွဲ့ရခဲ့ကာ နိုင်ငံခြားမှာ အနေကြာခဲ့သူ တဦးပဲ ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူ သိသလောက်မှာ သူ သူခင်ပွန်းနဲ့ မြန်မာထုံးစံအတိုင်းပဲ လက်ထပ်ခဲ့ပြီး နောက်မှ သားနှစ်ယောက် ထွန်းကားခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ လက်မထပ်ပဲ လေ့လာလို့ ရအောင်ဆိုပြီး တနှစ်လောက် အစမ်းသဘော နေကြည့်ခဲ့သည်လို့ မကြားဖူးပါ။ သူ့ခင်ပွန်း မတိုင်ခင်ကလည်း တခြားသော ယောကျာင်္းလေးများနဲ့ လေ့လာလို့ ရအောင်ဆိုကာ အခုပြောသော ဟိုဟို ဒီဒီ အရသာများ ခံစား စံစားခဲ့သည်လို့ တခါမှ မကြားဖူးပါ။ စာရေးသူ မသိတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ သိသူများ ရှိရင်လည်း တိတိကျကျ ပြောပြစေလိုပါသည်။
တတ်နိုင်သလောက် စာအုပ်တွေ ဖတ်ကြည့်တော့လည်း သူ့ ဘိုင်အိုဂရပ်ဖီမှာ ကျောင်းပြီးတော့ ကုလသမဂ္ဂရုံးမှာ ၃ နှစ် အလုပ် ဝင်လုပ်သည်။ နောင် သူ့ခင်ပွန်း ဖြစ်လာမည့် သူနဲ့က တရုံးတည်းပဲ။ ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း ယူအက်စ်မှာ နေခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ ထို ၃ နှစ်လုံးလုံး သူသည် ဒိုရာသန်းအေးဆိုသူ အမျိုးသမီးကြီးနဲ့သာ အတူတူ နေခဲ့သည်လို့ ဖတ်ခဲ့ရသည်။ သူ့ အနေနဲ့ လစ်ဗင်းတူဂဲသားချင်ရင် အလွယ်လေးပဲ။ သူ့မိခင်က သူနဲ့ အတူမရှိ။ တချို့ နိုင်ငံခြားမှာ နေသူများ ပြောလေ့ရှိသည့် တကယ့် ပညာအစစ်တွေ တတ်ကာ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ် ကိုယ်ရပ်နိုင်ပြီလည်း ဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့် သူ ထိုကဲ့သို့ နေခဲ့သည်ဆိုတာ လုံးဝ မကြားဖူးခဲ့။
စာရေးသူကတော့ မကြားဖူးခြင်းမှာ သူ တကယ် အဲဒီလို မနေခဲ့တာပဲဟု ယုံကြည်ပါသည်။ ဘာလို့ ဒီလို တွက်လို့ရတာလည်းဆိုတော့ ၁၉၉၀ လွန်နှစ်များက သူ့ပြိုင်ဘက်များက သူ့ကို နိုင်ငံပိုင် မီဒီယာများတွင်ပင် အလွန် အရုပ်ဆိုးသော ကာတွန်းပုံများဆွဲကာ သိက္ခာချနေသော အချိန်မှာပင် သူ့ကို ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး တယောက်မှ မပြောနိုင်ခဲ့ကြခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ တကယ် လုပ်ခဲ့ပါက လက်တံ အလွန်ရှည်သော သူ့ပြိုင်ဘက်များက ထိုကိစ္စကို ထောင်းလမောင်းကျေအောင် ပြောခဲ့မည်မှာ သေချာလှသည်။
အဲဒီလို ခံစား စံစားခဲ့ရင်လည်း ဒီနေ့လို မြန်မာအများစု သည်းသည်းလှုပ်ဖြစ်သော အနေအထားသို့ပင် ရောက်ဖို့မလွယ်လို့ ထင်ပါသည်။ ဆိုလိုတာက မြန်မာတွေ သတ်မှတ်ထားသော ကိုယ်ကျင့်တရား စံနှုန်းဖြင့် သူ့ကို အပြစ်ရှာရန် မလွယ်ခြင်းပင်။ မြန်မာများထဲမှ နိုင်ငံခြားတွင် ပညာဖြင့် နာမည်တလုံး ထွက်ခဲ့သော ဒေါက်တာလှဘေတို့ ဒေါက်တာထင်အောင်တို့ ဒေါက်တာကျော်သက်တို့လည်း ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး နာမည်ထွက်လာသည်လို့ မကြားဖူးပါ။ ဒီတော့ ဒီကိစ္စ လုပ်ချင်လို့ လုပ်တာနဲ့ နိုင်ငံတကာ အဆင့်မီ ပညာတတ်ခြင်း ဘာမှ မဆိုင်ဟုသာ ဆုံးဖြတ်မိပါသည်။
ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးရှိအောင် နေချင်သူသည် ဘယ်နေရာရောက်ရောက် ကိုယ့်စံနှုန်းအတိုင်း နေပါသည် ခင်ဗျာ။
စာရေးသူ၏ နောက်ထပ် ထင်မြင်ချက်တခုမှာ တကယ့် ပညာတတ် မြန်မာမိန်းကလေး တော်တော်များများသည် လူတယောက်ကို အိပ်ကြည့်စရာ မလိုပဲနဲ့ကို သူ့အကြောင်းကို အချိန်တခုအတွင်း သိအောင် လုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်လို့ ထင်ပါသည်။
ထို လစ်ဗင်းတူဂဲသား စနစ်အကြောင်းကို လစ်ဘရယ်ဒီမို ဆိုသူများ ဆွေးနွေးသည့် အချက်များကို အခြေခံပြီး လေ့လာကြည့်မည်။ ကြိုတင်ပြီး စကားခံရရင်တော့ စာရေးသူ ဆွေးနွေးရာတွင် အကျိုးနဲ့ အပြစ်များကိုသာ အဓိက ချိန်ထိုး စဉ်းစားမှာ ဖြစ်ပြီး ဒါ မြန်မာ့ရိုးရာထုံးစံဖြစ်သည်တို့ မပြောင်းလဲသော အမှန်တရားတို့ လိုက်ကို လိုက်နာရမည်တို့ ဆိုသည်များကို အကြောင်းပြချက် မရှိပဲနဲ့ လုံးဝ ပြောမည် မဟုတ်ပါ။ လစ်ဘရယ် ဒီမိုအဖွဲ့ကလည်း ယာဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံဆိုသော အချက်နဲ့တော့ မကာကွယ်ပါနဲ့။ လူငယ်တွေ မအကြတော့ပါလို့ စကားခံထားပြီးသား ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံးမှာ လစ်ဗင်းတူဂဲသားကို လက်ခံချင်ပြီး ကိုယ့်သားသမီးများကိုပါ ကျင့်သုံးစေချင်သည် ဆိုသော အတွေးအခေါ်ဘက်မှ ကောင်းကွက်များမှာ အားလုံး မြင်ပြီးသည့်အတိုင်း သေသေချာချာ လေ့လာနိုင်သည် မကောင်းရင် နောက်ဆုတ်နိုင်သည်။ တသက်လုံး ဒုက္ခခံစရာမလို တနှစ်လောက် လေ့လာပြီး အတူနေကြည့်တာနဲ့ အကျင့်စာရိတ္တကို အကဲခတ်နိုင်သည်။ ကိုယ်ဝန်ရှိလာမှာလည်း ဒီခေတ်မှာ မပူရ ဆေးဝါးများ ရှိသည် သားအိမ်ခြစ်လိုက်ရင် သုံးသောင်းလောက်နဲ့ ရတယ် ဆိုတာတောင် ပါသေးသည်။ ဆေးပညာပိုင်းပါ ပါသွားပြီး အတော်လေး စုံလင်သလို ဖြစ်နိုင်သည့် အချက်များ ပါပါသည်။
သို့ရာတွင် အားလုံး ထည့်မပြောခဲ့သည်က ဥပဒေနဲ့ သတ်မှတ်တာ မဟုတ်ပဲ လူ့အဖွဲ့အစည်းက လက်ခံကျင့်သုံးနေသော ဓလေ့ထုံးစံ စနစ်များတွင် အစွမ်းထက်သော အရာတခုရှိသည်။ ဘာလည်း ဆိုတော့ ထိုစနစ်ကို မလိုက်နာပဲ တော်လှန်သူကို စနစ်ကပင် ပညာသားပါပါ ဒဏ်ပေးတတ်သည်။ လစ်ဗင်းတူဂဲသား စနစ်သည် တခြားလူ့အဖွဲ့အစည်းများ အတွက်မူ ကောင်းချင်ကောင်းပါလိမ့်မည်။ သို့သော် မြန်မာလူအဖွဲ့အစည်း အတွက်မူ ထိုကိစ္စ ကျင့်သုံးသူ ကောင်းကျိုးမရပဲ ဆိုးကျိုးတွေ ရလာအောင် လုပ်မည့် စံနှုန်းတခု တကယ်ရှိသည်။ အကျယ်ချဲ့ပြီး ဆိုပါရစေ။
တက္ကသိုလ် စာအုပ်ဟောင်း တခုမှ ဖတ်လိုက်ရသော တကယ်ရှိခဲ့ဖူးသည့် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသူ တယောက်အကြောင်းလေး ဖြစ်သည်။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ်ဖွင့်စ အချိန်တုန်းက တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ အားလုံးဟာ မြို့ထဲကို ဟိုဟိုဒီဒီ သွားရင်တောင် ပွဲနေပွဲထိုင် သွားသလို ဝတ်လေ့ရှိပြီး ဆံထုံးများ ထုံးလေ့ရှိသည်တဲ့။ သူတို့ခေတ်က နာမည်ကြီးသော ဘီအေမဆံထုံးလို့ ခေါ်သည့် ဆံထုံးကြီးတွေ ဖြစ်မှာပေါ့လေ။ အဲဒါ ကျောင်းသူလေး တယောက်က ထိုဆံထုံး မထုံးပဲ ခုခေတ် မိန်းကလေးတွေလို ဆံပင်တိုလေးနဲ့ ကျောင်းတတ်တယ်တဲ့။ အဲဒါ ဘာဖြစ်သလည်းဆိုတော့ ထိုကျောင်းသူ မိန်းကလေးမှာ ကျောင်းသက်တမ်း တလျှောက်လုံး ကျောင်းသူ အချင်းချင်းပင် ငြူစူမှု အထင်သေးမှု ဝိုင်းပယ်မှုများကို ခံရပြီး ကျောင်းသက်တမ်းကို ခက်ခဲစွာ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်လို့ ဆိုသည်။
ထိုမိန်းကလေး အဖြစ်မှာ အမှန်တော့ ဘာမှမဟုတ်။ ကိုယ်ကျင့်တရား ဖောက်ပြန်တာလည်း မဟုတ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ သူကျောင်းတတ်ပါက သူ့ကို ဘယ်သူမှတောင် သိလိုက်မှာ မဟုတ်။ သူ ဖြစ်တာက အဲဒီအချိန်က အမျိုးသမီးများ သတ်မှတ်ထားသော စံများနဲ့ သူက အလွန် ကင်းကွာနေခြင်းပင်။ အဲဒါကြောင့် သူ အတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရခြင်းသာ။
ပြောလို့တော့ ရချင် ရလိမ့်မည်။ သူ့ကို ရှုတ်ချသော အထင်သေးသော ဝိုင်းပယ်သော ကျောင်းသူများမှာ မှားသည် သူများအခွင့်အရေး ဖြစ်သည် မလုပ်သင့်။ သို့သော် စာရေးသူ ပြောလိုသည်မှာ အမှား အမှန်ထက် ကာယကံရှင်ဘက်က နစ်နာမှုကို ပြောလိုတာ ဖြစ်သည်။ အများစံနှုန်းကို မလိုက်နာနိုင်ခြင်းကြောင့် ထိုစံနှုန်းရှိသော အသိုင်းအဝိုင်းက ဒဏ်ပေးပုံကို သိစေလိုတာသာ ဖြစ်သည်။
အခုပြောမည့် ဥပမာလေးကတော့ ပိုပြီး သက်ဆိုင်သည်။ သိပ်လည်း မကြာလှသေး။ လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် တခုလောက်က စာရေးသူကိုယ်တိုင် မြင်ခဲ့ဖူးသော ကိစ္စဖြစ်သည်။ အကြောင်းအရာပဲ ပြောကြပါစို့ရဲ့။ ကာယကံရှင်များ နာမည်တော့ ထည့်လို့ မဖြစ်ပါ။
လွန်ခဲ့သော ဆယ်စုနှစ် တခုလောက်က စာရေးသူတို့ လမ်းနားတွင် ကျောင်းသူ အဆောင်တဆောင် ဖွင့်သည်။ ဖြစ်ပုံက မိန်းမသား အပျိုကြီး အများစု နေသော အိမ်က အိမ်ကြီးကလည်း ကျယ်လှသဖြင့် အပိုဝင်ငွေလည်းရစေ ကိုယ်လည်း အဖော်အဖက်လေးများ ရစေတော့ ဆိုပြီး နယ်မှ ကျောင်းလာတတ်သော တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူများ အတွက် သူတို့ ပိုနေသော အခန်းများကို ဌားရမ်းသည်။ စာရေးသူ စိတ်ထင် လာနေသော မိန်းကလေး ၈ ယောက်လောက်တော့ ရှိမည် ထင်သည်။
အဲဒီမှာ လာနေသော ကျောင်းသူလေးတယောက်မှာ အားလုံးထဲတွင် မွေးထူးရေခြားဟု ဆိုရလောက်အောင် ရုပ်အလွန်ကို လှသည်။ အားလုံး မြင်တာနဲ့ သတိမပြုပဲ မနေနိုင်သည့် အလှမျိုး ဆိုပါတော့။ အဲဒီမှာ ကမ္ဘာ့ နိယာမ အတိုင်းပင် ထိုအနီးအနား တဝိုက်က ယောကျာင်္းလေး လူပျို လူလွတ်များက ထိုကျောင်းသူလေးအား ဝိုင်းကြိုက်ကြလေသည်။
နောက်မှ သိလာရတာက ထိုကျောင်းသူလေးမှာ ရုပ်လှရုံသာမဟုတ် သူ့မိဘများကလည်း သူတို့နယ်တွင် အလွန် ချမ်းသာသော လူများ ဖြစ်မှန်း သိလာရသည်။ နောက်ပြီး သူ တတ်နေသည့် တက္ကသိုလ်မှာလည်း အမှတ်နဲ့ခွဲသော စနစ်ကို ကျင့်သုံးသော မြန်မာပြည်တွင် ထိပ်တန်းနားတွင် ရှိသော တက္ကသိုလ်ဖြစ်သည်။ နံပါတ် ၁ လောက်တော့ မဟုတ် နံပါတ်စဉ်အရဆို ၃ လောက် ၄ လောက်ရှိသော တက္ကသိုလ်မျိုး ဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် အမှတ်နည်းသော ကျောင်းသား ကျောင်းသူများ တတ်လို့မရ။ သူ ကိုယ်တိုင်လည်း ဆယ်တန်းကို ထူးထူးချွန်ချွန့် အောင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ သူသည် သူ့ကျောင်းမှာလည်း စာတော်သူဟု သိရသည်။ သူ့ ဇတ်လမ်းလေးမှာ စိတ်ဝင်စားစရာလေး ဖြစ်သဖြင့် စာရေးသူ ထိုစဉ်က ဝတ္ထုရေးမည် ဆိုသော ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ သူ့ အိမ်ရှင်ဖြစ်သူ အပျိုကြီးမှာလည်း ရင်းနှီးသဖြင့် မေးထားခဲ့တာ ဖြစ်သည်။ အခု ဆောင်းပါးရေးလိုက်ရပြီ။
မိန်းမသားများ၏ အင်အားမှာ ရုပ်ရည် ပညာ ဥစ္စာဆိုပြီး သုံးခုရှိရာ ထိုကျောင်းသူလေးမှာ ကုသိုလ် ကောင်းလှသဖြင့် ရုပ်ရည်နဲ့ ပစ္စည်းဥစ္စာတွင် ရာခိုင်နှုန်းပြည့် ကောင်းမွန်ပြီး ပညာမှာလည်း ဂုဏ်ထူးမှတ် ရနေသည့် လူမျိုးဖြစ်သည်။ ဒီတော့ သူ့ကို ကြိုက်နှစ်သက်သည့် ပိုင်ဆိုင်လိုသည့် ယောကျာင်္းလေးများလည်း အများအပြား ရှိသည်ပေါ့။
ဒီတော့ သူ့အချစ်ကို ရအောင် ကြိုးစားကြသူ အမြောက်အများ ဖြစ်လာသည်။ အမြောက်အများ ဆိုပေမယ့် ယောကျာင်္းလေးများမှာလည်း သူ့အဆင့် ကိုယ့်အဆင့် တွက်နိုင်သူများ ဖြစ်သဖြင့် သူ့ကို လှမ်းဖို့အတွက် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အဆင့်မီသည်ဟု တွက်နိုင်သော ယောကျာင်္းလေးများက ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ကြိုးစားကြသည်။ သိပ်မမီသော ယောကျာင်္းလေးများကတော့ ငေးကြည့် မဝံ့မရဲ မျှော်မှန်းတာလောက်နဲ့ သိပ်သတ္တိရှိသူကတော့ အရဲစွန့်ပြီး စာပေးကြပေါ့။
အဲဒီမှာ ဖြစ်လာတာက ဒီကျောင်းသူလေးမှာ သူ့ကို ကြိုးစားသည်ဆိုသော လူငယ်ထဲက သူသတ်မှတ်ထားသော စံချိန်မီသည့် ယောကျာင်္းလေးများကို ပြန်တွဲလေ့ ရှိသည်တဲ့။ တွဲတယ် ဆိုပေမယ့် သူ့ အိမ်ရှင် မိန်းမကြီး အပြောအရတော့ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါပဲ။ တည်းခိုခန်းတွေ သွားခြင်းမျိုးတော့ မဟုတ်။ သူမသိတာလည်း ဖြစ်ချင် ဖြစ်မယ်ပေါ့လေ။
တွဲတယ် ဆိုတာက လမ်းတွဲလျှောက်တာ ကင်တင်းအတူထိုင်တာ ဘုရားအတူ သွားဖူးတာ ဒီလောက်ပါပဲတဲ့။ ရည်းစားများများ ထားတဲ့သူမို့ ဆိုတဲ့ သီချင်းလိုပေါ့လေ။ နောက်ပြီး သူ့မှာ နယ်တွင်လည်း ထိုကဲ့သို့ပင် သူ့စံချိန်နဲ့ ညီတဲ့ ချိတ်တိတ်တိတ် လူငယ်လေးများ ရှိသည်ဟု သိလာရသည်တဲ့။ သူ စိတ်လိုလက်ရ ရှိသော အခါမျိုးမှာ အခန်းဖော် မိန်းကလေးများနဲ့ အိမ်ရှင်တို့အား မိန်းမသား အချင်းချင်း ဖြစ်သဖြင့် ဓတ်ပုံများကို ပြလေ့ရှိသည် ဆိုပဲ။
ပြန်ပြောသူများ အဆိုအရတော့ အားလုံးမှာ ရုပ်ချောပြီး ပညာရေး ပြည့်စုံသူ လူငယ်တို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း နိုင်နင်းပြီး မိဘချမ်းသာသောလူတို့ ရာထူးရာခံလေးရှိသော တပ်မတော် အရာရှိတို့ စသည်ဖြင့် ရှေ့တတ်လမ်းကို စဉ်းစားနိုင်သော လူငယ်များ ဖြစ်သည်။ သူ့ စီမံကိန်းမှာ သူကိုယ်တိုင် အစစ အရာရာ ပြည့်စုံသူ ဖြစ်သဖြင့် ဒီလူများထဲက သူအကြိုက်ဆုံးလူကို စိတ်ကြိုက် ရွေးမည်ဆိုသော စီမံကိန်း ဖြစ်သည်။ ထိုသူများ လွတ်ထွက် မသွားရအောင်လည်း နယ်မှာ ရည်းစားတယောက်ထား ရန်ကုန်မှာလည်း တယောက် နှစ်ယောက်လောက်ထား ကျန်သူများကိုလည်း မျှော်လင့်ချက်တွေ ပေးထားပြီး အကဲခတ်နေပေါ့။
အမှန်မှာ စာရေးသူ သိသလောက် မြန်မာ မိန်းကလေးများမှာ ရည်းစားအဖြစ် ပြန်ပြီး အဖြေမပေးခင်ကတည်းက ချစ်ရေးဆိုသူ ယောကျာင်္းလေးကို သေသေချာချာ စဉ်းစားလေ့ရှိသည်။ တဘဝတာလုံး လက်တွဲရန် ရာခိုင်နှုန်း အတော်များသည်လို့ ယုံကြည်မှ ခုနပြောတဲ့ ရည်းစားအဖြစ် ပြန်တွဲကြတာ ဖြစ်သည်။ ဒါလည်း တယောက်တည်းသာ ဒီအခွင့်အရေးကို ရလေ့ရှိသည်။ စာရေးသူတို့ အချိန်က တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူ အများစုကို ရည်ညွှန်းတာ ဖြစ်သည်။ အခုတော့ ဘယ်လို အခြေအနေ ဖြစ်နေကြသည် မသိတော့။
အဲဒါ ထိုကျောင်းသူလေးမှာ ကျောင်းပြီးသွားသည့် အချိန်ကျတော့ ထိုကောင်လေးများထဲမှ သူအကြိုက်ဆုံး ကောင်လေးတယောက်ကို သူ့ကို လက်ထပ်ဖို့ ပြောသည်လို့ သိရသည်။ လက်ထပ်ဖို့ ပြောသည် ဆိုသဖြင့် သူတို့နှစ်ယောက် ချိတ်တိတ်တိတ်လောက် မဟုတ်တော့ပဲ ဒီထက်စောသော အချိန်ကတည်းက ကြိုက်နေတာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အဲဒါ ထိုယောကျာင်္းလေးက သူ့ကို ငြင်းသည်ဟု သိရသည်။ ဘယ်လို ငြင်းသနည်း ဘာအကြောင်းပြချက်ပေးပြီး ငြင်းသလဲတော့ ဘေးလူများ အနေနဲ့ မသိနိုင်။ ငြင်းခံလိုက်ရတာတော့ သေချာသည်။ နောက်တယောက်နဲ့ စေ့စပ်ဖို့ လုပ်တော့လည်း အဆင်မပြေတော့ဟု သိရသည်။
အငြင်းခံရသော အကြောင်းရင်းကို မမြင်ရပေမယ့် မှန်းလို့ ရပါသည်။ သူ့ရဲ့ ဒီအားနည်းချက် ကလေးကြောင့် ဖြစ်မှာ သေချာလှသည်။ ဒီကိစ္စမျိုး ဆိုတာက ရန်ကုန်မှာ
တွဲခဲ့သည် ကိစ္စကိုလည်း နယ်က လူက တဆင့်စကား တဆင့်နားနဲ့ ကြားနိုင်သည်။ နယ်က ကိစ္စကိုလည်း ရန်ကုန်က လူက ထိုနည်းဖြင့် သိနိုင်သည်ပဲ။
ဒီမှာတင် သူက အရွဲ့တိုက်ကာ သူ့ကို အရင်က ချစ်ရေးဆိုဖူးပြီး သူ့ စံချိန်နဲ့ မညီလို့ သူမတွဲခဲ့သည် ကောင်လေးတယောက်ကို သူ့ကို ခိုးပြေးရန် တိုက်တွန်းသည်တဲ့။ ထိုကောင်လေးကလည်း သူ့ အဆင့်နဲ့ဆို ကွာလှသည်ဖြစ်ရာ သိပ်မစဉ်းစားပဲ ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ခိုးပြေးသည်ဟု သိရသည်။ အဲဒီမှာတင် သူ့ မိဘနှစ်ပါးခမျာ ရင်ကျိုးရပါတော့သည်။ အချို့ကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံဟု ပြောကြလိမ့်မည်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ကျတော့ ကိုယ်သာလျှင် ခံရသည်မဟုတ် ကိုယ့်ကို မျှော်လင့်ထားသော ကိုယ့်မိဘများပါ ရင်ကျိုးရတာ ဖြစ်သည်။
စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ နိုင်ငံခြားက မိဘတွေကတော့ ဘယ်လို နေသည်မသိ။ မြန်မာမိဘ အများစုကတော့ ကိုယ့်သားသမီးကိုယ် မျှော်လင့်မှုလေးတွေ ကိုယ်စီ ရှိတတ်ကြသည်။ မိမိ သားသမီးက အရည်အချင်း ချို့ငဲ့သူလေး ဖြစ်နေရင်တောင် အိမ်ထောင်ကျရင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ဖူးစာဖက်နိုင်ဖို့ တိတ်တခိုး မျှော်လင့်တတ်သည်။
အစစ အရာရာ ပြည့်စုံသော သားသမီးကို ပိုင်ဆိုင်ရသည့် မိဘများကတော့ သူတို့ စိတ်ထဲတွင် မျှော်မှန်းချက်တွေ အရမ်းကြီးနေမှာ သေချာသည်။ ဦးဖိုးကျား၏ မင်းကတော် ဝတ္ထုထဲကလို သမီးလေး မင်းကတော် ဖြစ်ဖို့ မျှော်မှန်းနေသည့် အမေ၏ အဖြစ်မျိုးပဲပေါ့။
အချုပ်ကတော့ နောက်ဆုံး သိရသလောက် ထိုမိန်းကလေးမှာ မိဘနှစ်ပါး ရင်ကွဲပက်လက် ဖြစ်ရသလို သူကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်မချမ်းသာမှုကို ခံစားရသည် ဆိုသည်။ သူ စိတ်ကူးယာဉ်ထားသော အိမ်ထောင်ဖက်မျိုးတော့ သူ ဒီတသက် ရဖို့ မလွယ်တော့ပြီ။
အမှန်မှာ စာရေးသူ စဉ်းစားမိသလောက် ထိုမိန်းကလေးသည် မြန်မာမိန်းကလေး အများစု လုပ်လေ့ ရှိသည့်အတိုင်း ချစ်ရေးဆိုသူကို မတွဲသေးခင် စိတ်တိုင်းကျ အကဲခတ်မည်။ တယောက်ဆို တယောက် သတ်သတ်မှတ်မှတ် ထားမည် ဆိုပါက ကံအကြောင်း မလှသဖြင့် ချစ်ဦးသူနဲ့ အဆင်မပြေတောင် သူ့ကို လိုချင်သူထဲက နောက်တယောက်ကို ရလိမ့်မည်။ သူ၏ ပြည့်စုံမှုများမှာ သူ့ကို အားဖြည့်ထားပြီးသား ဖြစ်သည်။
အခုတော့ သူက လူများများ တွဲလိုက်သဖြင့် တကယ်ယူပါ ဆိုတော့ ယောကျာင်္းလေးများက မယုံတာရော စိတ်မချတာရော ပေါင်းပြီး အငြင်းခံလိုက်ရခြင်းပါပဲ။ ငါ့ကို နောက်ရော သစ္စာရှိပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်တာလည်း ပါမယ်လို့ ထင်မိသည်။
ထိုဇတ်လမ်းထဲက မိန်းကလေးမှာ အမှန်တော့ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် နေပါက သမ္မတကတော် ဖြစ်ချင်လည်း ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ သူ့ အပြုအမူက ထိုအသိုင်းအဝိုင်း ထဲမှာဆို ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိကလေးဟု ပြောရမည့် လူတောင် ဖြစ်ချင် ဖြစ်နိုင်သည်။ စာရေးသူလည်း အမေရိကန်နိုင်ငံ အကြောင်း မသိပါ။ ရုပ်ရှင်နဲ့ စာအုပ်အချို့က ဖိုမဆက်ဆံမှု အလွန်လွတ်လပ်သည်ဟု ပြောတုန်းက ဝါဒဖြန့်တာတွေဟု ထင်ခဲ့သည်။ အခု တကယ်နေတဲ့လူတွေ အပြောအရတော့ ကိုယ့် ပစ္စည်းနဲ့ကိုယ် ကာမအရသာ ခံစား စံစားတာ လူသားဆန်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းပါဟု အယူရှိကြသည် ဆိုတော့ စာအုပ်ထဲကအတိုင်း ဟုတ်နေမည် ထင်သည်။
ထိုမိန်းကလေးရဲ့ အပြုအမူမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆို ဘာမှမဟုတ်။ ဘယ်သူမှ သတိထားမိမှာ မဟုတ်သည့်အပြင် ရှာမှရှားသူလေးဟုပင် ဖြစ်လာစရာရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆိုခဲ့ပြီးသည့် အတိုင်း ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် ကာမအရသာ ခံစား စံစားနေသူများကြားတွင် သူက တွဲရုံပဲ တွဲခဲ့သည်ကိုး။
ဒါပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က ထားသည့် တန်ဖိုးချင်းမတူ။ ဒီတော့ ခံရပြီ။ ပြောလို့တော့ ရချင် ရနိုင်သည်။ ယောကျာင်္းလေးများ မှားသည်။ တွဲတုန်းက တွဲပြီး ဒီလိုတော့ မလုပ်သင့်။ မြန်မာ့စနစ်က မှားသည်။ အမေရိကန်စနစ်က မှန်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒါတွေက ကာယကံရှင်အတွက်တော့ ဘာမှ မဟုတ်တော့။ လက်တွေ့ကတော့ သူ စိတ်ကူးယာဉ် မျှော်လင့်ခဲ့သည်များ မဖြစ်နိုင်တော့ပြီ။ သူ နစ်နာရပြီ ဆိုသည့် အချက်ကို သိစေလိုခြင်း ဖြစ်သည်။
စာရေးသူ အမြင်အရ ထိုမိန်းကလေး သတိလွတ်သွားသည်မှာ သူ ရွေးချယ်ထားသော ယောကျာင်္းလေးများမှာလည်း အားသာချက် ကိုယ်စီရှိသူများ ဖြစ်ရာ သူတို့ဘက်ကလည်း သူတို့ ဇနီးလောင်းအတွက် စံများ ရှိမှာသေချာသည်။ ထိုစံများထဲတွင် အရှုပ်အရှင်း ကင်းသူဖြစ်ရေး ဆိုတာကလည်း ပါခဲ့မည် ထင်သည်။
စာရေးသူ အနေနဲ့ မိန်းကလေးများကို အကြံပြုချင်သည်မှာ လက်မထပ်ခင် လိင်ကိစ္စကို ရှောင်ပါတို့ ဘာတို့ ပြောလိုခြင်းမဟုတ်။ စဉ်းစားကြည့်ပြီး ကိုယ့်ကို နောက်ပိုင်းတွင် နစ်နာစရာ ဖြစ်လာနိုင်သည်ဟု စဉ်းစားမိလျှင် သတိထားဖို့သာ ဖြစ်သည်။
အမှန်မှာ သမီးရည်းစား သက်တမ်းနည်းနည်း ကြာပြီး တယောက်နဲ့ တယောက် ရင်းနှီးမှု ပိုလာသော အချိန်တွင် လိင်ကိစ္စ ဖြစ်လာစရာရှိသည်။ ယောကျာင်္းလေးများရဲ့ တောင်းဆိုမှုလို့ ပြောနိုင်ပေမယ့် အမှန်တော့ မိန်းကလေး ကိုယ်တိုင်ကလည်း ထိုအချိန်တွင် စိတ်ယိုင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ နစ်နာစရာရှိလျှင် ယောကျာင်္းလေးထက် မိန်းကလေးဘက်က နစ်နာမှု ပိုများသဖြင့် အတတ်နိုင်ဆုံး ဆင်ခြင်ပါဟုသာ တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
မိန်းကလေးများ အနေနဲ့တော့ ရည်းစားမထားခင် အတတ်နိုင်ဆုံး သေသေချာချာ အကဲခတ်ပြီးမှတွဲ ခရီးလွန်ချင်သည်ဆိုလည်း ကိုယ့်ကို ယူဖို့ သေချာသလားဆိုတာ အကဲခတ်ပြီးမှလွန်ကြ။ မလွန်အောင် ထိန်းနိုင်ရင်တော့ ပိုကောင်းသည်လို့ စာရေးသူ ထင်ပါသည်။ စီးပွားရေးသမားတွေ ပရိုမိုးရှင်းဆိုပြီး မြှောက်ပေးတိုင်း စင်ပေါ်တတ်ပြီး ဒါကျမ ချစ်သူပါပဲဆိုပြီး အော်တော့မည်ဆိုရင်တော့ စဉ်းစားဦး။ သေချာရဲ့လားလို့။ ဒီသကောင့်သားနဲ့ အဆင်မပြေတော့ဘူး ဆိုရင် ဒါက သမိုင်းကျန်ရစ်ပြီ ဖြစ်သည်။
တကယ်လို့ မတတ်သာပြီ ဆိုလျှင်တော့ အတတ်နိုင်ဆုံး သိုသိုဝှက်ဝှက်သာ လုပ်ပေတော့ဟု အကြံပေးလိုသည်။ ဘယ်လောက်ပဲ လျှို့ဝှက်သည်ဆိုဆို ဒီလို ကိစ္စမျိုးကတော့ ပေါ်လာတတ်သည် ဖြစ်ရာ သိပ်တော့ စိတ်မချရဟု ထင်ပါသည်။
တချို့က နိုင်ငံခြားမှာ ဒီလို လုပ်တဲ့ မြန်မာမလေးတွေ အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ရပါတယ်ဆိုတာနဲ့ မယုံလေနဲ့။ အသိုင်းအဝိုင်းချင်း မတူသဖြင့် သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇတ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်က ဒီလို နေချင်သည် ဆိုလျှင်တော့ အဲဒီနေရာရောက်အောင် အမြန်ဆုံးကြိုးစား။ ဒါမှမဟုတ် မြန်မာပြည်မှာလည်း အဲဒီလို အတွေးအခေါ်မျိုးတွေ အားလုံး ရှိလာတဲ့အထိ ဘာမှ မလုပ်ပဲ စောင့်နေပေါ့။ အထက်ပါအတိုင်း မလုပ်နိုင်သေးဘူး ဆိုရင်တော့ ကိုယ်နေရာတဲ့ နေရာက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနဲ့ အတတ်နိုင်ဆုံး ကိုက်ညီအောင်နေဟု ဆိုရန်သာ ရှိပါသည်။
စာရေးသူ အထင်တော့ မြန်မာယောကျာင်္းလေးများ အရှုပ်အရှင်းကင်းသူ မိန်းကလေးကို ပိုနှစ်သက်သည့်စံမှာ တော်တော်နဲ့ ပြောင်းမှာမဟုတ်လို့ ထင်သည်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဒါက ဘယ်အစိုးရမှ ဥပဒေ ပုဒ်မကြီးနဲ့ သတ်မှတ်ထားတာ မဟုတ်။ လူက ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အတွင်းစိတ်ထဲမှာ သတ်မှတ်ထားသည့် စံဖြစ်ရာ ဘယ်သူမှ အတင်းအကျပ် ပြောင်းလို့ မရပေ။ လက်ရှိ လူပျိုပေါက် ဖြစ်နေသူ ကောင်လေးများကို တောက်ကြည့်တော့လည်း သူတို့ ဒီစံနှုန်းကို ဒီအတိုင်း လက်ခံထားဆဲ ဆိုတာ သိလိုက်ရသည်။ ဒါဆို လာမည့် နှစ်ပေါင်း နှစ်ဆယ်အတွင်းတော့ ပြောင်းမှာမဟုတ်လို့ တွက်နိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
ယောကျာင်္းလေးများက ထိုစံနှုန်းအတိုင်း လက်ခံထားဆဲ ဆိုလျှင် သားရှင်မိဘများလည်း ထိုစံနှုန်းကို ကိုင်ထားမည်မှာ သေချာသည်။ ဘယ်သူမှ ကိုယ့်သားကို အရှုပ်အရှင်းမကင်းသည့် မိန်းကလေးနဲ့ လက်ထပ်တာကို သဘောကျတော့မှာ မဟုတ်။ ကန့်ကွက်တော့မှာ သေချာသည်။
ပြောလို့တော့ ရသည်။ ဒါက ယောကျာင်္းမိန်းမ တန်းတူညီမျှမှု မရှိတာ သက်သက် မတရားတဲ့ ကိစ္စလို့ ထင်စရာရှိသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်လာစေသော အကြောင်းများ ရှိပါသည်။ သေသေချာချာ မစဉ်းစားမိလို့ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ အခု ပြောမည့် အချက်များသည် ဘယ်စာအုပ်ထဲတွင်မှ စာရေးသူ မဖတ်ဖူးပါ။ စဉ်းစားမိသည်တို့ကို ရေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရေးရတာ ဝန်လေးလေးနဲ့ ရေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာ မိန်းကလေးများ ထိုအချက်ကို မစဉ်းစားမိဟုတောင် ထင်ပါသည်။ ဘာလို့ ယောကျာင်္းလေးတွေက အပျိုစစ်စစ် ဖြစ်မှလို့ တောင်းဆိုခွင့် ရှိနေရတာလည်း ?။ စဉ်းစာလို့ မရရင် ဆက်ဖတ်ကြည့်ပါ။
ပထမဆုံး အချက်မှာ လစ်ဗင်းတူဂဲသားကို လက်ခံလိုသော အဖွဲ့၏ အကြောင်းပြချက်များကို ဖတ်ကြည့်သောအခါ သမီးအတွက် အားကိုးလောက်စရာ ရှာရမည်ဆိုသော အချက်ကို သွားတွေ့သည်။ အဓိက လိုချင်သည်မှာ သမီးအတွက် ဘဝလုံခြုံမှုပေးရန် (ဝါ) ချမ်းချမ်းသာသာ ထားနိုင်ရန် ဖြစ်သည်။ ခိုင်းနွားကောင်းကောင်း ရှာရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောတောင် ပါပါသည်။ မြန်မာအမျိုးသမီး အများစု ခင်ပွန်းရွေးတာလည်း ထိုစံကိုပင် အဓိက ကိုင်ပါသည်။
စာရေးသူ နားလည်သလောက် မြန်မာအမျိုးသမီး အများစုမှာ ကိုယ်ဘယ်လောက် ချမ်းသာသည် ဖြစ်ဖြစ် ပညာတတ်သည် ဖြစ်ဖြစ် လင်ယောကျာင်္းအပေါ် မှီခိုလိုသော သဘောထား အပြည့် ရှိပါသည်။ မိန်းမပီသသော စိတ်ထား ဖြစ်သဖြင့် စာရေးသူ သဘောတောင် ကျမိပါသည်။
စာဖတ်နေသော မြန်မာမိန်းကလေးများ ခဏရပ်ပြီး ဟုတ် မဟုတ် စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အားကိုးရချင်လို့ ယောကျာင်္းယူတာလို့တောင် ပြောတတ်ကြပါသည်။ အိမ်ထောင်ရှိပြီးသား အမျိုးသားများလည်း စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်ဇနီးသည်က ကိုယ့်ကို အားကိုးလို့ ယူတာ ဟုတ် မဟုတ်။ ထို အားကိုးချင်သော အဓိပ္ပါယ်ပါသော စကားမျိုးကို တကြိမ် သို့ နှစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် အကြိမ်ကြိမ် ပြောဖူးပါလိမ့်မည်။ စကတည်းက အိမ်ထောင်အတွက် ငွေရှာပေးရေး ဆိုသော အရေးကြီးသည့် တာဝန်ကြီးကို အမျိုးသားများ လက်ထဲ ထည့်လိုက်ပေပြီ။
အဲဒီမှာ စတာပါပဲ။ ကိုယ်က သူ့ကို ကိုယ့်စံနှုန်းနဲ့ အကဲဖြတ်မှတော့ သူကလည်း သူကိုင်ထားသော စံနဲ့ ပြန်ကြည့်ပါတော့မည်။
စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ ခင်ဗျာ။ အိမ်ထောင်ရေးမှာ တခါတရံ အရောင်းအဝယ် သဘောလည်း ပါပါသည်။ ကိုယ်က တဘက်လူကို ကိုယ့်ကုန်စည်ကို ဈေးနှုန်းမြင့်မြင့် ထားလိုက်ကတည်းက တဘက်လူကလည်း သူ့စံ သူ့အကြိုက်နဲ့ ညီ မညီ ကြည့်ခွင့် ရသွားပါပြီ။ ကိုယ်က ဈေးနှုန်း မြင့်မြင့်တောင်းရင် တဘက်လူကလည်း ပေးရတာ တန်ရဲ့လား ဘရန်းဒက် စတန်းဒက်ရော ဟုတ်ရဲ့လား ဘရန်းနယူးရော ဟုတ်ရဲ့လား good second-hand ခေါ် သုံးပြီးသားပစ္စည်းကို သူ့ကို အသစ်ပုံစံနဲ့ ညာရောင်းနေတာလား လားပေါင်းများစွာနဲ့ ကြည့်မှာ သေချာသည်။
ရော့ ဒီ Laptop က ဘရန်းဒက် စတန်းဒက် အမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ခြောက်လလောက်တော့ သုံးပြီးပါပြီ။ အားလုံးကောင်းပါသေးတယ်။ အသစ်ဈေးတော့ ပေးပါလို့ တောင်းရင် ဝယ်သူက ပေးမည် ထင်ပါသလား ခင်ဗျာ။ လုံးဝမရပါ။ တပတ်ရစ်ဈေးသာ ရလာစရာ ရှိပါသည်။
အမှန်တော့ စာရေးသူ အနေနဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးများ ခင်ပွန်းသည်ကို အားကိုးချင်စိတ်ကလေး ရှိတတ်ကြသည်ကို အပြစ်မတင်ပါ။ သဘောတောင် ကျမိပါသည်။
ဆိုလိုချင်သည်က မြန်မာမိန်းကလေးများ အတွက် ဘဝ လုံခြုံမှုပေးနိုင်သော အိမ်ထောင်ဖက် ဆိုသည်မှာ အဓိက စံဖြစ်သကဲ့သို့ ယောကျာင်္းလေးများအတွက်လည်း တတ်နိုင်သမျှ အရှုပ်အရှင်းကင်းသော မိန်းကလေးကို လိုချင်သည်မှာ အဓိကစံ ဖြစ်နေပါသည်။
နိုင်ငံခြား အမျိုးသမီးများတော့ စာရေးသူ မသိပါ။ ကြားဖူးတာတော့ ကိုယ်ပိုင် ဘဏ်ကဒ်ဖြင့် နေကြသည်လို့ ကြားဖူးပါသည်။ သူ့ကဒ်ကို ခင်ပွန်းလည်း ထိလို့မရ။ ခင်ပွန်းသည်၏ ဘဏ်ကဒ်ကိုလည်း သူမထုတ်လို့ ကြားဖူးပါသည်။ ဒီအတိုင်း အမှန်ဆိုရင် သူတို့ ကြည့်ရတာ လင်ယောကျာင်္းကို မြန်မာမိန်းကလေးတွေလောက် အားမကိုးသလို မှီလည်း မမှီခိုပဲ ဟိုဟိုဒီဒီ ကိစ္စများအတွက် အဖော်အဖက်လောက်ပဲ သဘောထားသလားတောင် မသိပါ။ ဒီတော့ သူတို့ ယောကျာင်္းကလည်း သူတို့ဆီမှ တောင်းဆိုခွင့် နည်းသွားပါပြီ။
မြန်မာအမျိုးသမီးများကျတော့ လက်ထပ်လိုက်တာနဲ့ အိတ်ကိုင် အခွင့်အရေး ခေါ် နိုင်ငံခြားသားများပင် အံ့သြသော ခင်ပွန်းသည်၏ ဝင်ငွေများကို ထိန်းချုပ်ပိုင်ခွင့် တရားဝင် ရသွားပါပြီ။ နိုင်ငံခြားရှိ ပညာတတ် မြန်မာမိန်းကလေးများပင် ခင်ပွန်းသည်၏ ဘဏ်ကဒ်ကို ထိန်းချုပ်သည်ကို တွေ့ဖူးပါသည် ခင်ဗျာ။ ဆိုတော့ နိုင်ငံခြားက စနစ်တွေကိုချည်း လှမ်းကြည့်မနေနဲ့။ ကိုယ်တိုင်လည်း နိုင်ငံခြားက လူတွေနဲ့ ကွာသော အနေအထားများ ရှိတာကို သဘောပေါက်စေချင်တာသာ ဖြစ်သည်။
အိမ်ထောင် မကျခင် လိင်ကိစ္စကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် လုပ်တာကတော့ မြန်မာမိန်းကလေးများ အတွက် တချိန်တွင် အန္တရယ် ဖြစ်လာနိုင်ကြောင်း သိသာလောက်ပါပြီ။
LT ကိစ္စကို ဆက်ပြီး စဉ်းစားကြည့်လျှင် မင်္ဂလာမဆောင်ပဲ အတူနေကြသည် ဆိုပါစို့။ မြန်မာ့ထုံးစံအရ အသိသက်သေ ရှိသည်နဲ့ လင်မယားအရာ မြောက်ပြီ ဆိုသဖြင့် ငွေရေးကြေးရေးအရ မင်္ဂလာပွဲ မလုပ်သေးပဲ လင်မယား အဖြစ်နေသည် ဆိုပါစို့။ တကယ်တော့ မင်္ဂလာပွဲကို ခမ်းခမ်းနားနား ကျင်းပလိုသည်မှာ ယောကျာင်္းလေး မဟုတ်ပဲ မြန်မာမိန်းကလေးများ ဖြစ်ပါသည်။ ဟုတ် မဟုတ် ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ။ အိမ်ထောင်ကျဖူးသော အမျိုးသားများလည်း သိမည် ထင်ပါသည်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မြန်မာ့ထုံးစံအရ ကုန်ကျငွေကို ယောကျာင်္းလေးဘက်က ကျခံရသဖြင့် ခမ်းခမ်းနားနား လုပ်လိုသည်မှာ မိန်းကလေးဘက်ကသာ ဖြစ်လေ့ ရှိပါသည်။ တခါတရံ တသက်မှာ တခါ အိမ်ထောင်ပြုရတာမို့ ဒီလောက်တော့ လုပ်မှာပေါ့ ဆိုတာတောင် ပြောတတ်သေးသည်။
အဲဒီ မင်္ဂလာပွဲ မလုပ်ချင်တဲ့ ကိစ္စကတော့ မိန်းကလေးဘက်က သိပ်ပြီး အတင်းအကျပ်ဆိုလျှင် အမျိုးသားများဘက်မှ ငြင်းမှာ မဟုတ်လို့ ထင်ပါသည်။ မိန်းကလေးများ ဘက်ကလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ထိုကဲ့သို့ ဖြစ်စေချင်သလားဟု စဉ်းစားကြည့်နိုင်သည်။ စာရေးသူတော့ မထင်မိပါ။ ကိုယ့် မင်္ဂလာပွဲကို အပေါင်းအသင်း ဆွေမျိုးများကြားတွင် ထည်ထည်ဝါဝါ လုပ်လိုခြင်းဟူသော စံမှာ မြန်မာမိန်းကလေးများ စိတ်ထဲတွင် ခိုင်ခိုင်မာမာ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။ တကယ် ထိုအစီအစဉ် လုပ်ဖြစ်လျှင် ကန့်ကွက်သူမှာ မိန်းကလေးများ ပိုများနိုင်ပါသည်။
ယခု ပြောလိုသော အချက်များသည် မြန်မာပြည်တွင်နေသော မိန်းကလေးများ အတွက်သာ ဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားမှာ နေရသည် ဆိုလျှင်လည်း မြန်မာပြည်က ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ မကင်နိုင်သူများလည်း ပါပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ လင်မယား အနေနဲ့ မဟုတ်ပဲ အစမ်းသဘော ပေါင်းသင်းကြည့်မည် ဆိုပါတော့။ ဒါလည်း သိပ်တော့ မထင်လှပါ။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း သေသေချာချာ လေ့လာနိုင်သည် ဟူသော အားသာချက်တော့ ရှိပါသည်။ အတူနေကြည့်ပြီး လေ့လာနိုင်သည် ဆိုသဖြင့် ရည်းစားဘဝ လေ့လာမှုများ မလုပ်တော့ဟု စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ထိုအစီအစဉ် လုပ်လျှင် တကယ် ရင်ပူရမှာက မိန်းကလေးဘက်က ပိုများပါသည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အမျိုးသားတွင် ကိုယ်မကြိုက်သော အချက်များတွေ့လို့ သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီ ဆိုပါတော့။
သို့ဆိုလျှင် မြန်မာ့လူဘောင် စံနှုန်းအရ ထိုမိန်းကလေးမှာ တခုလပ် တလင်ကွာ အဖြစ်သာ သတ်မှတ်ခံရပါတော့မည်။ လူတယောက်နဲ့ ခြောက်လလောက် တနှစ်လောက် အတူတူနေတာကိုလည်း ပတ်ဝန်းကျင်က မသိအောင် အပေါင်းအသင်းတွေ မသိအောင် အုပ်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါ။ တန်ဖိုး လျော့သွားပါပြီ။
နားနဲ့မနာ ဖဝါးနဲ့နာပါ ခင်ဗျာ။ သားအိမ်မကလို့ ဘာပဲ ခြစ်ထုတ် ခြစ်ထုတ် အကြောင်းမထူးတော့ပါ။ မှတ်တမ်းဝင်သွားပါပြီ။
ဘယ်လိုမှ သူ နောက်တကြိမ်တွင် မျှော်လင့်သော အိမ်ထောင်ဖက်ကို ရဖို့ မလွယ်တော့ပါ။ ဆိုပါတော့ နောက်တခါဆိုလျှင် ချမ်းတော့ ချမ်းသာမည်။ သို့သော် အသက်ကြီးသော မုဆိုးဖို ယောကျာင်္းကြီး ကိုယ့်မိဘထက်ပင် အသက်ကြီးသေးသည် ဆိုတာမျိုး ဖြစ်လာစရာ ရှိပါသည်။ ထိုသို့ ဖြစ်လျှင် နှစ်သက်ပါ့မလား ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်မေးနိုင်ပါသည်။
စာရေးသူကတော့ မြန်မာမိန်းကလေးများ အတွက် တွဲမယ့် ရည်းစားကို မတွဲခင်ကတည်းက သေသေချာချာရွေး ရည်းစားဘဝမှာလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး အကဲခတ် သေချာပြီဆိုလျှင် မိဘကိုပါ အကဲခတ်ခိုင်းပြီး ယူတဲ့ စနစ်က ရာခိုင်နှုန်းပြည့် စိတ်မချရ ဆိုပေမယ့် LT စနစ်ထက်တော့ မြန်မာ မိန်းကလေးများအတွက် လုံခြုံမှု ပိုပေးနိုင်ဆဲလို့ ထင်ပါသည်။
အမှန်တော့ စာရေးသူ စိတ်ထင် အိမ်ထောင်ရေးမှာ အလောင်းအစား သဘောလည်းပါပြီး(၂၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) ရာနှုန်းပြည့် စိတ်ချရဖို့တော့ မလွယ်ဟု ထင်ပါသည်။
တကယ်က လူ့သမိုင်းတွင် လက်ထပ်မှုနဲ့ ပက်သက်ပြီး လူမျိုးနဲ့ နေရာဒေသအလိုက် စံအမျိုးမျိုး ရှိသည်။ ကိုယ့်ဘာသာကြိုက်လို့ယူတာ ကိုယ်ကြိုက်တာကိုပဲ မိဘကပါ ဝိုင်းအကဲဖြတ်ပြီး ယူတာ မိဘရွေးပေးတာကိုပဲ စိတ်ချလက်ချ ယူတာ အခု ပြောသွားသလို အစမ်းသဘော ပေါင်းကြည့်ပြီးမှ ယူတာ အပြင် နောက်ထပ်လည်း တကယ် လေ့လာရင် စံနှုန်း မြောက်မြားစွာ ရှိသေးသည်။
အမှန်မှာ စနစ်တိုင်းတွင် ကောင်းကွက်များ ဆိုးကွက်များ ရှိပြီးသား ဖြစ်သည်။ ပိုသိသာအောင် လစ်ဘရယ် ဒီမိုသမားများ ကြိုက်မည် ထင်ရသော စနစ်တချို့ကိုလည်း တင်ပြပါမည်။ ရှေးရိုးစွဲအဖွဲ့ကတော့ ရိုးရိုးပဲ ရှေးတုံးက သူတို့ လူ့အဖွဲ့အစည်းက လုပ်ခဲ့သော စည်းကမ်းများအတိုင်း သွားမည်ဟု ဆိုချိန်တွင် လစ်ဘရယ် အုပ်စုအနေနဲ့က ယာဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံဆိုတာ ခေါက်ထားပြီး ကိုယ့်အတွက် စီးပွားရေးအရ အခြားအချက်များအရ အဆင်ပြေရင်တော့ ထုံးစံမရှိလည်း ကျင့်သုံးမယ်ဆိုတာက ထင်ရှားလို့ ဖြစ်သည်။ အခု တင်ပြမည့် စနစ်များကတော့ ရှေးရိုးစွဲအဖွဲ့က ဗဟုသုတ အနေနဲ့သာ ဖတ်ပြီး လစ်ဘရယ်ဒီမို အဖွဲ့ကတော့ သုံးသင့် မသင့် စဉ်းစားဖို့ ဖြစ်သည်။
စာရေးသူကတော့ လုံးဝ မသုံးပါ။ တကယ့်ကို ကွန်ဆာဗေးတစ် တဦး ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ စနစ်ကို လစ်ဘရယ် ဆိုသူများ နှစ်သက်လိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
ကိုယ်ကျင့်တရားစံနှုန်းများတွင် လူ့အဖွဲ့အစည်း တခုနဲ့တခု မတူတတ်သဖြင့် အလွန်လည်း ကျယ်ပြန့်သလို တခါတရံ ဘယ်သူက မှန်တယ်ဆိုတာ ပြောရခက်သည်။ လူအများ အသိနည်းသေးသော အခြား အိမ်ထောင်ရေးစနစ် တခုမှာ မိန်းမတဦးတည်းက လင်များစွာယူသော ပိုလီယန်ဒရီ(Polyandry) စနစ်ဖြစ်သည်။ ထိုစနစ်ကို တိဗက် အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းနဲ့ အက်စကီမိုးတို့ နေထိုင်ရာ ဒေသများတွင် ကျင့်သုံးခဲ့သည်။ ကလေးတဦးသည် အဖေတယောက်ထက်ပိုပြီး ရှိနိုင်ခွင့် ရှိသည်ဆိုသော အဖွဲ့အစည်းများတွင် ထွန်းကားခဲ့သည်။
ကောင်းကွက်များကိုသာ ရှာကြည့်မည်ဆိုလျှင် ဒီစနစ်တွင်လည်း ကောင်းသော အချက်များကို တသီကြီး တွေ့ရသည်။
ပထမအချက်မှာ မိန်းကလေး တဦးသည် လင်ယောကျာင်္း များစွာ ရှိသဖြင့် တယောက်တည်း အပေါ် မှီခိုနေရခြင်းမှ လွတ်ကင်းစေသည်။ ငွေရေးကြေးရေးအရ အထောက်အပံ့များကို ပိုပြီး ရရှိစေသည်။ အိမ်ထောင်အတွက်လည်း ပြည့်စုံစေသည်။
ဒုတိယမှာ မွေးလာသော ကလေးသည် အဖေများစွာ ရှိသဖြင့် ထောက်ပံ့မယ့်လူ များစွာရှိသည်။ မပူမပင်ရပေ။ အဖမဲ့သားဟု အပြောဆို ခံရစရာ အကြောင်းလုံးဝ မရှိပေ။
တတိယမှာ လူဦးရေကို ထင်သလို အတိုးအလျှော့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အထူးသဖြင့် တရုတ်ပြည်လို မိန်းကလေးရှားပါးသော နိုင်ငံများနဲ့ ဒီစနစ်မှာ အလွန်သင့်တော်သည်။ မိန်းကလေးတဦးလျှင် လင်ယောကျာင်္း ငါးယောက်နဲ့ အထက် တာဝန်ယူထားသဖြင့် တရုတ်ပြည်လို နိုင်ငံမျိုးတွင် အမျိုးသားများ အိမ်ထောင်ဖက် ရှားပါးခြင်း သူများနိုင်ငံမှ မိန်းကလေးများကို ပြန်ပေးဆွဲသလို တင်သွင်းရလို့ နာမည်ပျက်ခြင်း စသည်များ လုံးဝ မဖြစ်နိုင်။
နောက်ပြီး လူဦးရေ များသော နိုင်ငံများတွင် အမျိုးသားတဦးလျှင် တအိမ်ထောင်လုပ်ပြီး ကိုယ်ပိုင် သားသမီး မွေးကြပါက တအိမ်ထောင် နှစ်ယောက်ဆိုရင်တောင် ငါးအိမ်ထောင်ဆို ဆယ်ယောက်လောက် ဖြစ်သွားပြီ။ လူဦးရေ ပေါက်ကွဲမှု ဖြစ်မည်။ အခုဆို အမျိုးသား ငါးယောက်လောက်ကို တအိမ်ထောင် ဖြစ်သဖြင့် ကလေးနှစ်ယောက်လောက် မွေးပြီး အဖေငါးယောက် ဆိုပါက နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အဆင်ပြေမည်။
လူဦးရေ လိုအပ်နေသလား။ ဒါဆိုလည်း လင်ယောကျာင်္းတိုင်း အတွက် သီးသန့်ကလေးများ မွေးလို့ရသည်။ ဒီခေတ်မှာ ဆေးပညာ တိုးတတ်နေသဖြင့် ထုံဆေး ထိုးထားပါက ကလေးမွေးရင်းပင် ဖုံးပြောလို့ ရနေပြီ ဖြစ်သည်။
လိင်ဆက်ဆံဖက်များလို့ ရောဂါဖြစ်မှာ ကြောက်ပါသလား။ ကာကွယ်ဆေး ထိုးထားရုံနဲ့ သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ လုံးဝမဖြစ်နိုင်။ တသိန်းလောက် အကုန်ခံလိုက်ရင် ရပြီ ဖြစ်သည်။
နောက်တချက်မှာ အမျိုးသားများ ရည်းစားလုဘက် ဖြစ်ပြီး မုန်းကြသည် ဆိုတာမျိုး လုံးဝ မဖြစ်နိုင်။ အတူနေ အတူစား ညီလေး အကိုကြီး စနစ် ဖြစ်သဖြင့် အမျိုးသား စည်းလုံညီညွှတ်မှုကို တည်ဆောက်ပြီးသား ဖြစ်သည်။
နောက်တချက်မှာ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ တကယ်ကို ညီညွှတ်သည်။ အမျိုးသမီးများ ကိုယ့်ခန္ဓာနဲ့ကိုယ် သုံးစွဲ ခံစားသည်ကို မည်သူကမျှ ပိတ်ပင်လို့ မရပေ။
ဖတ်ကြည့်ပြီး မည်သို့ နေပါသနည်း။ ကောင်းကွက်များ တွေ့သဖြင့် သုံးသင့်သည်ဟု ထင်ပါသလား။ ကွန်ဆာဗေးတစ်များ သုံးမည် မဟုတ်သည်မှာ သေချာသည်။
နောင်တွင် ဒီစနစ် ကောင်းလှသဖြင့် သမီးလေး အရွယ်ရောက်ရင်တော့ ပိုလီယန်ဒရီ စနစ်ကို ကျင့်သုံးစေမည် ဆိုသည့် လစ်ဘရယ် သမီးရှင်များ ထွက်လာလိမ့်မည် ထင်ပါသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ ကိုယ်ကျင့်တရားစံများ မတူသည်ကို သိစေလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူများ ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတိုင်း ကိုယ်ကျင့်သုံးလို့ မရတာကို သိစေလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖတ်ကြည့်ပြီး အတွေးပွားကာ အချင်းများကြပါကုန်။
ကိုရင်စံ ကျောက်စ်ပြန်လာမယ် ၊ ဆိုသဘောပြောရရင် ကျနော့မှာတူမလေးတွေရှိလို့ အဲဒီလောက်သဘောထားမကြီးပါ ။ နောက်ပြီး …အသေအချာမန့်ရမှာမို့ ပြန်လာပရစေ ။
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးကျောက်ခဲရေ ပြန်လာမှာကို ကြိုဆိုပါတယ်။
စာတွေက ရှည်လို့ပဲလား ကွန်မန့်တွေက ရှည်လို့ပဲလား ကျုပ်ကြည့်နေတဲ့ ကွန်ပျူတာကပဲ မကောင်းလို့လာတော့ မသိဘူး။ အောက်ကကွန်မန့်တွေ ထပ်သလို ဖြစ်နေပြီး ကြည့်ရတာ သိပ်မကောင်းဘူး။ ကူညီလို့ရရင် မော့မော့တို့ ကူညီကြပါဦး။
စာတွေလည်းရှည်.. ကော်မန့်လည်းရှည်မို့.. ကျုပ်ကွန်ပြူတာထဲလည်း.. စာထပ်ကုန်ပါသဗျ..
ကြီး၁ကြီးရဲ့စာတွေများ… ဒီလို.. ဒီလိုလူစိတ်ဝင်စားချက်…။ :buu:
တမင်လုပ်တာနေမှာဗာဗျာစ်.. ရှင်းနေတာပဲ… သဂျီးဇုတ် မာမွတ်ခိုမ် ခီဗျားဂို အရှင်မထားဗူး.. သတ်မယ်… ကစံလှဂျီးဂို ထိရဲထိကြည့်.. ဗေထိဗေထိ ဗေပုံထိ..
ခေတ်တွေစံနစ်တွေက ပြောင်းလာပြီဆိုတော့ LT ကိစ္စက ရှောင်လွှဲလို့ မရတော့ပါဘူး ။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဟိုးအရင်ကလို အဖေ့လုပ်စာနဲ့ တစ်မိသားစုလုံး ထိုင်စားလို့မလောက်တော့ အရွယ်ရောက်ရင် လူ့ဘုံခန်းဝါမှာ လူမှန်ရင် အလုပ်လုပ်ရတော့တာပဲ ။ အဲသည့်မှာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကလည်း နီးစပ် ၊ ရုပ်ဝထ္ထူတွေကလည်း အများကြီးတိုးတက်လာတယ်ဆိုတော့ အဲသည့် LT ကြီးက စ လာတော့တာပဲ ။ ဟိုခြုံဒီခြုံတိုးတာ ၊ တည်းခိုခန်းမှာ ဆက်ရှင်အတူနေကြတာတော့ လုံးဝအားမပေးပါဘူး ။ ဖြစ်နိုင်ရင် တိုက်ခန်းငှါး အတူတူနေ ၊ သေချာရင် နှစ်ဦးသဘောတူ လက်မှတ်ထိုးထား ၊ ပိုက်ဆံစု (မင်္ဂလာဆောင်ဖို့ ၊ အိမ်ထောင်ပစ္စည်း) ၊ ဘဝအတွက် အတူတူပြင်ဆင်ကြတာ နားလည်ပေးလို့ ရပါသေးတယ် ။ ဒါကလည်း ခေတ်ကြီးကပြောင်းလာပြီဆိုတော့ အဲသလို Adjust မှ မလုပ်ရင် အရွယ်တွေလွန် ကုန်ကြပါလိမ့်မယ် ။ နောက်ပြီး အချိန်အကြာကြီးဆွဲထားရင်လည်း သွေးအေးကုန်ကြပါလိမ့်မယ် ။ ကံထမ်းလာတာမြင်ရတာမဟုတ် ၊ မိဘများက Demand များ ၊ စွက်ဖက်လွန်းရင်လည်း ပျက်တတ်ပါတယ် ။
တကယ်တမ်းဆို LT နေတာက မိန်းခလေးတင်မဟုတ် ၊ သေသေချာချာမလေ့လာရင် ယောက်ျားလေးလည်း ဆူးကျိုးပါတယ် ။ အဲသည်တော့ နှစ်ပေါက်အောင် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးလေ့လာ ၊ ဖြစ်နိုင်ပြီ ၊ လက်တွဲနိုင်ပြီဆိုမှ ရှေ့ဆက်ဖို့သင့်ပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ တစ်ဦးကိုတစ်ဦးမလေ့လာမိလို့ ပြဿနာတက် အိမ်ထောင်ပျက်ကြတာတွေ အများကြီးတွေ့ဖူးပါတယ် ။ လေ့လာတယ်ဆိုတာ အတူနေပြီးမှပဲ လေ့လာလို့ရတာမဟုတ်ပါဘူး ၊ လူကဲခတ်ကြည့်ရင် ၉၀% လောက် သိပါတယ်ခင်ဗျ ။ စကားစပ်မိလို့ပြောရရင် ကျောက်စ်ပင်ပန်းပြီးအိပ်ရင် ဟောက်တတ်တာ ဂွဇက်ကဘော်ဘော်တွေလည်းအသိ ၊ သူမလည်းအသိပါ (ညတိုင်း ဖုန်းပြောတာကိုး) ။ တစ်နှစ်လောက် တစ်ဦးကိုတစ်ဦးလေ့လာအပြီး ဒယ်ဒီပါပါးချစ်ဖေဖေနဲ့သွားတွေ့တော့ လက်မခံနိုင်တာဘာရှိလဲလို့ သူ့သမီးကို မေးပါတယ် ။ အိပ်ရင်ဟောက်တာမကြိုက်ဘူးဆိုတော့ “သမီး လင်စံရွေးလွန်းရင် လင်ခွေးနဲ့ညားတတ်သတဲ့ ၊ ၇၀% လောက်လက်ခံနိုင်ရင် ယူလို့ဖြစ်တယ် ။ နောင်ဆို ဖေ့သမီးအိပ်ရာဝင်လို့ ဟောက်သံမကြားရရင် အိပ်မပျော်ဖြစ်နေမယ်” တဲ့ ။
အနှစ်ချုပ်ရရင် Commitment ရှိတဲ့ LT ကို နားလည်ပေးလို့ရပါတယ် ။ ဒါပေသည့် ငါ့ဟိုသင်းနဲ့ငါ ၊ ငါ့ဟာငါ ဘာလုပ်လုပ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ “က်ျား ကြွက်ပျင်းတွေ ခေတ်စားအောင်စောင့်ပါ”လို့ ။ နောက်ပြီး ဂွဇက်ကနှမများကို သတိပေးလိုတာက ၊ ဟိုလိုသည်လိုပြော Commitment မရှိပဲ ကာမကိုအတင်းတောင်းဆိုရင်တော့ အဲသည့်ယောက်ျားအီကြာကွေးကို မေ့သာမေ့လိုက်ပါ ၊ အိမ်ထောင်ပြုပြီးရင်လည်း စိတ်ချမ်းသာမှုမရဖို့ ၉၀% သေခြာနေကြောင်းပါခင်ဗျား ။
ဒါက ဒီလိုဗျ ဦးကျောက်ခဲရ။ ကျနော် ရေးတဲ့အထဲမှာ ပါပြီးပြီ။ အဓိကက မြန်မာပြည်က မိန်းကလေးတွေအတွက် ပိုရေးချင်တာ။ ကျနော့် ဆောင်းပါးထဲမှာလည်း ပါပါတယ်။ အဲဒါ လုပ်ချင်ရင် မြန်မာပြည်မှာ အဲဒီ အချိန် ရောက်တဲ့အထိစောင့်။ ကျနော်က ဖြစ်လာတာကို တားလို့ မရပါဘူး။ သို့သော် တချို့က ဒါကို ဟုတ်နိုးနိုးရေးရင် မိန်းကလေးတွေ လိုက်လုပ်ကြလိမ့်မယ်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာပြည်က လူတွေ။ သူများ လုပ်လို့ ဘာမှ မဖြစ်မှ လိုက်လုပ်တာ ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ ဖြစ်ပြီ ဆိုရင်တော့ ဖြစ်ပြီပဲ။
ဦးကျောက်ခဲကို ကျနော် ပြောမယ်။ LT က ဘာနဲ့ တူသလည်းဆိုတော့ ကျုပ်စိတ်ထဲမှာ ဘိသိတ် မမြှောက်ပဲ တော်ကောက်ထားတဲ့ မိန်းကလေးနဲ့ တူတယ်။ ထီးနန်းအတွက် သူ့မှာ အခွင့်အရေးမရှိ ဆိုသလိုပဲ။ အမှန်တော့ နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့ လူတွေ မြန်မာပြည် အသိုက်အဝန်းနဲ့ ကင်းကွာနေလို့ ဖိအားမရှိပဲ LT နေကြတာ ကျနော် သိထား ကြားထားပါတယ်။ သာမန် လင်မယားက စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်လို့ ကွဲစေဦးတော့ သိပ်ပြီး တဆုံးတဆ မလုပ်ဘူး။ နှစ်ဘက်မိဘရဲ့ အရှိန် ဆွေမျိုးတွေက သိတယ်ဆိုတဲ့ အရှိန်လေးရှိတော့ ရှိန်သေးတယ်။
ဦးကျောက်ခဲ ကြားဖူးသလားတော့ မသိဘူး။ ကျနော့်ကို စင်ကာပူက သူငယ်ချင်းတွေ ပြောတာ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ငါးနှစ်ကျော်လောက်က စင်ကာပူမှာ တကယ် ဖြစ်ခဲ့တာတဲ့။ မြန်မာကောင်လေးနဲ့ ကောင်မလေး LT နေကြတယ်။ တော်တော်ကြာတော့ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်လို့ ပြဿနာတတ်ပြီး ကွဲကြတယ်။ သူတို့ ပြဿနာ ဘယ်လောက်ကြီးတယ် ဘာတွေ ပြောကြတယ်တော့ မသိဘူး။
အဲဒါ ကောင်လေးက သူတို့ နှစ်ယောက်နေတုန်းက ခိုးရိုက်ထားတာပဲလား ကောင်မလေး သဘောတူပြီး ရိုက်ထားတာလား မသိတဲ့ ဒီမိန်းကလေးရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတွေ အနေအထား အမျိုးမျိုးနဲ့ အပြင် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုပါ အီးမေးနဲ့ တွဲပြီး all ဆိုတဲ့ လိပ်စာတပ်ပြီး မိန်းကလေးရဲ့ ကုမ္မဏီရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပို့လိုက်တယ်။ အဲဒီတော့ MD အစ အောက်ခြေဝန်ထမ်းအဆုံး အကုန်လုံးဆီကို ရောက်သွားတာပေါ့။ မိန်းကလေးတော့ မသိရှာဘူး။ ဆက်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတော့ သုံးရက်လောက် အကြာမှာ လူတွေရဲ့ အကြည့်တွေ အမူအရာ သိပ်ထူးခြားလို့ သတိမပြုမိပဲ မနေနိုင်အောင် ဖြစ်လာတော့မှ သိတော့တယ်။
အဲဒါ သူဘာဖြစ်သလည်း သိလား။ အဲဒီနေ့ပဲ ထွက်စာတောင် မတင်တော့ပဲ ရရာလေယာဉ်နဲ့ မြန်မာပြည် ပြန်ပြေးရရှာတယ်။ တချို့က ပြောလိမ့်မယ်။ ဥပဒေရှိသားပဲ။ ဒါမျိုး တရားစွဲပါလားပေါ့။ ဒါပေမယ့် မြန်မာ မိန်းကလေးတယောက်ဟာ ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့မျက်လုံးကို ရင်ဆိုင်ပြီး ဘယ်နေရဲပါ့မလည်း။
အဲဒါ ကထူးဆန်းကို ကျနော် ပြောခဲ့တဲ့ အချက်ပဲ။ ကျနော်က အဲဒီ ရုပ်ရှင် ဆယ်လယ်ဗရစ်တီ ဆိုသူတွေကို ဒီကေ့စ်မျိုးဟာ သာမန် မိန်းကလေးတွေနဲ့ တန်းတူထား မစဉ်းစာဘူးဆိုတာ။ သူတို့ကတော့ ကြွေးထူမပူ သန်းထူမယားလို့ ပြောရမလား။ တကိုယ်လုံးဖော်တဲ့ ဗီဒီယိုလား။ အော် ကောင်းတာပေါ့ ဒါက မလိုသူတွေ လုပ်တာပါ။ ဂရုမစိုက်ပါဘူးပေါ့။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ နေရတဲ့ မိန်းကလေးတယောက်က သူတို့ ခံနိုင်တာကို ဘယ်ခံနိုင်ပါ့မလည်း။
အမှန်တော့ လုပ်တဲ့လူက အင်မတန် စိတ်ဓတ် အောက်တန်းကျပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့သာ တကယ် လက်ထပ်ထားတယ်ဆိုရင် ကျနော်ထင်တယ် ဒီကောင် ကွာရှင်းလည်း လုပ်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ လက်ထပ်ခြင်းဆိုတာ မြတ်နိုးမှုပါ ပါတယ်လို့ ထင်တာပဲဗျာ။
ပြောဖို့ ကျန်ခဲ့လို့ ဦးကျောက်ခဲရေ။ ကျုပ် သူငယ်ချင်းထဲမှာလည်း LT နေသူ ရှိတယ်ဗျ။ LT နေတယ် ဆိုတာထက် အဲဒီလို နေနေတယ်လို့ ယုံကြည်ရတဲ့ လူပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒီကောင် ဒီလို နေတာ အမှန် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူက တကယ့်ကို လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ အကြာကြီးနေပြီးတော့မှ ရည်းစားတယောက် ရတယ်။ လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ အကြာကြီးနေတယ် ဆိုလို့ အကျည်းတန် အရုပ်ဆိုး မဟုတ်ဘူး။ ယောကျာင်္းထဲမှာ ကြည့်ကောင်းတဲ့ ရုပ်ရည် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်တိုင်လည်း ပညာတတ် လစာကောင်း အလုပ်ရှိတယ်။ ဘယ်လိုဖြစ်ပြီး ဂေါ်မစွံ လူပျိုကြီးဘဝနဲ့ နေခဲ့သလည်းတော့ မသိဘူး။ အဲဒါ ရည်းစားရတော့ နိုင်ငံခြားမှာ ကျောင်းလာတတ်ပြီး ကျောင်းပြီးတဲ့ သူ့ထက် အသက်ငယ်တဲ့ ကောင်မလေးကို ရတယ်။ အဲဒါ သူ LT နေတယ်လို့ အပေါင်းအသင်းတွေက ပြောကြတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ သူငယ်ချင်းတွေကို ဘယ်သူ့ကိုမှ အိမ်လည် မခေါ်တော့ဘူး။ အလည်လာရင်လည်း အိမ်ပေါ် အတတ်မခံဘူး။ သူက အောက်က စားသောက်ဆိုင်မှာ ဆင်းတွေ့တယ်။ ဖုန်းဆက်ရင်လည်း ဘေးမှာ မိန်းကလေး စကားသံ ကြားရတယ် ဆိုတဲ့ အချက်တွေကို ကြည့်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေက LT နေတယ်လို့ ပြောကြတာ။ ဘာလို့ အတွေ့မခံတာလည်း ဆိုတော့ သူရှက်တယ်လေ။ အားလုံးက လင်စုံ မယားဖက် လက်ထပ်ထားတဲ့ လူတွေကြားမှာ သူ့ကိုယ်သူ ရှက်နေတာကိုး။ ဒါပေမယ့် သူနေတာက သူနေချင်လို့ ဆိုတာထက် မိန်းကလေးက နေချင်နေတာလို့ ပြောတယ်။ သူက တကယ့် လူရိုး။ ဟို နှစ်အတော်ကြာတုန်းက ဘုန်းကြီးကျောင်းတခုမှာ ဆွမ်းကျွေးလိုလို ဘာလိုလို လုပ်တယ်။ အဲဒါ လူတွေက သူ့ကို ဒါက ဘာအတွက်လည်းလို့ မေးတော့ တနှစ်ပြည့်လို့ ပြောတယ်။ အဲဒါ လူတွေက ဆက်မေးတယ်။ တနှစ်ပြည့်က ဘာ တနှစ်ပြည့်တာလည်း။ သမီးရည်းစား တနှစ်ပြည့်တာလား ဘာလည်းလို့ နောက်မေးမေးတော့ သူလည်း စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ပြန်ဖြေစရာ စကားမရှိဘူး။ နောက်တော့ အဲဒါမျိုး မလုပ်တော့ပြန်ဘူး။ အဲဒါ သူ့ အဘိုးကြီး အဘွားကြီးက ကျနော်နဲ့ တွေ့တိုင်း သားရယ် နင့်သူငယ်ချင်းကို ပြောပါဦးဆိုတဲ့ သဘောပါတဲ့ လေသံမျိုး ပြောတယ်။ ဒီလောက် ကလေး နှစ်ယောက်အဖေ အရွယ်ရှိတဲ့ လူကို ဘယ်လို သွားပြောမလည်း။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကို အပေါင်းအသင်းလာလို့မှ လက်ခံပြီး မတွေ့ရဲတဲ့ ဘဝကလည်း သိပ်ဟန်မကျသေးဘူးလို့ ထင်တယ်။
ဒါနဲ့ ကျနော်သူ့ကို မေးတယ်။ မင်းဘာလို့ ဒီလို လုပ်နေတာလည်း ဆိုတော့ သူပြောတာက သူ့ကောင်မလေးက မိဘကို ထောက်ချင်သေးတယ်လို့ ပြောတယ်။ ကျုပ်ကြည့်တာတော့ ယူပြီးလည်း ထောက်ပံ့လို့ ရတာပဲဗျာ။ အခုဟာကလည်း ယူတာနဲ့ ဘာမှ ထူးတာမှ မဟုတ်တာ။ ဒါတွေက အကြောင်းပြတာတွေပါ။
အစ အဆုံး အချိန်ပေးပြီး ဖတ်သွားပါတယ် …
ဘယ်သူတွေ ဘယ်လို ဆွေးနွေးကြမလဲဆိုတာလဲ စောင့်ဖတ်ပါ့မယ် ..
ကွန်မန့် နှစ်ခါ ထပ်သွားလို့ပါ။ မဝေဝေရေ ကိုယ့်သဘောထားလေးလည်း ပြောပါဦး။ ကြားနေတော့လည်း သက်သာတာပေါ့ဗျာ ကောင်းပါတယ်။
ဘောပင် မှင်ချောင်းအသစ်လဲပီးစောင့်နေပါတယ် ဦးစံလှကြီးခင်ဗျာ
ဘောပင် မှင်ချောင်းတော့ အသစ်မလည်းပါနဲ့ ကိုရာမညရေ။ ကျနော်ကလည်း အပြိုင်အဆိုင် ငြင်းတာမျိုးထက် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် ပြောတာမျိုးကို ပိုကြိုက်ပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ ခင်ဗျားတော့ ဒီနေရာမှာ အမြင်ချင်း နီးစပ်မှာပါ။
သန်းခေါင်ကျော်နေပြီမို့ အပေါ်ကဆြာများလိုဘဲ နောက်မှ ပြန်လာပါ့မယ် .
ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတော့ ပြောချင်ပါတယ် .. အောက်ဆုံးက
မိန်းမတဦးတည်းက လင်များစွာယူသော ပိုလီယန်ဒရီ(Polyandry) စနစ်ဖြစ်သည်။
မှာ မိန်းမ တစ်ဦးထဲ ကို ယောကျာင်္းတွေ ၀ိုင်းယူတယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီ့ ယောကျာင်္းတွေ က အဲ့ဒီ့ မိန်းမ တစ်ယောက်ထဲ ကိုဘဲ ယူရမှာလားဟင် င် င် … အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ ကျန်တဲ့ မိန်းမတွေ အများကြီး သမြောစရာကြီး … မြန်မာပြည် မှာ က မိန်းမ အချိူး ပိုများသလားလို့…
အော် အဲဒါကို တွေ့လို့ ဝမ်းသာပါတယ် ကထူးဆန်းရေ။ ကျနော် တမင် ထည့်ပေးလိုက်တာပါ။ လစ်ဗင်းတူဂဲသားစနစ်ကို နေချင်တဲ့လူက အဲဒီစနစ်ရဲ့ ကောင်းကွက်တွေကိုချည်း ပြောသွားလို့ ဘယ်လိုဟာမျိုးမှာဖြစ်ဖြစ် ရှာတတ်ရင်တော့ ကောင်းကွက်က ထွက်လာစမြဲလို့ သိစေချင်တာပါ။ အမှန်တော့ အဆိုး အကောင်းတွဲနေတာပါ။ တကယ်တော့ လစ်ဘရယ်ဆိုတာ ကျနော့် အမြင်အရ ဘက်ပေါင်းစုံ မြင်တတ်တဲ့လူ ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ကျနော် အခု မြင်သလောက် လစ်ဘရယ်ဆိုသူတွေက တကယ် လစ်ဘရယ် မဟုတ်ပဲ ပစ်စုတ်ပန်ဂိုဏ်းလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခေါ်တဲ့ ဂိုဏ်းသား ဂိုဏ်းသူတွေပါ။ သူတို့က ကန့်လန့်တိုက်ပြီး ဇောက်ထိုးပြောင်းပြန်တွေးတာကို လစ်ဘရယ်လို့ ထင်နေပုံ ရပါတယ်။ ခင်ဗျားလည်း ဘက်ပေါင်းစုံ မြင်ဖို့ လိုသေးတယ်။ အဲဒါကို အောက်က ကွန်မန့်ကျမှ ပြောမယ်။
ကျ နော် က လည်း တစ် ပုဒ် သီး သန့် ရေးေ န တယ် ဆို တော့ ကျနော် ရေး လက် စပီး အောင် ရေးမ ယ်
အခု တော့ အကြမ်း ဖျဉ်း ဘဲ ဖတ် သွား ပါ တယ်
နောက် တစ် ခါ ပြန်ဖတ် ကြည့် မယ်
ပြီး မှ ပြော မယ် နော် ကို စံ လှ ကြီး ရေ
အင်းပါ ကိုပေါက်ရေ ရေးလက်စတော့ ပြီးအောင် ရေးလိုက်ပါဦး။ ပြီးမှ ပြောကြတာပေါ့။
ပြန်လည်ဆွေးနွေးမယ့် ကွန်မန့်တွေကို မျှော်နေပါမယ်
လောလောလတ်လတ်တော့ ဟိုနေ့က မွှေထားမိတဲ့ ထိမ်းမြားမင်္ဂလာဆယ်ပါးကို သွားတွေးမိလို့ အဲ့ဒါလေး ဝင်ဖြည့်လိုက်တယ်ဗျ။
ထိမ်းမြား မင်္ဂလာ (၁၀) ပါး
၁။ သတိုးသား၊ သတိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးကို လူလည်ခေါင်တွင် ကန်တော့ခံမထွက်ပဲ မိမိအိမ်မှာပင် လွတ်လပ်စွာနေလျှင် ဖိတ်ထားသောပရိတ်သတ်များ စားသောက်ပြီး ပြန်သွားကြမှ သတိုးသမီး အိပ်ခန်းရှိ ကြိမ်တန်း၊ ကြိုးတန်း၌ သတိုးသား ပုဆိုး၊ ပုဝါ လှန်း၍ တင်ကာထိမ်းမြားခြင်းကို ပုဆိုးတန်းတင် ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၂။ ထမင်း သိုမဟုတ် မုန့်တစ်ခုခု ကို သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့က လက်စုံစားစေ ထိမ်းမြားခြင်းကို လက်စုံစား ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။( ယခု လင်မယားအရာ မြောက်ပြီးမှသာ ပြုလုပ်လေ့ ရှိသည်။)
၃။ သတို့သား ၀တ်ဆင်သော လက်စွပ်ကို သတို့သမီးအား ၀တ်ဆင်ပေးခြင်း၊ သတို့သမီး ၀တ်ထားသော လက်စွပ်ကို သတို့သားအား ၀တ်ဆင်ပေးခြင်း၊ အချင်းချင်းလဲလှယ်၍ ထိမ်းမြားခြင်းကို လက်စွပ်လဲ၍ ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၄။ သတို့သားက သတို့သမီးအိမ်သို့ လာသည့်အခါ သတို့သမီး၏ မိဘများက အ၀တ်ပုဆိုးအသစ် လဲလှယ်ဝတ်ပေးခြင်းကို အ၀တ်ပေး၍ ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၅။ သတို့သမီးလက်ယာလက်ကို ဖြန့်ထား၍ သတို့သားလက်ယာဘက်ကို အပေါ်တင်စေကာ ဘိသိက်ဆရာကဖြစ်စေ၊ လူကြီးတစ်ဦးဦးကဖြစ်စေ ရွှေနှင့်ငွေ ဂဟေ ဆက်ထားသကဲ့သို တူနှစ်ကို တစ်စိတ်တစ်ဝမ်းထည်းဟု ပရိသတ်အလယ်တွင် ထိမ်းမြားခြင်းကို လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၆။ ဖြန့်လျှင်နှစ်ဦးစလုံး ဦးခေါင်းဆံ့လောက် လေးတောင်ခန့်ရှိသော ရွှေဆွဲကြိုး ပန်းကုံသဖွယ်ပြုလုပ်၍ သတို့သား၊ သတို့သမီး နှစ်ဦးစလုံး တစ်ခါတည်း စွပ်၍ ထိမ်းမြားခြင်းကို ဒါလီဖွဲ့၍ ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၇။ အလျှား (၆) တောင်၊ အနံ (၂)တောင် ရှိသော သတို့သမီးခြုံသော စုလျှားတဘက်အား သတို့သား၊ သတို့သမီးနှစ်ဦးအား ရစ်ပတ်ထိမ်းမြားခြင်းကို စုလျှားရစ်ပတ် ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၈။ သတို့သားက သတို့သမီးအား ပန်းကုံးစွပ်ပေးသဖြင့်၊ သတို့သမီးက သတို့သားအား ပန်းကုံးစွပ်ပေးသဖြင့် ထိမ်းမြားခြင်းကို ပန်းကုံစွပ်၍ ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၉။ ရွှေဖလား၊ ငွေဖလား၊ ဖန်ခွက် စသည်တို့ ရေတစ်ဝက်ထည့်၍ သပြေပန်း၊ နေဇာမြက်များ ထည့်ပြီး သတို့သား၊ သတို့သမီး တို့၏ လက်ယာလက်များကို ချထားစေ၍ ရေကြည်လင်အေးမြ၍ မကွဲတပြား တသားတည်းနေ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့ ရိုးမြေကျ ရာသက်ပန်တည်ပါစေ ဟုဆို၍ လက်ချထိမ်းမြား ခြင်းကို ရေခွက်၌ လက်ချ၍ ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
၁၀။ ရွှေခွက်၊ငွေခွက်၊ဖန်ခွက် စသည့် န၀ရတ် ကိုးပါး၊ နံသာမျိုး ငါး ပါသွေး၍ (သို့မဟုတ်) ရေမွှေးများထည့်၍ သတို့သား၊ သတို့သမီးတို့၏ ထိပ်၌ သပြေပန်းခက်ဖြင့် ပက်ဖြန်း၍ လက်ထပ်ထိမ်းမြားခြင်းကို ဦးထိပ်၌ ရေစင်သွန်း၍ ထိမ်းမြားခြင်း ဟုခေါ်သည်။
ကျန်တာတော့ အောက်က ကွန်မန့်များမှာမှ ဆက်လက် ဆွေးနွေးပါမယ် လို့
ဟုတ်ကဲ့ပါ ဦးမာဃရေ ဝင်ဖြည့်သွားလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဖတ်မိလို့ … ဆိုတော့ အကုန်မဆိုသော်လည်း ဆြာစံလှကြီး ထဲ ကကောင်မလေးလိုပေါ့နော် ..
ကြယ်စင်သွယ်။ ။ကြိုက်ပြီးလမ်းခွဲခဲ့တာပေါ့။၂၀၁၄ ဇန္န၀ါရီမှာ လမ်းခွဲဖြစ်တာပါ။ နှစ်ယောက်လုံးက လမ်း
ခွဲဖို့ အစီအစဉ်ရှိပြီးသား။အဆင်မပြေဘူးဆိုတာတော့သိတယ်။ လမ်းကတော့ အစတုန်းက ခွဲမလို မခွဲမလို
မ်ာဒန်။ ။အချစ်ကိုရော ဘယ်လိုမြင်ပါသလဲ။ညီမလေးမှာ အရင်ကရော ချစ်သူရှိဖူးလား။ရဲရင့်အောင်က
ကြယ်စင်သွယ်။ ။အရင်တုန်းက ချစ်သူရှိတယ်။သူလည်းအချစ်ဦးမဟုတ်ဘူး။ညီမလည်း အချစ်ဦး
မဟုတ်ဘုး။အချစ်ကကြောက်စရာကြီး (ရီလျှက်)သရဲနဲ့တူတယ်။ ကောင်းတာတစ်ခုမှမရှိလို့။
မော်ဒန်။ ။ညီမလေးဘ၀မှာ အချစ်ကြောင့်ဘာတွေပြောင်းလဲစေခဲ့သလဲ။
ကြယ်စင်သွယ်။ ။အချစ်ကရင့်ကျက်လာတယ်။အချစ်က အရေးမကြီးဘူးဆိုတာသိလာတယ်။ဘယ်သူ့ကိုမှ
ကထူးဆန်း ဒါကို ဘာလို့ ပြတာလည်းလို့ သေသေချာချာ မသိပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာက ဒီမိန်းကလေးလည်း သူ့ချစ်သူနဲ့ လမ်းခွဲတာပဲ။ သူ မထိခိုက်ဘူးထင်တယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပြချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျား စဉ်းစားတာ မှားနေပါတယ်။
ကျနော့်ပို့စ်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါ။ ကျနော် ရေးထားပါတယ်။ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က မြန်မာပြည်မှာနေသော မိန်းကလေးများအတွက် အဓိက ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာ နေရတယ် ဆိုရင်လည်း မြန်မာပြည်က ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ မကင်းနိုင်သူများအတွက်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ သွေးသားတော်စပ်တဲ့ ဆွေမျိုးရော အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေ ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအဝိုင်းက ရိုက်ခတ်မယ့်ဒဏ်ကို မခံနိုင်မှာ သေချာလို့ပါ။ ဥပမာ အမေရိကန်က သမီးရှင် မိဘတယောက်က သူ့သမီးကို အိမ်ထောင်မကျခင် sex ကိစ္စ ခွင့်ပြုမယ်တို့ LT နေစေမယ်တို့ ဆိုတာကို ကျနော် မစဉ်းစားပါဘူး။ အဲဒီ မိန်းကလေး အဲဒီအရပ်မှာ အဆင်ပြေမှာပါ။ မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ သူနဲ့က အဝေးကြီးပါ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း မြန်မာတယောက်လို စဉ်းစားတတ် ခံစားတတ်ဖို့ မလွယ်တော့ပါ။
ခင်ဗျား အခုပြတဲ့ မိန်းကလေးက ချွင်းချက်ထဲမှာ ပါပါတယ်။ ကျနော် အခုပြောမယ့် အချက်ထဲမှာ မှားတာပါရင် ကျန်သူများလည်း ဝင်ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်က အခု တင်ပြတဲ့ ကိစ္စမှာ သာမန်အရပ်သူ မိန်းကလေးများကို ပြောတာ ဖြစ်ပြီး အနုပညာလောကထဲက လူတွေကို ချွင်းချက် ပေးထားပါတယ်။ ခင်ဗျား ပြောတဲ့ မိန်းကလေးရော သူ့ချစ်သူရော အနုပညာ လောကထဲကပါ။ ဘာလို့ ချွင်းချက်ပေးထားသလည်း ဆိုတော့ အနုပညာလောကသား ဆိုတာ အနည်းစုဖြစ်ပြီး သူက သီးသန့် society နဲ့နေပါတယ်။ သာမန်လူများကို သူတို့ကို တွေ့ဖို့ မြင်ဖို့ ရင်းနှီးခွင့်ရဖို့ မလွယ်သလို သူတို့ကလည်း သာမန် ပရိသတ်များကို ဖျတ်ကနဲ့တွေ့လို့ လက်ပြလိုက် ပြုံးပြလိုက်တာကလွဲပြီး ထိတွေ့မှု မရှိပါဘူး။ သူတို့ကို တွေ့မယ်ဆိုရင်လည်း လူကိုယ်တိုင် မတွေ့နိုင်တဲ့ စာနယ်ဇင်းတို့ ဘာတို့ကနေ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းကိုပဲ အပြင်လူတွေက ဖတ်ရတာပါ။ အဲဒီတော့ သူတို့က ပတ်ဝန်းကျင်က ကြည့်တဲ့ မျက်လုံးတွေရဲ့ ဒဏ်က လွတ်အောင်နေလို့ ရပါတယ်။ နောက်ပြီး ဒီလို လင်မယားကွဲတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စတွေ လမ်းခွဲတဲ့ ကိစ္စတွေ ဆိုတာလည်း အဲဒီလောကထဲက အထက်တန်းလွှာလို့ ပြောလို့ရတဲ့ မင်းသား မင်းသမီး မော်ဒယ်တွေမှာပဲ အသံထွက်ပါတယ်။ သာမန် အောက်လွှာဖြစ်တဲ့ လူရွှင်တော်တို့ ဇတ်ပို့တို့ ဆိုတာက သူတို့ကို မျက်လုံးနဲ့ သွားကြည့်ဖို့ မပြောနဲ့။ အဆင်ပြေအောင် နေရတာပါ။ သူတို့ကို ဘယ်လိုမှ သွားရိုက်ခတ်လို့ မရပါဘူး။ တကယ် ရိုက်ခတ်တဲ့ဒဏ်ကို ခံရမယ်ဆိုရင် သူတို့လည်း မနေနိုင်ပါဘူး။
နောက် သူတို့ အထက်လွှာ အချင်းချင်းကျတော့လည်း ဟိုလူက ဒီလူနဲ့ ဒီမိန်းမနဲ့ ဟိုလူနဲ့ ဟိုလူကြီးနဲ့ ဟိုမိန်းမကြီးနဲ့ ဇတ်လမ်းတွေက ကိုယ်စီဆိုတော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ရှက်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။ ချွင်းချက်ဖြစ်သူတော့ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျနော်က ယေဘူယျဆိုတဲ့ အများစုကို ပြောလို့ ချွင်းချက်ကို ထားခဲ့ပါတယ်။
ခင်ဗျား မှတ်မိရဲ့လား။ နာမည်ကြီး ရုပ်ရှင်မင်းသမီး တယောက်က သူ့အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်းမေးလို့ သတင်းထောက်ကို နင်သွားလိုက်တော့လို့ ပြောပြီး ပါးရိုက်လွှတ်လို့ အမှုဖြစ်ကြတာလေ။ သူတို့က အများစုနဲ့ ကင်းအောင်နေပြီး သူတို့ လောကသား အချင်းချင်းပဲ ဆက်ဆံတဲ့ အခါကျတော့ လုပ်ချင်ရာလုပ်ဖို့ ပိုလွယ်ပါတယ်။
မြန်မာမိန်းကလေး တယောက်က သူ့လိုပဲ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း ရည်းစားနဲ့ လမ်းခွဲတဲ့အကြောင်းမေးလို့ ဆိုပြီး ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကို ပါးလိုက်ရိုက်လို့ မရပါဘူး။ ရိုက်ရင်လည်း အားလုံးကို ရိုက်ရတော့မှာပါ။ တခါတလေ မေးတာမဟုတ်ပဲ အကြည့်နဲ့တင် ခံသွားရပါလိမ့်မယ်။
FM အစီအစဉ်မှာ ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ကြားဖူးတာ တခုက နာမည်ကြီး မင်းသမီး အဆိုတော် တယောက်က သူ့ယောကျာင်္းနဲ့ လမ်းခွဲပြီးခါစမှာ ပရိသတ်နဲ့ သူနဲ့ စကားပြောတဲ့ အစီအစဉ်ကို လုပ်ပါတယ်။
ပရိသတ် ကောင်မလေးက မေးပါတယ်။ “အမ အမကို သမီး မေးစရာ တခုရှိတယ် စိတ်ဆိုးမှာလားဟင်”
“ဘာမေးမလို့လည်း ညီမလေးရဲ့ စိတ်ဆိုးစရာ ဆိုရင်တော့ အမက စိတ်ဆိုးရမှာပေါ့” သူ့လေယူလေသိမ်းက ဒီကိစ္စကို မမေးနဲ့ဆိုတာ ရှင်းနေပါတယ်။
“အယ် ဒါဆိုလည်း မမေးတော့ပါဘူး အမရယ်”
“အေး ကောင်းပါတယ် ညီမရယ် မမေးပါနဲ့တော့”
အဲဒီလို ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီမင်းသမီး လုပ်သလို မြန်မာမိန်းကလေး တယောက်က ပတ်ဝန်းကျင်က လူတွေရဲ့ အမေးကို သွားဖြေလို့ မရပါဘူး။
သူတို့လောကမှာတော့ ဒါတွေက မဆန်းတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ချွင်းချက် ဖြစ်တဲ့ လူများကို ကျနော်က ထုတ်ပြတယ်ဆိုတဲ့ နေရာမှာ အားကျစရာ အတုယူစရာ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆတဲ့ ကေ့စ်များကိုသာ ထုတ်ပြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ မင်းသားထဲက ကိုကျော်သူ လူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်နေတယ် အားကျစရာဖြစ်တယ် သူတယောက်တည်း ဖြစ်တယ် ဆိုပေမယ့် ထုတ်ပြပါတယ်။ ဥပမာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆို နိုင်ငံခြားမှာ နေပြီး ပညာသင်ခဲ့တယ်။ လက်မထပ်ခင် sex ကိစ္စလုပ်တယ်လို့ သူ့ပြိုင်ဘက်တွေကတောင် ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာနဲ့ ပက်သက်ပြီး မပြောနိုင်ခဲ့ဘူး။ ဘယ်မိန်းကလေး LT နေတယ်ပြောပြော သူမနေခဲ့ဘူး မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အတွက် အားကျစရာ ဂုဏ်ယူစရာ ဖြစ်တယ် ဆိုရင် ကျနော် ဥပမာ ပေးပါတယ်။
အခု ဒီမော်ဒယ် ပြောတဲ့ အရင်တုန်းက ရည်းစားရှိဖူးတယ်။ အခုလည်း တယောက် ကွဲသွားပြန်ပြီ။ ဒါလည်း ဝမ်းမနည်းပါဘူးဆိုတဲ့ ကိစ္စမျိုးကတော့ အားကျစရာ ဂုဏ်ယူစရာ အမျိုးသမီးများ အတုယူစရာလို့ မထင်လို့ ကျနော် ဒီချွင်းချက်ကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားပါဘူး။
ဒါက ခင်ဗျားအတွက်ရော အောက်က ခင်ဗျား ဆရာကြီး အတွက်ပါ အရှည်ကြီး ဖြေလိုက်တာ။
အစအဆုံး အကုန်လုံးကို သဘောတူကြောင်း အရင်ပြောချင်ပါတယ်..
နောက် လုံမသဘောထားနဲ့ အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်တဲ့ စာပိုဒ်ကို ဟိုက်လိုက်လုပ်ချင်ပါတယ်
ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ အမျိုးသားတွင် ကိုယ်မကြိုက်သော အချက်များတွေ့လို့ သူနဲ့ လမ်းခွဲလိုက်ပြီ ဆိုပါတော့။
နိုင်ငံခြားမှာ LT နေတယ်ဆိုတာ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် လေ့လာနိုင်အောင်ပါ.. သူတို့ယဉ်ကျေးမှုက အရွယ်ရောက်လာတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက် ကိုယ်သဘောကျတဲ့သူနဲ့ ဆက်ဆံတာ လက်ခံပေးတဲ့အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပြီး တရားဝင် register မလုပ်မချင်း လင်မယားမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ အချက်က မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ လုံးဝ မတူတဲ့ အချက်ပါ… မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းမှာ ပြောကြတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိတယ်.. သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့က လက်မထပ်တာသာရှိတယ်.. လင်မယားဆက်ဆံရေးပါ တဲ့.. မြန်မာမှာကတော့ ဒီလို ဆက်ဆံလိုက်တာနဲ့ လင်မယားအရာမြောက်တယ်ဆိုတာ အရှင်းကြီးပါပဲ..
သူတို့နိုင်ငံမှာက တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်လေ့လာတာ နှစ်ယောက်တည်းနေရုံတင်မကဘဲ ကလေးရတဲ့အထိပါပဲ.. ကလေးရလာခဲ့ရင်တောင် ဒီကလေးကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတာ လိုက်ဖက်ညီရဲ့လား.. တာဝန်ကို အညီအမျှယူချင်ရဲ့လား.. ဆိုတာတွေအထိ လေ့လာကြတာပါ.. ဒါကြောင့်လည်း ကလေးရပြီးမှ မင်္ဂလာဆောင်တာမျိုးတွေ ဖြစ်လာကြတာပေါ့..သူတို့အတွက်ကျတော့လည်း ဒီအတိုင်းလေး တွဲသွားတွဲလာ.. လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်.. သဘောမျိုးလေးတွဲပြီး လက်ထပ်ကြတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေကို crazy လို့တောင် ပြောကြပါတယ်.. ဆန့်ကျင်ဘက် ယဉ်ကျေးမှု (၂) ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဘယ်လိုမှတော့ တူမှာမဟုတ်ပါဘူး..
ဒါကြောင့် တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်သိအောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဖြစ်လာတဲ့ Living together ပါ။ ဟိုတယ်လေးသွားပြီး sexual relationship လုပ်ရုံနဲ့ အကြောင်းသိဖြစ်မလာနိုင်သလို.. တကယ့် Living together ဖြစ်ဖို့ တစ်အိမ်တည်းအတူနေဖို့ကျတော့လည်း မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းက လင်မယားလို့ လက်ခံလိုက်ပါတယ်.
ဆက်ပြောရရင် တစ်အိမ်တည်းအတူတူမနေဘဲ sexual relationship ရှိတယ်ဆိုရုံနဲ့ကို လင်မယားအရာမြောက်နေပါပြီ။ အမြင်သာဆုံး ဥပမာကတော့ စစ်တပ်ပါ.. စစ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေ သူ့ရည်းစားတွေနဲ့ တစ်အိမ်တည်းမနေပါဘူး.. ဒါပေမယ့် sexual relationship ရှိတယ်.. ဒါကို စစ်သားတစ်ယောက်က မျက်ကွယ်ပြုပြီး လက်မထပ်ဘူးဆိုရင် မိန်းကလေးဘက်က တရားဥပဒေလမ်းကြောင်းက ရင်ဆိုင်လို့ရပါတယ်.. လက်ထပ်မလား.. ထောင်ကျခံပြီး ထွက်မလား.. (၂) ခုရွေးရပါတယ်..
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံမှာ Living together ကို တကယ်ကျင့်သုံးဖို့ဆိုရင် အရွယ်ရောက်မိန်းကလေးတွေ လွတ်လပ်စွာ ဆက်ဆံပိုင်ခွင့်ကို အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံလာတဲ့အထိ ယဉ်ကျေးမှုစနစ်ကို ဖျောက်ပစ်နိုင်ဖို့လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်..
လုံမရေးမွန်မွန်ရေ မနေ့ကတည်းက ပြန်ချင်ပေမယ့် ပြောရမှာ များလို့ရယ် စာရိုက်တာ မပြီးလို့ ဒီနေ့မှ ပြန်ရပါတယ်။ ညည်းအသက်က ဟိုဘက်ပို့စ်ထဲက အတိုင်း အမှန် ဆိုရင်တော့ တကယ့်ကို ငယ်ငယ်လေးပဲ။ ဒီလိုပို့စ်မျိုးက နားရှက်စရာမျိုး ပါလာတတ်လို့ ငါ့နှမလို့ပဲ ခေါ်ပြီးပြောမယ်။
အမှန်တော့ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကို လက်ထပ်မှုနဲ့ ပက်သက်ရင် တရားဝင် ဥပဒေရော ဓလေ့ထုံးတမ်းရောက အတော်ကို ကာကွယ် ပေးထားပါတယ်။ အဲဒီတော့ တရားဝင် အစောင့်အရှောက်ကို အလိုလို ရသလို အဲဒီဓလေ့ထုံးတမ်းကို ချိုးဖောက်ရင် အဲဒီလူမှုအသိုင်းအဝိုင်းက သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းကမ်းကို ချိုးဖောက်တဲ့ ဒဏ်ကိုပါ အလိုလို ရတတ်တယ်။
ဒဏ်ဆိုတာ တခါ တခါ လူတွေကလာပေးတာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့အလိုလို အော်တို ရောက်လာတာ။ ငါ့နှမ နားမရှင်းရင် ဦးကျောက်ခဲကို အကို ပြန်ရေးပေးတဲ့ ကွန်မန့်ကို ပြန်ဖတ်ကြည့်လိုက်။ အဲဒီထဲက ငါ့ သူငယ်ချင်းဆိုတာ အခုကို တကယ် ရှိနေသေးတာ။ အကို လုပ်ကြံပြီး ပြောတာ မဟုတ်ဘူး။ သူဖြစ်တာက အဲဒီလို ဖြစ်သွားတာ။
သူ LT နေတယ်။ ကြည့် တကယ့်ကို အရွယ်ရောက်ပြီးသား လွန်နေတဲ့ ယောကျာင်္းကြီး။ ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်လည်း ကိုယ်ရပ်နိုင်တယ်။ မိအိုဖအိုတွေကို လုပ်ကျွေးနေတဲ့ လူပျိုကြီး ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားမှာ။ ဒါပေမယ့် သူရောက်တဲ့ နိုင်ငံ ဆိုတာက အမေရိကန်လို နိုင်ငံမဟုတ်ဘူး။ မြန်မာတွေ အများကြီး ရှိနေပြီးတော့ အဲဒီအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ သူကင်းလို့ မရတဲ့ နိုင်ငံ။ ပိုဆိုးသွားတာက သူ့ အသက်အရ သူပက်သက်တဲ့ သူခင်တဲ့ တန်ဖိုးထားတဲ့ သက်တူရွယ်တူ အပေါင်းအသင်းတွေ ဆိုတာ အားလုံး မြန်မာ့ ဓလေ့ ထုံးစံအတိုင်း လင်စုံမယားဖက် အိမ်ထောင်ကျပြီးသား တွေချည်းပဲ။ ကဲ တို့ထုံးစံအတိုင်း ပွဲ တခုခုလုပ်လို့ ဖိတ်ပါပြီတဲ့။ ဥပမာ ဦးကြောင်ကြီးနဲ့ဇနီး ဦးစံလှကြီးနဲ့ဇနီး ဦးမျိုးသန့်နဲ့ဇနီး ဒီလို ဖိတ်တယ် မဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ဖိတ်တဲ့လူက သူ့ကို ဘယ်လို ဖိတ်မလည်း။ သူကရော အဲဒီ ဇနီးမောင်နှံတွေ အတွဲလိုက် ချီတတ်လာတဲ့ ပွဲမျိုးကို သူ့ကောင်မလေးကိုခေါ်ပြီး သွားဖို့ မရဲတော့ဘူးလေ။
အဲဒါ အမှန်တော့ အကိုသိသလောက်က သူ့သူငယ်ချင်းတွေက သူ့ကို လှောင်ဖို့ မပြောနဲ့ သူ့ရှေ့မှာ ဒီအကြောင်းကို မေးတောင် မမေးဘူး။ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုယ်သူ ရှက်တယ်လေ။ သိမ်ငယ်တာပေါ့။ ဒါဆို ငါ့နှမ ပြောချင်လိမ့်မယ်။ ဟာ ဒါဆို ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ပြင်ပေါ့။ မသိမ်ငယ်နဲ့ပေါ့လို့ ပြောလို့တော့ ရတယ်။ တကယ် အပြင်လောကမှာ အဲဒီလို ဟာမျိုးက ထင်သလာက် မလွယ်ဘူး ညီမလေးရေ။
ဥပမာ ပေးရရင် ကိုယ်က ဆယ်တန်းကျတဲ့ ကျောင်းသားဆိုရင် ဆယ်တန်းကို ဘာသာစုံ ဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ အောင်လို့ ဆုပေးပွဲ လုပ်နေတဲ့ ကျောင်းသားအုပ်ထဲ ရောက်သွားရင် ဘယ်လို ခံစားရမယ် ထင်လည်း။ ထားပါ ဘယ်သူမှ မလှောင်ဘူး မေးတောင် မမေးဘူး ဂရုလည်း မစိုက်ဘူး ဆိုရင်လည်း အဲဒီကျောင်းသား ရင်ထဲက ဖြစ်တဲ့ ဝမ်းနည်းမှု သိမ်ငယ်မှု ပျောက်မယ်လို့ ငါ့ညီမ ထင်သလား။ ဘယ်သူမှ လှောင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ့်စိတ်က ကိုယ့်ကိုပဲ ပြန်ပြီး လှောင်နေတာ ငါ့ညီမရေ။
အကို သိသလောက် သူ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူ့အသိုင်းအဝိုင်း အပြင်ဘက်ကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်လာတယ်။ ဘယ်သူမှ သူ့ကို ကန်ထုတ်တာ မဟုတ်ဘူး။ သူ့ဘာသာသူ ထွက်ပြေးတာ။ ဟော ခုနပြောသလို သူတနှစ်ပြည့် ဆိုပြီး လုပ်တော့ တတ်တဲ့လူက မေးတာပေါ့။ ဘာတနှစ်ပြည့်တာလည်း ဆိုတော့ မဖြေတတ်တော့ဘူး။ အဲဒီကတည်းက အဲဒါမျိုး နောက် သူမလုပ်တော့ပြန်ဘူး။
နောက်ပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်း အကို ကြားရသလောက် သူ့မိဘနှစ်ပါး သူ့ဆီလာလည်ရင်လည်း အရင်လို သူ့အိမ်မှာ မတည်းခိုင်းတော့ဘူး။ အခန်းမလွတ်သလိုလို နေရာ မရှိသလိုလို ပြောပြီး တခြားမှာ အခန်းဌားပေးတယ်တဲ့။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ဒုက္ခရောက်တာနော်။ သူ မိဘကို မချစ်လို့ မဟုတ်ဘူး။ သူသိပ်ချစ် သိပ်တန်ဖိုးထားတယ်လေ။ ဒီတော့ သူ တန်ဖိုးထားတဲ့ လူတွေ ရှေ့မှာ ဒီမိန်းကလေးနဲ့ အခန်းထဲကို သူ ခပ်တည်တည် ဝင်မသွားရဲတော့ဘူး။ သူ သိပ်တန်ဖိုးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း အိမ်ကို အလည်မခေါ်ဝံ့တော့ဘူး။ ဟိုက မြင်သွားမှာ နောက် လင်စုံမယားဖက် လာလည်ရင် သူကိုယ့်သူ ရှက်ရမှာ သူမခံနိုင်ဘူးလေ။ ဒုက္ခနော် ဒုက္ခ။
ကဲ ထားတော့။ အကျိုးအပြစ်တွေပဲ တို့ပြောရအောင်။ အေစုံတွဲနဲ့ ဘီစုံတွဲမှာ အေစုံတွဲက တခါတည်း လက်ထပ်ပြီး ဘီက LT နေတယ် ဆိုပါစို့။ ကဲ နှစ်တွဲစလုံး အဆိုးဆုံး အခြေအနေကို ကြုံရပြီ ဆိုပါတော့။ စိတ်သဘောထား မတိုက်ဆိုင်လို့ နှစ်တွဲစလုံး ကွဲပြီကွာ။ အေက မိန်းကလေးက တရားဝင်ဇနီး ဖြစ်တဲ့အတွက် သရက်စေ့ ထက်ခြမ်းခြမ်းသလို ပစ္စည်းဥစ္စာ တဝက်ရတယ်။ ဘီက မိန်းကလေးကတော့ ကိုယ့်ရှိတာကိုယ်ယူ ယောကျာင်္းဘက်က ပစ္စည်းတော့ ဘာမှ မရတော့ဘူး။ ဟာ ဒါဆို ငါ့ပစ္စည်း မဆုံးတော့ ကောင်းတာပေါ့လို့ ပြောလို့တော့ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် ငါ့ညီမလည်း မြန်မာမိန်းကလေးပဲ ပိုသိမှာပါ။ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ အိမ်ထောင်ပြုရင် ဘယ်မိန်းကလေးမှ ဒီယောကျာင်္းတော့ ငါလုပ်ကျွေးရဦးမယ် ဆိုပြီး ဘယ်သူမှ မယူဘူး။ အားကိုးလို့ ရတယ်ထင်မှ ယူတာ အဲဒီတော့ ပစ္စည်းဥစ္စာက ယောကျာင်္းဘက်က ဝေစုက ပိုများနိုင်တယ် ငါ့နှမရေ။
နောက်ပြီး LT နေတဲ့ မိန်းကလေးက ကံမကောင်းရင် ခုနပြောသလို ကိုယ့်ဓါတ်ပုံတွေ ဖြန့်မယ့် ယောကျာင်္းနဲ့ တွေ့နိုင်သေးတယ်။ ငါ့နှမ အကိုရေးထားတဲ့ ကွန်မန့်ထဲက ကောင်မလေးနေရာက ဝင်နေကြည့်စမ်း။ သေလုမတတ် ရှက်သွားမှာ သေချာတယ်။ သူ့ဘဝ တလျှောက်လုံး ဒါကြီးက အရိပ်ဆိုးကြီး ဖြစ်တော့မယ်။ ဒါဖြင့် တရားဝင် ဇနီးဘဝကနေ လင်မယားကွာရှင်းတဲ့ အတွဲက မိန်းကလေးရာ ဒါမျိုး မဖြစ်နိုင်ဘူးလားလို့ မေးနိုင်တယ်။ မဖြစ်နိုင်ဘူး ညီမလေး။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ တရားဝင် ဇနီးဆိုတဲ့ ဥပဒေ အစောင့်အရှောက် ရှိတဲ့အပြင် လက်ထပ်ပွဲ ဆိုတာ အကျဉ်းချုံးပဲလုပ်လုပ် ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပဲ လုပ်လုပ် ယောကျာင်္းတယောက်ကို မမြင်ရတဲ့ကြိုးနဲ့ ချည်ပြီးသားပွဲပဲ။ စဉ်းစားကြည့်လေ။ ယောကျာင်္းလေးက လက်ထပ်ပွဲ လုပ်မှတော့ သူ့ဘက်က ဘယ်သူတွေကို ဖိတ်မလည်း။ သူတန်ဖိုးထားတဲ့ လူတွေကို ဖိတ်မှာ ကျိန်းသေတယ်။ သူ့မိဘ သူ့ဆွေမျိုးအကြီးအကဲတွေ မိတ်ဆွေထဲက ဆိုလည်း သူတန်ဖိုးထားတဲ့ လူတွေချည်းပဲ လာမှာ ကျိန်းသေတယ်။ အဲဒီလူတွေ သိမှတော့ သူ ခုနပြောတဲ့ အောက်တန်းကျတဲ့ အလုပ်မျိုးကို အဲဒီလူတွေ သိမှာကြောက်လို့ လုပ်ဝံ့ဖို့ သိပ်ခက်တယ်။ လူဆိုတာက ယောကျာင်္းပဲဖြစ်ဖြစ် မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ လူတွေက ကိုယ့်ကို အထင်သေးမှာ သိပ်ကြောက်တာ ငါ့ညီမရေ။ ဆိုတော့ လမ်းခွဲလည်း တရားဝင်က အဲဒီ အန္တရာယ် မရှိဘူး။
တခုလပ် တလင်ကွာဆိုပြီး နာမည်ရမှာကတော့ တရားဝင်လည်း ရမှာပဲ။ LT လည်း အဲဒီ နာမည်ရမှာပဲ ငါ့ညီမရေ။ ဒါပေမယ့် တရားဝင်သမားကတော့ အခွင့်အရေးပိုတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ အဲဒီထုံးစံကတော့ အမှန်ပါပဲ။ မိန်းကလေးက သေသေချာချာ တိုင်ရင်တော့ အရေးယူတာ များတယ်။
ယာဉ်ကျေးမှုစနစ်ဆိုတာ ဖျောက်ရတာ မဟုတ်ဘူး ညီမလေး။ သူက သူ့အသိုင်းအဝိုင်းကို အကျိုးမပြုနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့ တနေ့မှာ အလိုလို ထွက်သွားတာ။ နောက်ကွန်မန့်တွေ ဆက်ဖတ်ကြည့် ပိုရှင်းလိမ့်မယ်။
အဲဒီ့ ကထဲ ကလည်း အဲ့ဒီ့လူ က အားကိုးလို့ မရတဲ့ သူရဲဘောကြောင်သူ ဆိုတာ ကောင်မလေးက သိသွားပြီး ကန်ထုတ် သင့်ပါတယ် ။ လုပ်ရဲ ရင် ယူရဲရင် ရင်ဆိုင်ရဲရမှာပေါ့ ..
ဦးလေး စံလှကြီးရဲ့ ။
ဂွဇွတ် သူကြီး မော်မော်ဘော်ဘော်လေး ကထူးဆန်း
ဟူး ဒုက္ခပါပဲဗျာ။ ကထူးဆန်းရယ် ခင်ဗျားတို့ကို စိတ်ပျက်တာ အဲဒါပဲဗျာ။ မော်ဒရေတာတွေ လုပ်ရင် စာသေသေချာချာ ဖတ်သင့်တယ်။ ခင်ဗျား ဦးကျောက်ခဲကို ကျုပ် မနေ့တည်းက ရေးပေးထားတဲ့ ကွန်မင့်ကို တကြိမ် သွားဖတ်ပါဦး။ တကယ်တော့ LT နေတဲ့ ကျုပ်သူငယ်ချင်းက အဲဒီလို နေချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်မလေးက နေချင်နေတာ ဆိုတာ ကျနော် သေသေချာချာ ရေးထားပါတယ်ဗျာ။ တကယ်လည်း အမှန်ပဲ။
ခင်ဗျားကို ကျုပ်ပြောလိုက်တဲ့ စကားကို မကျေနပ်လည်း ကျုပ်စာကို ဖတ်နေချိန်မှာ အဲဒီစိတ်ကို ဖျောက်ထား။ အဲဒါ စာပေသမား မဟုတ်ဘူး။ ကျုပ်ရေးထားတာက “ဒါပေမယ့် သူနေတာက သူနေချင်လို့ နေတာထက် မိန်းကလေးက နေချင်နေတာလို့ ပြောတယ်။ သူက တကယ့် လူရိုး” လို့တောင် ရေးထားသေးတယ်။
ဘာလို့ ခဏ ခဏ ထည့်မရေးတာလည်း ဆိုတော့ တော်ကြာ မိန်းကလေးတွေကို မကောင်းပြောပါတယ် ဆိုပြီး မိန်းမချင်းစည်းလုံးမှုတို့ မဟာဖိုဝါဒရဲ့ အပြိုင် ငါ့ဟဲ့ မိန်းမဝါဒတို့ ပေါ်လာမှာစိုးလို့ ခဏ ခဏ မရေးတာ။
အောက်မှာလည်း တယောက် စိတ်ဆိုးပြီး မကျေနပ်စိတ်ကို အခြေခံပြီး ရေးထားတယ်။ အဲဒါတော့ နောက်မှပဲ ပြန်တော့မယ်။ ခင်ဗျား အဲဒီလို မကျေနပ်စိတ်ကို အခြေခံရေးမယ် စာသေသေချာချာ မဖတ်ပဲ ရေးမယ်ဆိုရင် ခင်ဗျားကို ကျုပ်ဘာမှ မပြန်တော့ဘူး။ ကျနော် ကျန်တဲ့လူတွေကို ပြန်ဖြေရဦးမယ်။ ကျနော် ပြီးအောင် ပြောပါရစေဦး။
သြော် ဦးလေး ကြီး ရယ် .. ကောင်မလေးက ဘဲ နေချင်တယ် လို့ ပြောတယ် ဆိုတာ နဲ့ ကောင်မလေး က နေချင်တယ် ဖြစ်သွားရောလား .. ထားပါ ကောင်မလေးက နေချင်လို့ ။
ကိုယ်က ဘာလို့ ပါသွားရတာလဲ ။ ကိုယ်က ပါ နေပြီးမှ ကောင်မလေးကနေချင်လို့ပါဆိုပြီး အပြစ်လွှဲချတတ်နေရင် ပိုလို့တောင် ဆိုးလာပါရောလား ..ထားပါတော့ …
ပြီးတော့ ဦးလေးကြီးရေ .. ကျွန်တော် တို့ ကမော်ဒရေတာ လုပ်ပေးတယ် ဆိုတာ ဆဲတဲ့ စကားလုံးတွေ့ ရင် ဖျက်ပေးတာ နဲ့ လူမျိုးရေး သိပ်လွန်ကဲ တာမျိုး လောက်သာ ကူဖျက်ပေးတာ ..ကျန် တာ ဘာရေးရေး ဘာမှ ၀င်ဖျက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာလေးရယ် ..
ဦး စံလှကြီး တံဆိပ်တွေ ကပ်လွန်းလို့ ရီချင်လို့ တမင် လျှောက်ရေးတယ် ဆိုတာ မှတ်ပါ .. အခုထိတော့ စိတ်ဆိုးတာ မကျေနပ်တာ မရှိသေးပါဘူး ဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အာမခံ နိုင်ပါသေး တယ် ။ ဦးလေးကြီးရေ ..
ကိုထူးဆန်းကို ကျနော်က စာသေသေချာချာ ဖတ်စေချင်တယ် ဆိုတာ တကယ်ပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ကိုထူးဆန်း အခု အချက်အလက် မှားနေရုံတင် မဟုတ်ဘူး ကျနော် အကြိမ်ကြိမ် ပြောထားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ လွဲနေတယ်။ ကိုထူးဆန်း ပြောချင်နေတာက ဒီလူရဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကောင်းသလား မကောင်းသလားဆိုတာ ပြောချင်နေတာ။ မကောင်းဘူးဆိုရင် ရှုံ့ချချင်နေတာ။ နောက်ပြီး ဒါ ဒီလူ မကောင်းဘူးလို့ ပြောချင်နေတာ။ ကျနော် ရည်ရွယ်တဲ့ အချက်က လူတဦးကို ကွက်ပြီး မှားတယ် မှန်တယ်ဆိုတာကို အဓိက ပြောချင်တာ မဟုတ်ပဲ ဒီလိုလုပ်လို့ နစ်နာရတာတွေကို အဓိက ထားပြောချင်တာပါ။
ကျနော် ဥပမာပေးတဲ့ ကျောင်းသူလေးဆိုရင် ကျနော်သူ့ကို ဒီလို လုပ်တာ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ယုတ်နိမ့်တယ် မှားတယ် တခုမှ မပြောပါဘူး။ သူလုပ်တာ အမေရိကန်လို နိုင်ငံမှာဆို မှန်ချင်မှန်မယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာတော့ ဒီလိုလုပ်လို့ သူနစ်နာရပြီ ဆိုတာကိုပဲ ပြောချင်တာပါ။ အသားပေးတဲ့ နေရာကို ကွာပါတယ်။
နောက်ပြီး ခင်ဗျားပြောတာ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး။ ကောင်မလေးက သူ့ကို ကန်ထုတ်ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ သူက ကောင်မလေးကို ကန်ထုတ်ရမှာ။ ကျုပ်သိသလောက် ကောင်မလေးက သူ့အိမ်ပေါ်မှာ။ နောက်ပြီး သူက အတည်တကျ လက်ထပ်ဖို့ တကြိမ်မက စည်းရုံးပြီးပြီ။ သူက အမှန်တော့ အတည်တကျ ယူချင်နေတာ။ မိန်းကလေးက အကြောင်းပြပြီး ရွှေ့နေတာ။ ရှားတော့ ရှားတာပေါ့။ ဒါကတော့ ချွင်းချက်ပဲ။ မိန်းကလေးက စိတ်မပါတဲ့ ကိစ္စကို အတင်းအကျပ် လုပ်ဖို့ကျတော့ မလွယ်ဘူးလေ။ သူက ကောင်မလေးကို စွဲလမ်းနေပုံ ရတယ် ထင်တာပဲ။ ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ လက်ထပ်ဖို့ ကိစ္စကို ယောကျာင်္းလေးဘက်က ရွှေ့တာ။ မိန်းကလေးစိတ်ထဲမှာ ဘာ စဉ်းစားထားတယ် ဆိုတာတော့ သူပဲ သိမယ်။
.လက်စသပ်တော့ ကိုစံလှကြီးဆိုတာက ကျုပ်လောက်နီးပါး ကွန်ဆာဗေးတစ်ကြီးပါတကား…..
.ကောင်းပါတယ်။ ရွာထဲမှာ အဖေါ်ရတာပေါ့လေ…
.ဒီဆောင်းပါးထဲ ထောက်ပြ ဆွေးနွေးထားတာလေးတွေကို သဘောကျတယ်..။
.ကိုယ့်စိတ်ထဲက အတွေးအမြင်မျိုးနဲ့ တော်တော်ကြီးတူတာလဲပါသပေါ့…။
.လစ်ဘရယ်သမားတွေကို စောင့်ပြီးမှ ၀င်ဆွေးနွေးပါဦးမယ်…
ဦးဦးပါလေရာရေ အဖော်ရတယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါရဲ့ဗျာ။ အခုတော့ မဆွေးနွေးပါနဲ့ဦး။ စောင့်ပြီး ဖတ်ကြည့်ပါဦး။ ပြီးမှ အနှစ်ချုပ်လေး ဝင်ရေးချင် ရေးပေါ့။
အခုတော့ ကျနော် တယောက်ချင်းစီကို ပြန်ဖြည်လိုက်ဦးမယ်။ လက်တောင် မလည်တော့ဘူး ဟူး ဟူး။
“ကိုယ်ကျင့်တရားစံများ မတူသည်ကို သိစေလိုခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ သူများ ကျင့်သုံးတယ်ဆိုတိုင်း ကိုယ်ကျင့်သုံးလို့ မရတာကို သိစေလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ”
ကျုပ်ကတော့ ပထမအုပ်စုဝင်ဆိုပါတော့ ကိုစံလှကြီးရေ…လက်ရှိကျုပ်တို့ဆီမှာ Living together ကိုလက်ခံနိုင်ဖို့ အတွက်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါဘူး…ကိုစံလှကြီး ဥပမာဆောင်သွားတဲ့ ရည်းစားများတဲ့ အမျိုးသမီး ဥပမာ မျိုး လက်ရှိအချိန်ထိရှိနေတုန်းပဲ…ဟိုလူနဲ့တွဲတာတွေ့လိုက်၊ ဒီလူနဲ့တွဲတာတွေ့လိုက်ဆိုရင်တော့ ..အထင်သေးချင်ကြတုန်းပါပဲ…
ကိုကြီးမိုက်ရေ နောက်ကျတဲ့အတွက် ခွင့်လွှတ်ပါနော်။ ကျေးဇူးအများကြီး တင်ပါတယ်။ စံအမျိုးမျိုး ရှိတာကတော့ အမှန်ပါ အကိုရယ်။ မြန်မာမိန်းကလေးတွေက တခြား မိန်းကလေးထက် ပိုပြီး စောင့်စည်းရတဲ့ ထုံးစံတော့ အမှန်ပဲ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခါတလေ ကျပြန်တော့လည်း မြန်မာက အခွင့်အရေး ပိုရတယ်လို့ ထင်ရပြန်ရော။
ဥပမာ ကျနော်တို့ မြန်မာထုံးစံမှာ သေတမ်းစာက လုံးဝ အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ ကျနော် သိသလောက် နိုင်ငံတော်တော် များများက ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖေဖြစ်သူ မိဘဖြစ်သူက ဘယ်သားသမီးတော့ ဘယ်လောက်ရစေ ဘယ်သူတော့ မရစေနဲ့ မိန်းမနှစ်ယောက်ဆိုလည်း ဘယ်သူရစေ ဘယ်သူမရစေနဲ့ ဆိုပြီး ရေးလို့ရတယ်။ မြန်မာထုံးစံကတော့ အဲဒီလိုရေးရင် လက်တောင်ခါပြလိမ့်မယ် ထင်တယ်။ လုံးဝမရဘူး။ သားသမီးဖြစ်ကြောင်း သက်သေ ပြနိုင်ရင် အမွေစား အမွေခံဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရင် အားလုံး ညီတူညီမျှလို့ ဆုံးဖြတ်တယ်။ မြန်မာအမျိုးသမီးတွေကိုလည်း ဥပဒေက အဲဒီလိုကို ကာထားပေးပါတယ်။ အသေးစိတ်တော့ မရေးတော့ပါဘူး။
ဓလေ့ထုံးစံကတော့ ရှိနေချိန်မှာ အဲဒီအတိုင်း လက်ခံလိုက်ရင် ကောင်းတယ်။ ကိုယ်ကျင့်တရားကို ထိခိုက်တာမျိုးလည်း မဟုတ်ဘူး ဆိုရင်ပေါ့။ ဖောက်ဖျက်ရင် ဘာဖြစ်မလည်း။ အင်း ဒုက္ခရောက်နိုင်တာပေါ့လို့ ပြောလို့ရတယ်။ မိန်းကလေးတွေကို ယာဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံနဲု့ ဖိနှိပ်တယ်လို့တော့ ထင်ကြလိမ့်မယ်။ အမှန်တော့ မဟုတ်ဘူး။ ဓလေ့ထုံးစံက မလိုက်နာသူကို မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် ယောကျာင်္းပဲဖြစ်ဖြစ် တိတိကျကျ ဒဏ်ပေးတယ်။ ယောကျာင်္းတွေ လိုက်နာခဲ့ရတဲ့ မလိုက်နာရင် ဒဏ်ခတ်တာ ခံခဲ့ရတဲ့ စနစ်တခု အကြောင်း ဒီမှာရေးလိုက်မယ်။
အကို ကြားဖူးလိမ့်မယ်။ ကျုပ်တို့ ရှေးဘိုးဘေးတွေ ပေါင်မှာ ခါးကနေ ဒူးခေါင်းအထိ ယောကျာင်္းတွေမှန်ရင် ထိုးကွင်း ထိုးခဲ့ရတယ်။ ဘယ်လောက်အထိ သံမဏိ သက်တမ်းရှည်ခဲ့တဲ့ စနစ်လည်း ဆိုရင် တောင်ငူခေတ်မှာ စာနဲ့ ပေနဲ့ကို ထွန်းကားနေပြီ။ နတ်ရှင်နောင်ရဲ့ ထိုးကွင်းတွေကို နန်းတွင်းသူလေးတွေ ခြင်းခတ်နေတုန်း ချောင်းကြည့်တယ်ဆိုတာ ဖတ်ခဲ့ရတယ်။ အမှန်မှာ ဒီစနစ်သည် ပုဂံခေတ်လောက်က စခဲ့တာ ဖြစ်မယ်လို့ ထင်တယ်။ ဒီထက်တောင် စောချင် စောလိမ့်ဦးမယ်။ အနည်းဆုံး ရာစုနှစ်ခြောက်ခု အထက်ကနေ နှစ်ထောင်ကျော်လောက်အထိ ထွန်းကားခဲ့တာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ တောင်ငူခေတ်ကနေ အင်္ဂလိပ်ခေတ်ဦးလောက် အထိ အလွန် ထွန်းကားခဲ့ပြီး ခေတ်နှောင်းလောက်မှာတော့ တိမ်လာပြီ။ ရှိတော့ ရှိတုန်းပဲပေါ့။ ဟိုတုန်းက ကျနော်တို့ အိမ်နားက အဘယွန်းဆိုတဲ့ ရှေးအဘိုးကြီးရဲ့ ပေါင်မှာ အဲဒီလို ထိုးကွင်းအပြည့် တွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ သူပြောတယ် တတောင်လောက်ရှိတဲ့ ကြေးစုတ်ကြီးတွေနဲ့ ထိုးတာကွတဲ့။ အဲဒါ ကျနော်က ဒါဆို သိပ်နာမှာပေါ့ အဘရယ်လို့ ပြောတော့ သူက နာတာတော့ နာတာပေါ့ ကောင်လေးရယ်။ ငါယောကျာင်္း ဆိုတဲ့ မာန်ကို သွင်းပြီး အောင့်ခံရတော့တာပဲတဲ့။ မင်းတို့ ခေတ်မှာက သတ္တိတွေ တုန်းကုန်ကြပြီကွလို့တောင် ညည်းသလို ပြောဖူးတာ မှတ်မိတယ်။
အကိုရေ ကြီးမှ စာဖတ်ကြည့်တော့ တချိန်က မြန်မာယောကျာင်္းတွေ အတွက် တကယ့် အခမ်းအနားကြီးတခုပါလား ဆိုတာ သွားတွေ့တော့တာပဲ။ သူတို့ခေတ်က အဲဒါမထိုးရင် ယောကျာင်္းဘဝကနေ တန်းကျသလောက်ကို ကြီးကျယ်ခဲ့တာပဲ အကိုရဲ့။
ယောကျာင်္းအားလုံး ထိုးရတယ်။ နာလည်း ထိုးပဲ။ အောင့်ခံ မခံနိုင်လို့ မရဘူး။ ဆေးထိုးပြီးရင် မင်းအခုမှ ယောကျာင်္းစင်စစ်ကြီး ဖြစ်ပြီလို့တောင် ပြောသေးတယ်ဆိုကိုး။ ပြင်းချက်ကလည်း ခံနိုင်ရည်နည်းရင် ထမ်းတောင် ထုတ်ရဆိုပဲ။ မထိုးရင် ဘာဖြစ်လည်းဆိုတော့ လာပြီပေါ့ အဲဒီဒဏ်ပဲ။ အဲဒီယောကျာင်္းဟာ မိန်းမရဖို့ သိပ်ခက်သွားပြီး။ မိန်းမတွေကကို ဒီလို လူမျိုးကို အထင်သေးတယ်။ လူရာတောင် သိပ်မဝင်တော့ဘူး။ လူရှေ့သူရှေ့ ခါးတောင်းကျိုက်တာတို့ ပေါင်ပေါ်တာတော့ မလုပ်ဝံ့တော့ဘူး။ မိန်းကလေးတွေကတောင် ဘယ်လို ခေါ်သလည်းဆိုရင် ပေါင်ဖြူတဲ့ အစေလက်သုတ်တဲ့ သွားပြီပေါ့။ ပေါင်ကို ဖုံးထားနိုင်လို့ အိမ်ထောင်ကျတဲ့ ညမှာပဲ ပေါင်မှာ ထိုးကွင်းမရှိတာကို သိသွားရင် စိတ်ထက်တဲ့ မိန်းကလေးက ချက်ချင်း ကွာမယ်ဆိုပြီး လုပ်တယ်လို့တောင် ဖတ်ဖူးတယ်။
ကျနော်တို့ ဒီဘက် ခေတ်နဲ့ ကြည့်ရင်တော့ တမျိုးကြီးလိုပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီစနစ်ကလည်း မြန်မာ့လူ့ဘောင်ကို နှစ်အကြာကြီး အကျိုးပြုခဲ့တယ်။ ကျနော်တို့ နိုင်ငံက ပတ်ဝန်းကျင် နိုင်ငံတွေနဲ့ ယှဉ်ရင် လူနည်းသေးတာပဲ။ ကုလသမဂ္ဂ မရှိတဲ့ ဓါးခေတ် လှံခေတ်မှာ ဘေးနားက အချိန်မရွေး ဝင်တိုက်မှာပဲ။ ယောကျာင်္းတွေသာ ခံနိုင်ရည်နည်းရင် သွေးနည်းရင် ခံရပြီပေါ့။ တကယ်လည်း တယောက်ချင်း စီးချင်းထိုးဖို့ လာစိန်ခေါ်တာကနေ ဝင်တိုက်တာအထိ အများကြီး ရှိခဲ့တာပဲ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာဟာ ဓါးခေတ် လှံခေတ် လူလူချင်းယှဉ်ရတဲ့ ခေတ်မှာ ဘယ်သူ့ကိုမှ အောက်မကျခဲ့ဘူးလေ။ အင်ဒိုချိုင်းနားကျွန်းဆွယ်ကိုတောင် ကိုယ်က အင်အားကြီးရင် ကြီးသလို ဗိုလ်လုပ်လိုက်သေးတယ်။
မြန်မာစစ်သည်တွေ သိပ်ခံနိုင်ရည်ကောင်းပြီး ထိသွားလည်း သိပ်မညည်းတတ်ဘူးဆိုတာ အင်္ဂလိပ်စစ်မှတ်တမ်းထဲမှာလည်း ဖတ်ဖူးတယ်။ ကျနော်ထင်တာက အဲဒီဓလေ့ကြောင့်လည်း ပါလိမ့်မယ် အကိုရယ်။ လူပျိုအရွယ်မှာ အဲဒီ ထိုးကွင်းထိုးဖို့ မြန်မာယောကျာင်္းတယောက်ဟာ ဘယ်လောက်အရွယ် ကတည်းက ကီသွင်းထားရသလဲမှ မသိတာ။ ခပ်ငယ်ငယ်ထဲက ဒါကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် စိတ်ကို ပြင်ထားရပုံပေါ်တယ်။
ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ သိပ်ဆန်းတဲ့ လက်နက်တွေ ပေါ်လာတော့ အဲဒီလောက် မလိုတော့ဘူးလေ။ ဒါကတော့ ဓလေ့ထုံးစံအကြောင်း အကျယ်ချဲ့ လိုက်တာပါ။
အခု အရွယ်အရ လက်ခံတာ ။
ကျနော့်မှာသာ သမီးတစ်ယောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးမှာ ဆိုရင်တော့. .အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာမယ့်စိတ်ခံစားချက်အရ
မြန်မာ မိန်းကလေးတွေအတွက်တော့ LT က သတိကြီးကြီးထားရမယ့်ကိစ္စ ထင်တယ် ။
LT လက်ခံပြီး LT ကြောင့် အကျိုးနည်းအဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့ သတိကြီးကြီးထားရမယ်ထင်တာ. . .
ကျနော် သိပါတယ်။ ခင်ဗျား မြန်မာပြည်မှာနေပြီး တကယ် သမီးတယောက် ရလာခဲ့ရင် ခင်ဗျား စိတ်ပြောင်းမှာပါ။
ဒီမယ် ကစံလှဂျီး.. အခြစ်မှာ အရွယ်ကာလ ကန့်သတ်ချက် အရှိဗူးဗျ..။ သူနဲ့ကိုယ်အဂျား အသက်၆၀ ကွာနေပလေ့စေ… အဲ.. သားမက်နဲ့ယောက္ခထီး ညီအကိုအရွယ် ဖြစ်နေပဇ.. ပက်သနာ အရှိသင့်ဗူး..။ ဟုတ်တယ်နော် ခြစ်ပါပါး သဂျီးဇုတ် မာမွတ်ခိုမ်..။ ငါကွ…
ကိုကြောင်ကြီး ခင်ဗျား ယောက္ခမလား ယောက္ခထီးကြီးလား နည်းနည်း ထိန်းပါဦး။ ကျန်တဲ့လူတွေ နောက်နေ့ကျမှ ကျုပ်ပြန်လာခဲ့မယ်။ သွားဦးမယ်။ အားလုံးဆီ ပြန်လာပါမယ့်။ စိတ်ရှည်ကြပါကွယ်။ အမြန်တော့ ရိုက်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် မရဘူး။
ယောင်္ကျားလေးဘက်က စဉ်းစားမယ် ၊ အဲသလို အယ်လ်တီနေဖို့ ၊
နေမိမှာပါပဲ ၊ နေပြီး အတော်ကြာလို့ သဘောမတိုက်ဆိုင်လို့
တစ်လမ်းစီ သွားမယ် ထား ၊ ဘယ်သူ နာမလဲ ?
သမီးရှင်ဘက်က စဉ်းစားမယ် ၊
သတို့သားလောင်းခေါ်ခေါ် ရည်းစားခေါ်ခေါ် အဲဒီသကောင့်သားကို
ကိုယ့်သမီးက အဲသလို လေ့လာ စမ်းသပ်ချင်လို့ပါဆိုရင်
အဖေဖြစ်သူက ဘာလုပ်မလဲ ?
သမီးကို သတ်ပြီး ကြိုးစင်တက်လိုက်မယ် ၊
ကိုမျိုးသန့်ရေ ပထမဆုံးအကြိမ် လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ မြန်မာပြည်က အဖေ အများစုကတော့ အဲဒီလိုပဲ တွေးကြလိမ့်မယ်။ မပြောလည်း သားသမီးနဲ့ မိဘ မြန်မာပြည်မှာက သိပ်ဝေးနေတာမှ မဟုတ်တာ။
ကိုမျိုးသန့်ကို တချို့က ဘောလုံးပွဲအကြောင်း ရေးတယ်လို့ ပြောဖူးသလား မသိဘူး။ ပြောဖူးတယ် ထင်တယ်။ ကျနော် သူများ ကွန်မန့်ထဲမှာ တွေ့ဖူးတယ်။ တကယ်လို့ ကျနော် ဒီပို့စ်မှာ ဘောလုံးအကြောင်း ထည့်ပြောဖြစ်ခဲ့ရင် ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး။
( ဥပမာ ဦးကြောင်ကြီးနဲ့ဇနီး ဦးစံလှကြီးနဲ့ဇနီး ဦးမျိုးသန့်နဲ့ဇနီး ဒီလို ဖိတ်တယ် မဟုတ်လား)
ခင်ညားကြီး အဲသလို ဘာကြောင့်ရေးတာလဲ ၊ ကျုပ်မှာ ဇနီးမရှိ ၊
သားသမီးတွေပဲ ရှိတယ် ၊ ခင်ညားကြီးလုပ်မှ အယ်လ်တီ နေမယ့်သူတွေ ပြေးကုန်ဦးမယ် ၊
ဟီး ဟီး စတာပါ ၊
အန်းနီးဝေး ဟုတ်ပ ဘောလုံးပွဲကျေညာသူ လုပ်ခဲ့တယ် ၊
အခုလည်း ဘောလုံးဝက်ဘ်ဆိုက်အယ်ဒီတာပါပဲ ၊
နောက် ဆုံကြဦးမယ်လေ ပျော်ပျော်ပါးပါးပေါ့ ၊
အော် အဲဒါ ဆိုရင်တော့ ဆောရီးပါ ကိုမျိုးသန့်ရေ။ မြန်မာအဖေတယောက် တွေးမယ့် တွေးလုံးမျိုး တွေးပြလို့ အိမ်ထောင်သည်လို့ ထင်နေတာပါ။
တကယ်လို့ပေါ့လေ ဒီပို့စ်မှာ ကျနော် ဘောလုံးအကြောင်း တစွန်းတစ ထည့်ပြောခဲ့ရင် ကြည့်ပေးပါဦး။ နည်းနည်းပဲ ပြောမှာပါ။ အကြောင်းအရာ ချော်မှာစိုးလို့။
ကွန်ဆာဗေးတစ်အမြင်ဖက်က.. ရေးထားတဲ့စာများသာပါပဲလို့.. ရိုးရိုးလေးမြင်မိပါတယ်..။
ယူအက်စ်မှာ.. ဂျပန်မှာ.. ဘယ်လောက်လစ်ဘယ်ရယ်ကျတဲ့ အိမ်ထောင်စုတွေရှိတယ်ဆိုဆို… သမီးရှင်မိဘတွေကို သမီးနဲ့ LT နေချင်တဲ့သူက.. စမ်းသပ်လေ့လာပါရစေ.. တူတူနေပါရစေလို့.. လာမပြောပါကြောင်း..။
ဒါက.. လူမှုရေးနဲ့အပြန်အလှန်လေးစားမှုအရဖြစ်ပါကြောင်း…။ Respect! Respect! Respect!
မြန်မာပြည်မှာတော့.. မင်းသမီးတယောက်က (အမှတ်မမှားရင် ၀ိုင်းစုခိုင်သိန်း) က.. မင်းသားအဖေကို.. ဖုံးဆက်ပြီး.. တူတူနေခဲ့ကြတယ်လို့.. ပြောတာ..အသံနားထောင်ဖူးကြောင်း…
မြန်မာပြည်က မင်းသမီးတွေ..အဆိုတော်တွေ..တော်တော်များများလူသိသူသိ.. LT နေကြ…တွဲကြအိပ်ကြ.. ပြီးတော့ တခြားတယောက်ကိုလက်ထပ်ကြ… တော်တော်.. တော်တော့်ကို..များကြောင်း.. ။
ဗယ်လင်တိုင်းဒေးမှာလည်း.. ဟော်တယ်တွေဟာ.. လစ်ဘရယ်နိုင်ငံတွေ.. LT ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့သူများတဲ့နိုင်ငံတွေထက်.. အလွန်ပိုအလုပ်များကြပါကြောင်း…။
ဒါက.. ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရ.. လက်တွေ့…။ :buu:
ခင်ဗျားအကြောင်းတော့ ကျုပ်သိပြီးသားပဲ။ တရုတ်ပြည်က တိန့်ရှောင်ဖိန် တတ်လာလို့ တိုးတတ်လာတာတောင် မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်လို့ တိုးတတ်လာသလိုလို လျှောက်ပြောနေတဲ့ ခင်ဗျားအကြောင်း မသိရင် ခက်မယ်။
ခင်ဗျားကိုယ် ခင်ဗျား လစ်ဘရယ်လို့ ထင်နေပုံရတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျုပ်သိတယ်။ ခင်ဗျားမှာ တိမ်သလ္လာတွေ ဖုံးလွှမ်းနေတယ်။ ဘာတိမ်တွေလည်း ဆိုတော့ မိုးပြာဂိုဏ်းရဲ့ ကြောက်စရာ အငြိုးတွေပဲ။ ခင်ဗျားဆရာ ဦးညာနကို အစိုးရနဲ့ မဟနက ထောင်ချလို့ ဆိုပြီး မဟနကို မုန်းရာကနေ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ခင်ဗျား အသားလွတ် တိုက်ခိုက်နေတာလေ။
ကျနော်လည်း ခင်ဗျားပြောတာတွေကို အကုန်ပယ်တယ်။ ရှေ့နောက် အကုန်တလွဲတွေ ဖြစ်နေလို့လေ။
ခင်ဗျားလည်း တခုခု ဖြစ်ရင် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ဆရာတော်ကြီးတွေကို စော်ကား ပြောဆိုနေတာတွေ ရပ်သင့်တယ် ထင်တယ်။ အခုဟာက ခင်ဗျားကပဲ စလုပ်နေတာ။ ထေရဝါဒ ကိုးကွယ်သူတွေ အများကြီးရှိတယ်။ အဲဒါကို ပုတ်ခတ်ပြီး မပြောသင့်ဘူး။
ဒါက လူမှုရေးနဲ့ အပြန်အလှန် လေးစားမှုအရ ဖြစ်ပါကြောင်း……။ Respect! Respect! Respect!
ကိုယ်က သူများကို ပုတ်ခတ်နေပြီးတော့များ respect လုပ်လိုက်သေးတယ်။
မြန်မာပြည်က မင်းသား မင်းသမီးတွေ ကိစ္စကတော့ ခင်ဗျား မော့မော့လေးလား ဘော်ဘော်လေးလား ကထူးဆန်းကလေးကို ကျုပ်ရှင်းပြထားတယ်။ အဲဒီမှာ သွားဖတ်။ ကျုပ်အနေနဲ့ ဥပမာပေးရင် အားကျစရာ လူတွေ အကြောင်းပဲ ဥပမာ ပေးတယ်။
မလေးရှားလေယဉ်ပျောက်နေတာလည်း.. ကျုပ်က..မဟနကိုမကောင်းမြင်တာကြောင့်လို့.. အဲ..အဲ..
ဂဏန်းကောင်တွေပြုသမျှ နုနေရတဲ့အထဲ ငါးဖယ်ကပြောင်းပြန်ကွယ်.. :buu:
အဲဒီလို စွပ်စွဲနေတာ ခင်ဗျားလေ။ တခုခု ဖြစ်တာနဲ့ ဘာသာရေးကြောင့်ပါဗျို့တို့ လူတွေကို ဆုံးမဖို့ တာဝန်ရှိတာက ရဟန်းဆိုပြီး အသံပြဲကြီးနဲ့ အော်အော်နေတာလေ။
မလေးရှားလေယာဉ် ပျောက်တာတော့ မိုးပြာဂိုဏ်းလို့ မစွပ်စွဲပါဘူး။ ဖြစ်နိုင်တာကို စွပ်စွဲရရင် ဒီ လစ်ဗင်းတူဂဲသားကို အခု ဖြန့်တာတော့ မိုးပြာဂိုဏ်းရဲ့ မဟာဗျူဟာပါ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ မိန်းကလေး အလိုတူရင် ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံ မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ အယူဝါဒရဲ့ ရှေ့တော်ပြေး အတွေးအခေါ် အနေနဲ့ ပေါ်လာတာပါ။ မသိရင် ခက်မယ်။ သီလပုံစံဖြည့်ပါ ဆိုတော့ လူတွေက ဗြောင်ဆိုရင် သိနေပြီလေ။ အဲဒါကြောင့် တမျိုးပြောင်းကြည့်တာ။ လူတွေလည်း မသိရှာဘူး အနိစ္စ။
အာရုံနောက်တယ် သူငယ်ချင်း ။
ကွယ် … ဘာဟုတ်သေးလဲ
မြန်မာ့ဓလေ့အရ ဘယ်လောက်ပဲ လစ်ဘရယ်ကျတယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးပဲဆိုဆို သူ့ချစ်သူ/ရည်းစား/တွဲဖေါ်ကို တည်းခိုခန်းသွားဖို့တော့ စပြီး persuade မလုပ်ဘူးလို့ ၆၀% နဲ့အထက်သေချာပါတယ်။
အိုက်တော့ လစ်ဘရယ်ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးသမီးအများစုက ဒီကိစ္စကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် ပြောနေပေမဲ့ တကယ်တန်း ဆိုရှယ်လို့ခေါ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကျိုးခံစားခွင့်များသူက ယောက်ကျားလေးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ အူးစံလှဂျီး ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း မင်ဂါဆောင်စရိတ်.. ဘာစရိတ် ညာစရိတ် ကုန်စရာမလိုပဲ မိန်းမတစ်ယောက်ကို ရလို့ပါ။
ဆိုတော့.. ကိုယ့်နှမ၊ ကိုယ့်သားသမီးကို သဘောမတူမဲ့ကိုစ္စမျိုးကို ကိုယ့်ရည်းစား ကို ဆွဲဆောင်တယ်… ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ ရိုးရာအစဉ်အလာအရ လက်ထပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျ အပျိုစင်ကိုလိုချင်တယ်။ အဲဒီ့မှာ စတွေ့တာပဲ…
ယဉ်မင်းဦးရဲ့ အက်တိုးပစ် အပျိုစင် ဆိုတဲ့ ၀တ္တုလေးကို သွားသတိရပါတယ်။ သား ဖြစ်သူ သဘောကျနေတဲ့ ကံမကောင်း အကြောင်းမလှလို့ အိမ်ထောင်ကွဲရရှာတဲ့ တစ်ခုလပ် ဆရာဝန်မလေး ကို သဘောမတူပဲ…. ဂုဏ်သရေရှိ အပျိုစင်လေးလို့ထင်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ မင်ဂါဆောင် ပေးပြီး … အိုက် ဆရာဝန်မလေးကို အိုက်ပွဲ ဖိတ်ကြားတဲ့အခါ… အများအမြင်မှာ ဂုဏ်သရေရှိ အပျိုစင်လေးက အဲဒီ့ ဆရာဝန်မလေး တာဝန်ကျနေတဲ့ဆေးရုံကို အူလမ်းကြောင်းသန္ဒေတည်မှုနဲ့ ခွဲစိတ်ဖို့ရောက်လာဖူးတဲ့ အက်တိုးပစ် အပျိုစင်လေး ဖြစ်နေပါတယ်တဲ့…..
တစ်ခုကို လိုချင် တစ်ခုကို စွန့်ရပါမယ်….
နိုင်ငံရေးများပြီး discriminate ဖြစ်မှာ စိုးလို့ … ဒီနားမှာ ခဏရပ်….
မိန်းခလေးတွေ အနေနဲ့ကလဲ နောက်ဆက်တွဲ ကိစ္စများကို စင်းဇားထားရပါလိမ့်မယ်… နှစ်အူးသဘော တူ အတူနေပီးမှ ယောက်ကျားလေးဘက်က စွန့်ခွာသွားရင် ဗိုက်တစ်လုံးနဲ့ ယောက်ကျားတွေ မကောင်းဘူး စိတ်နာကျန်ခဲ့မယ်အစား …. ဒီလို စွန့်ခွာသွားရင် ငါ့ဘက်က ဘာဆက်လုပ်မလဲ စဉ်းစားထားသင့်ပါတယ်…
ဆိုလိုတာက တားမဲ့သူများ ဆက်တားနေဦးမှာ ဖြစ်သလို… တည်းခိုခန်းတွေကလဲ လူစည်လျှက်ပါဘဲ….
စားပီး နားမလယ် ရှောင်ထွက်သွားမဲ့ယောက်ကျားလေးများ ရှိသလို…. အိန်ဒရေ လေးနဲ့ အက်တိုးပစ် အပျိုစင်မလေးများကလဲရှိနေအုံးမှာပါပဲ…..
မည်သူမဆို ကိုယ်စိုက်သော အပင်၏ အသီးကိုသာ ခူးဆွတ်ရမည်…..
အတည်မန့်မယ့် wow အတွက် ဦးလေးကလည်း အတည်မန့်ပါမယ်။ အမှန်မှာတော့ အဲဒီ sex ကိစ္စဟာ နှစ်ယောက်စလုံး စိတ်ဓတ်ခိုင်ကျည်ဖို့ လိုတယ်။ စပြီးပြောတာက ယောကျာင်္းလေး ဆိုပေမယ့် အဲဒီအချိန်မှာ နှစ်ယောက်စလုံးက အထိအတွေ့မှာ သတိမေ့နေကြပြီ။ အဲဒီလို ဖြစ်တာ။ မိန်းကလေးလည်း သွေးနဲ့ သားနဲ့ပဲကွယ်။ ဘာသားနဲ့ ထုထားတာမို့လည်း။ တတ်နိုင်ရင်တော့ နှစ်ယောက်တည်း ဆိပ်ကွယ်ရာတွေ သွားတာ ရှောင်ကြဖို့လိုတယ်။
အမှန်တော့ ဦးလေး ဟိုတလောက အဲဒီလို လုပ်နေတဲ့ ကောင်လေးတယောက်ကို အဲဒီလို မလုပ်ဖို့ ပြောဖူးတယ်။ သူပြောတာက ဦးလေးရယ်တဲ့ သားက လုစား ဓားပြတိုက်စားတာ မဟုတ်ရပါဘူးတဲ့။ သားက ရိုးရိုးသားသား တောင်းစားတာပါတဲ့။ သားက တွေ့ရင် ပေးမှ ကျွေးမှ စားရမယ့် ဘဝပါ ခင်ဗျာဆိုပြီး သနားအောင်ပြောပြီး တောင်းပါတယ်တဲ့။ သူတို့က ပေးမှ ကျွေးမှ သားက စားတာပါခင်ဗျာ ဆိုပြီး ပြောတယ်လေ။
အဲဒီတော့ အဲဒါကတော့ နှစ်ယောက်စလုံးနဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးက ပိုနစ်နာစရာရှိလို့ ပိုဆင်ခြင်စေချင်တယ်။
အဲဒီ ယောကျာင်္းတွေ အပျိုစင်လိုချင်တာတော့ ဦးလေးလည်း မတတ်နိုင်ပါဘူးကွယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို ဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းက ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ယောကျာင်္းအများစုက မိသားစုမှာ breadwinner လို့ခေါ်တဲ့ အဓိက ငွေရှာသူတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ဦးလေးတို့ လူလတ်ပိုင်းတွေ ကြည့်လိုက်တာ အကုန် ဒီအတိုင်းချည်းပဲလိုလို တွေ့တယ်။ ဇနီးကတော့ ပညာတတ်ချင် တတ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် များသောအားဖြင့် ယောကျာင်္းကသာ breadwinner ဖြစ်နေတတ်တယ်။
မိန်းကလေးတွေလည်း တကယ်တော့ ကိုယ့်အတွက် အဓိက breadwinner ဖြစ်မယ့်လူကို ကြည့်တာပါပဲ။ LT နေချင်တဲ့လူလည်း ဒီအချက်ကို အဓိက ကြည့်ချင်တာပါပဲ။ ဒါက မိန်းကလေးတွေရဲ့ အဓိကစံပဲ။ ဒါက သဘာဝပါ။
မိသားစုမှာ breadwinner ဖြစ်ပြီး အဓိက ငွေရှာသူဟာ အလိုလိုကို အသာစီး ရတတ်ပါတယ့် ငါ့နှမလေးရယ်။ မယုံမရှိပါနဲ့။ ဈေးကွက် သဘောတရားအရ သူက အလိုလို customer ဖြစ်သွားပါပြီ။ သူက သူကြိုက်တဲ့စံနဲ့ ကြည့်တော့မှာပါ။ ဦးလေးက မိန်းကလေးတွေကိုယ်စား သူတို့ကို ပြောကြည့်မယ်။ “မလုပ်ပါနဲ့ ငါ့ညီရာ မင်းတို့လည်း အရင်တုန်းက ကင်းဖူးတာမှ မဟုတ်တာ ဒါလေးတော့ မတွက်ကပ်ပါနဲ့”
သူတို့က ပြောမယ်။ “ဟာ ဒီလိုတော့ မပြောနဲ့ ဦးလေးကြီးရာ ခင်ဗျားတို့ ပြောတော့ ကျုပ်တို့ကို နွားတွေလို ခိုင်းမယ်ဆို။ ခင်ဗျားတို့ သားသမီးကို လုပ်ကျွေးခိုင်းမယ်ဆို။ ငွေမရှာနိုင်ရင်လည်း ကျုပ်တို့မှာ မျက်နှာငယ်ပြီး အပြစ်တင်ခံရဦးမှာ။ အဲဒီတော့ ကျုပ်တို့ တာဝန်ယူရမယ့်လူဟာ တတ်နိုင်ရင် အစွန်းအထင်း မရှိသူ ဖြစ်ချင်တယ်ဗျာ။ ဒါဆို ဒီလိုလုပ်။ ဦးလေးကြီး နှမတွေ တူမတွေကို ကျုပ်တို့ကို လင်မှတ်မှတ် သားမှတ်မှတ် ရှာကျွေးခိုင်း။ ကျုပ်တို့လည်း တနိုင်တပိုင်တော့ ကူမယ်။ အဲဒီအခါ သူတို့လိုပဲ သူတို့ အတိတ်တွေကို ကျုပ်တို့ မပြောတော့ဘူး။”
ကဲ အဲဒါဆို ပြောစရာကို မရှိတော့ပါဘူး ငါ့နှမလေးရယ်။ လောကကြီး ဇောက်ထိုး ဖြစ်သွားမယ် ထင်တယ်။
အမှန်တော့ ငါ့နှမရေ။ အခုနောက်ပိုင်းခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေ ပညာတတ်ပြီး နည်းနည်း ရှေ့ရောက်လာလို့သာ တချို့အခွင့်အရေးတွေ တောင်းလို့ရတာပါ။ ဟိုတုန်းက တို့မိဘများ ခေတ်ကလည်း အဖေကပဲ breadwinner ပဲ။ အဘိုးတို့ခေတ် ပိုဆိုးသေးတယ်။ အဘိုးတယောက်လောက် အလုပ်လုပ်တာနဲ့တင် သူ့မိသားစု လေးယောက်လောက်က အေးအေးဆေးဆေး စားလို့ရပြီ။ အဲဒီရှေ့ခေတ် ဒီထက် ပိုဆိုးဦးမယ်။ အမျိုးသားက breadwinner ဖြစ်ရုံ မဟုတ်သေးဘူး အဲဒီခေတ်က သူခိုးဓားမြလာလည်း ယောကျာင်္းသားက ရှေ့ထွက်ရတယ်။ တောရိုင်းတိရ စ္ဆာန်လာလည်း သူပဲ ထွက်ရတယ်။ တိုင်းပြည်မှာ စစ်ဖြစ်ပြီဆို သူပဲ ရှေ့ထွက်ရတယ်။ ဟုတ်တယ်လေ ခွန်အားနည်းတဲ့ မိန်းမသားတွေကို ရှေ့တတ်ခိုင်းလို့ ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလည်း။ ဆိုလိုချင်တာက ခက်ခဲတာနဲ့ အသက်အန္တရယ် နီးတာ မှန်သမျှကို ယောကျာင်္းသားက ရင်ဆိုင်ရတယ်။
အဲဒါကြောင့် ဘုရားပုထိုးပေါ် အမျိုးသမီးများ တတ်ခွင့်မရှိတဲ့ နေရာ ယောကျာင်္းက တတ်ခွင့်ရှိတယ်တို့ ဘာတို့ ဖြစ်လာတာလို့ ထင်တာပဲကွယ်။ အလိုလိုနေရင်ကို အာဏာက လက်ထဲ ရောက်လာတာပဲကွယ်။ အမျိုးသား အများစု အာဏာရလေတော့ ယောကျာင်္းဆိုတဲ့ နာမ်ကပါ အလိုလို အာဏာရှိလာတော့တာပဲ။
မိန်းကလေးတွေ သြဇာလွှမ်းချင်ရင်တော့ အမျိုးသမီးတွေလည်း breadwinner ဖြစ်အောင် ကြိုးစားရမယ် ငါနှမလေးရေ။ အဲဒီအခါကျရင် သြဇာမလွှမ်းပဲကို မနေပါဘူးကွယ်။
ဦးလေးသိတဲ့ ဆရာဝန်မကြီး တယောက်ဟာ breadwinner ဖြစ်လေတော့ ဦးလေး ငယ်ငယ်တုန်းကဆို သူက သူ့ယောကျာင်္းကို နေ့တိုင်းဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းနေတာတောင် တွေ့ဖူးပါတယ် ငါ့နှမရယ်။
ယောကျာင်္းအများစုသာ အဓိက ငွေရှာသူ ဖြစ်နေရင်တော့ သူတို့ အလိမ်မိပြီး အဲဒီ အက်တိုးပစ် အပျိုစင်လိုဟာမျိုး ရချင်ရမယ်။ ဒါပေမယ့် လာကတည်းက သူတို့ကြိုက်တဲ့စံကို ယူလာပြီး အဲဒါနဲ့ တိုင်းမှာ သေချာပါတယ် ငါ့နှမလေးရယ်။ မကျေနပ်လည်း ဘယ်လိုမှကို မလုပ်နိုင်ပါဘူးကွယ်။
စကားမစပ် အမှန်တော့ ဦးလေး အမျိုးသမီးလည်း ဆရာဝန်ပါ wow ရယ်။
ငါကပေါင်မုန့်ရှာကျွေးတဲ့သူပြောပြော ထမင်းရှင်ပြောပြော အိမ်ထောင်ဦးစီးပြောပြော…. ကပ်စတမ်မာပြောပြော….
အခွင့်အရေးတစ်ခုကို လိုချင်ရင် အိုက်အခွင့်အရေးကို ရယူနိုင်တဲ့ အရည်အချင်းရှိရပါမယ်….
Customer always right. လေ… ရတနာစိန်ကျောက် ဇယ်တောက် အောင် ထားနိုင်လို့ကတော့ စိတ်ကြိုက်ရွေးယူ အပျိုစင်တွေချည်းပဲ… အက်တိုးပစ်နဲ့တိုးရင်တော့ အူးလေးကံပေါ့နော်….
ဒါပေမဲ့ ခုလတ်တလော ပတ်ဝန်းကျင်မှာတော်တော်များများတွေ့နေရတာက နိုင်ငံရေးကြောင့်ပဲ ဆိုမလား…. ယောက်ကျားလေးတော်တော်များများ စိတ်ဓာတ်စံနှုန်းလျော့ကျ…. (မပြည့်တာပေါ့နော်… not solid လို့ပြောရမယ်ထင်တယ်) အရည်အချင်းတွေ လျော့ကျလာနေပါတယ်….
မင်ဂါဆောင်သွားတဲ့ နီးနီးစပ်စပ်လှည့်ပတ်ပီးကော ဝေးဝေးလန်လန် လှန်းမျှော်ပီးရော ကျိလိုက်တော့ ယောက်ကျားလေးတစ်ယောက်ထဲက အူးဆောင် အကုန်အကျခံပြီး ယူသွားတာ၊ ယောက်ကျားက ရှာကျွေးပီး မိန်းမတအိမ်သားလုံးဝေးလို့ မိန်းမတစ်ယောက် ထဲတောင်ရှာကျွေးတာတွေက …. ရာဇွင်ထဲမှာ ထားရစ်ခဲ့….
ပိတ်သတ်ကြီး ဆက်စင်းဇားကြပါကုန်….. :boss:
လူတိုင်းကတော့ ကောင်းတာလိုချင်တာပေါ့ကွီ… သို့ပေမဲ့… ခေတ်ကာလ အနေအထားအရ… စီးပွားရေးအရ၊ နိုင်ငံရေးအရ အမျိုးသမီးများက တန်းတူလိုက် ငွေရှာနိုင် အရည်အချင်း ရှိလာတဲ့အခါ…. (တခြားမကျိနဲ့ အခွင့်အရေး အောလဗုံပိုရထားတာတောင် အမျိုးသမီးအသင်းကို မယှဉ်နိုင်တဲ့ အမျိုးသားဘောအသင်းကိုကျိ)
မဟာအခွင့်ထူးခံအဖြစ်က…. ငါမဟာအခွင့်ထူးခံလို့ ထိုင်အော်နေရုံနဲ့ မရဘူးဂိုးးးး
အိုက်တော့…. လက်သည်ကြီးပဲ အားမကိုးဂျနဲ့လေ ကိုကိုတို့ရဲ့…. ကွကိုယ်လဲ ညှစ်ကျိဂျပါအူး
အနော်တို့လဲ နေချင်တာပေါ့ဗျာ အိမ်မှာ ညက်လုံးလေး ပေကလပ် ပေကလပ် လောကကြီးအကြောင်း ဘာမှနားမလည်…. ဖေရီးရှာကျွေးတာ ထိုင်စား…. အချိန်တန်တော့ မေရီးတို့ သဘောပါပဲဆိုပီး… ယောက်ကျားရှာကျွေးတာ ဆက်ထိုင်စား…..
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့က အနော် အခု အလုပ်က အိမ်သာနက်နဲ့ အူးလေးကို ပြန်ပြောနေတာလေ…. :hee:
ဆိုတော့…. အရည်အချင်းလဲမရှိ…. အစစ်ကလဲလိုချင်သူများအတွက်တော့ Made in China လေးဒွေ ရှိသားပဲ……
Wow ရေ wow ပြောချင်တဲ့နေရာကို ရောက်လာပေမယ့် wow ပြောတာ မှားနေတယ်။ အဲဒါ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ချမ်းသာခြင်းနဲ့ အရည်အချင်းမှာ နှိုင်းရတန်ဖိုးရှိတယ် ဆိုတာ ဝိုး နားမလည်လို့ မှားတာ။ တကယ်တော့ အဲဒါကို သဂျီး ခဏ ခဏ ပြောတယ်။ ဝိုးသတိမထားမိလို့။ အဲဒါ အရေးကြီးလို့ တခါတည်း ပြင်ပေးလိုက်တယ်။ စာဖတ်တဲ့လူထဲက ကျနော် ပြောတဲ့ သဘောတရားမှားရင် ပြောနိုင်ပါတယ်။
Wow ပြောတာက “အခွင့်အရေးတစ်ခုကို လိုချင်ရင် အိုက်အခွင့်အရေးကို ရယူနိုင်တဲ့ အရည်အချင်း ရှိရပါမယ်။ Customer always right လေ ရတနာ စိန်ကျောက် ဇယ်တောက်အောင် ထားနိုင်လို့ကတော့ စိတ်ကြိုက်ရွေးယူ အပျိုစင်တွေချည်းပဲ” ဒီလို ဝိုးပြောလိုက်တယ်။ အဲဒီမှာ မှားတော့တာပဲ။ Wow ပြောတဲ့ အတိုင်းဆို ယောကျာင်္းလေးတွေက အပျိုစင် ရွေးယူဖို့အတွက် ရတနာစိန်ကျောက်တွေနဲ့ ဇယ်တောက်တမ်း ကစားနိုင်မှ ရမယ် ဆိုပြီး ဖြစ်နေတယ်။ လုံးဝ မဟုတ်ဘူး ငါ့ညီမ။ ယောကျာင်္းတိုင်းလိုလို အဲဒီ အခွင့်အရေးကို ရပြီးသားပဲ။ ရှင်းပြမယ်။
Wow ရေ မိန်းကလေးတိုင်းဟာ ရုပ်ရည်ကလည်း ကိုရီးယား မင်းသမီး ကင်တေးဟီလောက်လှ ပညာကလည်း အောက်စဖို့တို့ ကင်းဘရစ်တို့ကနေဘွဲ့ရ ပစ္စည်းဥစ္စာကလည်း ဘီလ်ဂိတ်သမီးလို ချမ်းသာမယ် ဆိုရင်တော့ wow ပြောတာ မှန်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် wow သိတဲ့အတိုင်း မိန်းကလေးထဲမှာလည်း အဆင့်က အမျိုးမျိုး မဟုတ်လား။ လွယ်လွယ်ဆို တရာတန် နှစ်ရာတန် ငါးရာတန် ရှစ်ရာတန် တစ်ထောင်တန် အမျိုးမျိုး ရှိတာကိုး။
Wow ရေ ဆံထုံးတော်ကြီး တမာသီးနဲ့ ခါးစည်းဝတ်လဲ ချုပ်စပြဲကို တဲအပ်နဲ့တွယ်ဆိုတဲ့ ရေသည် ကောင်မလေးအတွက် ငွေတပဲ ရှာနိုင်တဲ့ ရေသည်ကောင်လေးဟာ အားကိုးလောက်စရာ breadwinner ကြီးပါပဲ။ ဒီလို ဖြစ်ဖို့အတွက် ရေသည်ကောင်လေး ရတနာစိန်ကျောက်တွေ လုံးဝ မလိုပါဘူး။ သဂျီး ခဏ ခဏအော်နေတဲ့ လူဆိုတာ ကိုယ်နဲ့ တန်ရာ တန်ရာပဲရမယ် ဆိုတာ သူ ဒါကို ပြောချင်တာပါ။ မိန်းကလေးထဲက အဆင့် အမျိုးမျိုးနဲ့ ယောကျာင်္းလေးထဲက အဆင့် အမျိုးမျိုး တွဲကြရတာပါ။ အဲဒီမှာ wow မရှင်းသေးရင် ဒေါက်တာပဒုမ္မာကို ကျုပ်ရေးပေးထားတဲ့ ကွန်မန့်ကို ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ အရေးကြီးတဲ့ အဆုံးအဖြတ်ပေးမယ့် စိတ်ထားလာပါပြီ။ ယောကျာင်္းလေး အားလုံးလိုလိုရဲ့ အတွင်းစိတ်က ကိုယ့်အိမ်ထောင် ကိုယ် ဦးဆောင်ချင်တယ်။ မိန်းကလေးရဲ့ အတွင်းစိတ်က ကိုယ်အားထားရမယ့် အားကိုးရမယ့် အထင်ကြီးလို့ရတဲ့ လူကိုလိုချင်တယ်။ ဘယ်မိန်းကလေးမှ ဒီကောင်ကိုတော့ ငါလုပ်ကျွေးရမယ်ဆိုပြီး မစဉ်းစားဘူး။ မိန်းကလေးဟာ အထင်ကြီးမှ စဉ်းစားတာ အထင်မကြီးရင် လုံးဝ မစဉ်းစားဘူးဆိုတာ ဟိုခေတ်ကတည်းက ခုခေတ်အထိ မှန်နေသေးတယ်။ အထင်ကြီးတဲ့လူ ဆိုကတည်းက သူ့ထက် နည်းနည်း သို့မဟုတ် များများသာတဲ့ ယောကျာင်္းကို စဉ်းစားတာပေါ့ ဝိုးရဲ့ ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ အဲဒီ အချိန်မှာ ယောကျာင်္းလေးကျတော့ သူ့ထက် သာရင် သိပ်မစဉ်းစားတော့ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဦးဆောင်ချင်စိတ် ရှိနေလို့။ အများအားဖြင့် ဒီလိုချည်းပဲ။ အဲဒီမှာ စတွေ့တာပဲ။ စကတည်းက ယောကျာင်္းလေးက ရွေးချယ်သူ customer ဘဝကို အလိုလို ရောက်သွားတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ စဉ်းစားတာ မတူလို့ကို ယောကျာင်္းလေးက အသာစီး ရသွားတယ်။
ကျနော် ဥပမာပေးတဲ့ ကျောင်းသူ ကောင်မလေးလိုပေါ့။ သူကိုယ်တိုင်က ပြည့်စုံတော့ စစဉ်းစားကတည်းက သူက တထောင်တန်ဆိုရင် တထောင့်နှစ်ရာတန်တို့ ဘာတို့ သူ့ထက် မြင့်တာမှ စဉ်းစားတယ်။ နိမ့်တာဆို ပယ်ထားတယ်။ ဟော နောက် အရွဲ့တိုက်ပြီး ကိုယ့်ထက် နိမ့်တာနဲ့ ခိုးပြေးတော့ ဘယ်သူနစ်နာလည်း။ သူပဲ နစ်နာတယ်။
နောက်ပြီး မိန်းကလေးတွေမှာ သဘာဝအလျောက် အားနည်းချက်လေးတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါကို တလွဲမာနနဲ့ မရှိဘူး မလုပ်နဲ့။ တကယ်ရှိတယ်။ မိန်းကလေးဟာ ယောကျာင်္းလေးလို ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူကို ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် ရွေးပြီး propose လုပ်နိုင်ခွင့် မရှိဘူး။ ယောကျာင်္းလေးမှာက အဲဒီ အခွင့်အရေး အပြည့်ရှိတယ်။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့လူ တွေ့ရင်လည်း အရိပ်အရောင်ပဲ ပြနိုင်တယ်။ ဟိုဘက်က မလှုပ်ရင် ဘာမှ မတတ်နိုင်ဘူး။ အဲဒီလို။ အဲဒီမှာလည်း ယောကျာင်္းလေးကပဲ အော်တို customer နေရာ ရောက်သွားတယ်။ စိတ်ဆိုးလည်း မတတ်နိုင်ဘူး။ အဲဒါက အမှန်ပဲ။
နောက်ပြီး မိန်းကလေးမှာက နောက်အားနည်းချက်က အချိန်ပဲ။ သူ့မှာ အချိန်ရှိတယ်။ Deadline လို့ခေါ်တဲ့ လုံးဝ နောက်ကျလို့ မရတဲ့ အချိန်ရှိတယ်။ အသက် ၃၅ ကျော်ရင် သဘာဝတာဝန် ဖြစ်တဲ့ သားသမီးမွေးဖို့ ရဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်သွားပြီ။ ရလာရင်လည်း ဥဏ်ရည်မမီတဲ့ ကလေးတွေ မွေးဖို့ ရာခိုင်နှုန်းများပြီ။ ပိုပင်ပန်းပြီ။ အပ်နဲ့ ထွင်းရမှာကို ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ရပြီ။ ၃၃နှစ် ၃၄နှစ်မှာ မစွံသေးဘူး အိမ်ထောင်ပြုဖို့လည်း စိတ်ကူးတယ် ဆိုရင်တော့ ဘာနဲ့ တူသလည်းဆိုတော့ ဝိုးပြောတဲ့ ဘောလုံးပွဲပုံစံဆိုရင် ပွဲပြီးဖို့လည်း နီးလာပြီ သဘာဝတရားဆိုတဲ့ ဒိုင်လူကြီးကလည်း ဝီစီမှုတ်ဖို့ နာရီကို ခဏ ခဏ ကြည့်နေပြီ။ အရေးကြီးတဲ့ အနိုင်ဂိုးလည်း မရသေးဘူးဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုး ဖြစ်လာပြီ။ ယောကျာင်္းလေးက အမှန်ဆို အဲဒီ ပြဿနာမရှိဘူး။ ၃၅ ၄၀ ဘာဖြစ်လည်း ငယ်သေးတယ်။ မှုကို မမှုဘူး။ အဲဒီမှာလည်း ယောကျာင်္းလေးကပဲ အလိုလို အသာစီး ရသွားတယ်။
အဲဒီတော့ ဝိုးရေ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ အထက်က အချက်တွေ ပေါင်းတဲ့အခါ ယောကျာင်္းလေးကပဲ စိတ်ကြိုက်ရွေးခွင့်ကို အလိုလို ရသွားပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးကတော့ စဉ်းစားစရာ မလိုတော့ပါဘူး။ သိသွားပြီ ထင်ပါတယ်။ ဘောလုံးအသင်းကိစ္စကတော့ အစက ပြောမယ် စိတ်ကူးပေမယ့် အခုတော့ မဆိုင်တဲ့အတွက် လမ်းချော်မှာစိုးလို့ရယ် အောက်မှာလည်း စာတွေ ထပ်လာလို့ရယ် မပြောတော့ပါဘူး။ ပြောတော့ ပြောနိုင်ပါတယ်။ တခြားပို့စ်ကျလို့ မေးရင် ပြောပြပါမယ်။ အလုပ်ထဲက အင်တာနက်နဲ့ ပြောနိုင်လို့ ဝမ်းသာပါတယ်ကွယ်။ ဒါပေမယ့် အကြံပေးချင်တာက အဲဒါကို မလုပ်စေချင်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အလုပ်ထဲက ပစ္စည်းကို လုပ်ငန်းနဲ့ မပက်သက်တဲ့ နေရာမှာ အသုံးချနေလို့ပါ။ ကိုယ့် အထက်လူက မြင်သွားရင် စိတ်ကွက်သွားတတ်တယ်။ အဲဒါဆို ထိခိုက်လာနိုင်တယ်။
မိန်းကလေးတွေကို သတိထားဖို့ ပြောရတာက သဘာဝ အရကို ထိရှလွယ်တဲ့ လူတွေ ဖြစ်လို့ပါ wow ရေ။ ကိုယ့်သိက္ခာ ကိုယ်ထိန်းပြီး နေနိုင်တဲ့ မိန်းကလေးကို ယောကျာင်္းလေးတွေ မြတ်နိုးတတ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
အလုပ်မာ အင်တာနက်သုံးတဲ့ အနော့်ကို ပူပင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးကျေးပါ…
ဒါပေသိ… အနော်က Executive Level အင်တာနက်ကို တရားဝင်သုံးခွင့်ရှိပါတယ်…
ဒါ့ကြောင့်နာ့ကို ဟိုနေ့ကတော့ ဟိုလူကပေါသား အူးစံလှဂျီး ဘောလုံးကိစ္စ ပြန်ပြောလိုက်မယ်လို့လေ….
အဟမ်းးးး စောင့်ကျိပီး ရီမနေနဲ့နော်…
ကျန်တာတွေကတော့ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့ကိုယ် ကိုယ်လိုရာ ကိုယ်ဆွဲတွေးရင် ရတာဂျီးမို့…
အူးစံလှဂျီး အနော့်ကြောင့် အလုပ်တွေရှုပ် အချိန်တွေပုတ် ပင်ပန်းသွားရဘီ….
အနော် မပြောခဲ့ဘူးပဲ ထားလိုက်ပါ..
ဒါ့ကြောင့်လည်း မြန်ဂေဇက်ရွာကို ကြီးလေးကြီး စောင့်တယ်လို့ ပြောသကိုးးးးး
ကိုရင်စံလှကြီးရဲ့ ထောင့်စေ့စေ့ အဖက်ဖက်က နှိုင်းယှဉ်ချိန်ထိုးပြသွားတာတွေကို သဘောကျတယ်။
နေရာတကာ သူ့စံနှုန်းနဲ့သူမို့ ….
ကိုယ့်စံ ကိုယ်သတ်မှတ်၊ ကိုယ့်အခြေအနေနဲ့ ကိုယ် နေကြရုံပါပဲ။
လို့ ဆိုတယ် မဟုတ်လားးးးး
လို့ ဆိုရိုးရှိတယ် မဟုတ်ပါလားးး
လာတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။ ကျနော် မိန်းကလေးတွေကို နှိမ်သလိုများ ဖြစ်နေပြီလားလို့ စဉ်းစားသေးတယ်။ အမှန် ကျနော့်မှာ ဒီရည်ရွယ်ချက် မရှိပါဘူး။
ကြီးလေးကြီးတို့ ကြီးသုံးကြီးတို့ ဆိုတာ နောက်ပြီး ရေးတာပါဗျာ။ ကျနော်က ဘာကြီးမှလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ရွာသားကြီးလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတလေ အလည်ရောက်တဲ့ လူပါ။
ကျနော် ရေးထားတာကို မမတို့ကတော့ ကြိုက်မယ် ထင်တာပါပဲ။ ကိုယ်က တကယ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေကို ရင်ဆိုင်ရမယ် မဟုတ်လား။
ကျနော်လည်း အပွေးမြင် အပင်သိဆိုတဲ့ စကားကို ကြိုက်တယ်။ ပညာတွေ သင်ထားပြီးမှ လူတယောက်ကို တနှစ်လောက် အိပ်ကြည့်ပြီးမှ သိမယ်ဆိုတာတော့ အဲဒီ ပညာတွေ နှမြောဖို့ ကောင်းပါတယ်။
ကျနော်သိတဲ့ စီးပွားရေး ပါမောက္ခကြီး တဦးရှိတယ်။ ယောကျာင်္းထဲမှာတော့ ရှာမှရှားလို့ ပြောရမလားပဲ။ ပညာတတ်တဲ့ အပြင် လက်မှုပညာဖြစ်တဲ့ လက်သမားပညာတို့ ရွှေပန်းတိမ်တို့ ဘယ်က သင်ထားတယ် မသိဘူး။ အဲဒါတွေပါ နားလည်တယ်။ သူ့ကို တော်တော့်လူ လိမ်လို့ မရဘူး။ သူ့မှာ သမီးတွေ မွေးထားတယ်။ အဲဒါ သူက သူ့သမီးတွေကို အမြဲ ပြောတယ်တဲ့။ သမီးတို့ ကိုယ်နှစ်သက်တဲ့လူတွေ့ရင် ဟိုဟိုဒီဒီ လျှောက်မသွားနဲ့။ အန္တရယ်ရှိတယ်။ အဖေ့ဆီကိုသာ ခေါ်ခဲ့။ အဖေ ဘယ်တော့မှ လူကြည့်မမှားဘူး။ လူတယောက်ကို နာရီပိုင်း စကားပြောတာနဲ့ မှန်းလို့ရပြီ။ ရက်ပိုင်းလောက် လေ့လာရင် အဖေသိပြီလို့ ပြောတယ်တဲ့။ သူဟာ သူပြောတဲ့အတိုင်း တကယ်မှန်းနိုင်တဲ့လူလို့ ကျနော်ယုံတယ်။ ကျနော့် အဖေလည်း ကျနော့်ကို အဲဒီသဘောမျိုးပဲ ပြောဖူးတယ်။
ကျန်လူတွေ နောက်မှ ဆက်မယ်ဗျာ။ အိပ်ချင်လှပြီ။
အခု လောလော ဆယ် မြန်မာပြည်မှာက LT ပြသနာ မဟုတ်ဘူးခင်ဗျ။ မ ၀င့်ပြုံးမြင့်် ပြောသလို့ making love at every where ဗျ။
ဟိုတယ်သွားကြပြီး အပြင်က မသိရင် လူပျို၊ အပျို ဘဲပေါ့။ မိသားစုနဲ့ အတူနေကျတဲ့ လူငယ်တွေက တော့ သိပ်ပေါ်ပေါ်တင်တင် မလုပ်ကြပေမဲ့ တည်ခိုခန်းတွေမှာ လူပြည့် နေတတ်တာကို ကြည့်ရင် လူကြီးတွေ လက်လှန်းမမှီ သိပ်ထိန်းလို့ ရမယ် မထင်ပါ။ ပညာပေးသင့်တာပေး၊ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း ဖြစ်အောင် သွယ်ဝိုက် ဆုံးမပေးမှဘဲရမယ်ထင်ပါတယ်။ အားကစား၊ အနုပညာနဲ့ လူမှူ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကို သိပ်အားမပေးတဲ့ မြန်မာ့ပညာရေးလောကကြောင့် တက္ကသိုလ်ရောက်ရင် ဟိုတယ်သွားတဲ့ လမ်းကြောင်းဘက်ကိုရောက်ကုန်တာ မျိုးလည်း ထည့်စဉ်းစားဖို့ လိုပါမယ်။
ဒီခေတ်မှာ မိန်းကလေးတွေ အပျို စစ်မှ တန်ဖိုး ရှိမယ်လို့တော့ ကျနော်က မထင်ပါ။ လူ့တန်ဖိုး ဆိုတာ ဒီအပျိုရည် တစ်ခုထဲနဲ့မှ သတ်မှတ်လို့မရတာ။ အဲ့ဒါက မဟာ ယောကျာင်္းကြီးဝါဒ ဖြစ်နေတယ်။
အချက်အလက်တွေ သဘောတူပါတယ်။ကိုစံလှကြီးရဲ့ အရေးအသားကောင်းတော့ ပို့စ် အရှည်ကြီးကို တထိုင်တည်း မထတမ်းဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
ကျမကိုယ်တိုင်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှ LT မနေပါ။(ဒါကြောင့် အပျိုကြီးဖြစ်တာပေါ့)
ဒါပေမယ့် အပြင်လောကကြီးမှာ အတော်များများက တကယ်မယူခင် စရံသတ်တယ်လို့ သုံးနှုန်းနေကြပြီး လက်မထပ်ခင် ညားနေကြတဲ့ စုံတွဲတွေ အများကြီးပါပဲ။
ဆရာဝန်အဖြစ် ဆေးခန်းမှာ လာတိုင်ပင်တဲ့ သူတွေ တွေ့ဖူးသလို( ငါ ကလေးမဖျက်ဘူးလို့ ပြောလွှတ်ခဲ့ရတာတွေ ရှိဖူးပါတယ်)
ကိုယ့်ဝန်ထမ်း ကျားမတွေ ကြားမှာလည်း ကိုယ်ဝန်ရလို့ အတင်းပေးစားလိုက်ရတာ၊မယူပဲ ဖျက်ချကြတာ၊အခြားတယောက်ကို ကလေးအဖေနာမည် တပ်သွားတာ အများကြီးပါပဲ။
ဒါမကောင်းဘူး၊မသင့်ဘူးလို့ ကျမတို့ ပြောရုံနဲ့ မရတော့ပါဘူး။
ယောင်္ကျားလေးတွေက လှည့်ဖျားနားသွင်းလို့ မိုက်ခဲ့တာတွေရှိသလို၊မိန်းကလေးတွေ ကိုယ်၌က အိမ်ထောင်ရှိ ယောင်္ကျား ကိုယ့်ကို မယူမှန်းသိသိနဲ့ ကာမဂုဏ်ပင်လယ်ရေ သောက်ခဲ့ကြတာတွေလည်း တွေ့ဖူးပါတယ်။ မိကောင်းဖခင် သားသမီးလေးတွေပါ၊ပျံတန်တန် နန့်တန့်တန့်တွေ မဟုတ်ပါဘူး။
ကျမအမြင်တော့ တခါတလေ မြန်မာလို ကြားရဆိုးတာကို ဘိုလို သုံးနှုန်းလိုက်တဲ့အခါ ဒီစကားက ခေတ်မီတယ်ထင်သွားကြပြီး လိုက်လုပ်ကြတယ်လို့ မြင်လို့ ဒီကိစ္စကို ဘိုလို တောင် မသုံးစေချင်တော့ပါဘူး။
တောက မိခွေးကို မီရှဲလို့ ခေါ်တော့ လှတယ်ခေတ်မီတယ် ထင်သလိုပေါ့။
အခုလည်း တရားဝင်မယူပဲ ညားတယ်ဆိုတာကို စကားလှယ်ပြီး Living Together လိုက်တော့ ငါတို့ မယူရသေးပဲ ညားရအောင်လို့ ပြောရင် ရှက်ပေမယ့် ငါတို့ Living Together ရအောင်ဆိုရင် နားယောင်ကြပြန်ရော။
ပညာတတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေက ပြဿနာမပေါ်အောင် (ကလေးမရအောင်) ဆေးဝါးသုံးတတ်ပေမယ့် ပညာမတတ်၊ဗဟုသုတ မရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေက မလိုချင်တဲ့ ကိုယ်ဝန်ရ၊လက်သည်နဲ့ ဖျက်ချ၊ပိုးဝင်၊ သေကြပေါ့။
သူများနဲ့ညားဖူးတယ်၊ရည်းစားများတယ်ဆိုတာ မိမိကိုယ်/မိမိအိမ်ထောင်ဖက်ကို တန်ဖိုးထားထိန်းသိမ်းချင်သူတွေအတွက်တော့ ယောင်္ကျားလေးလည်း နစ်နာတာပဲ၊မိန်းကလေးလည်း နစ်နာတာပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း သူများနဲ့ ညားပြီးသား၊တကိုယ်လုံးဖော်ပြီးသား၊နာမည်ထွက်နေပြီးသား celebrity တွေကို ယူမယ့်သူရှိနေတာပေါ့။
သင့်မသင့် ငြင်းနေကြမယ့်အစား အရှိကို အရှိအတိုင်းခံယူပြီး
လူငယ်တွေရဲ့ ခံယူချက်ပြောင်းအောင် ဘယ်လို နည်းတွေ သုံးရင်ကောင်းမလဲ ဆိုတာ အဖြေရှာကြစေချင်ပါတယ်။
မီဒီယာတွေရဲ့ လွှမ်းမိုးမှုဟာ အားကြီးပါတယ်။
ကျမတို့ငယ်ငယ်ကဆို ရွှေဥဒေါင်းရဲ့ ဇော်ဟိတ်၊ဦးစံရှား၊ မင်းသိင်္ခရဲ့ ဆားပုလင်းနှင်းမောင်၊ဂျာနယ်ကျော်ဦးချစ်မောင်ရဲ့ သူ စာအုပ်တွေဖတ်ပြီး သတ္တိရှိတဲ့ ညှာတာတတ်တဲ့ ရိုးသားတဲ့ အနစ်နာခံတတ်တဲ့ သူကို အားကျ အတုယူချင်ခဲ့တယ်။
ဂျာနယ်ကျော်မမလေးရဲ့ သူမ၊ရင်နင့်အောင်မွှေး၊ ယုဝတီ ခင်စိန်လှိုင်ရဲ့ ၀တ္ထုတွေ ဖတ်ပြီး မိန်းမပီပီသသ အိမ်တွင်းမှုနိုင် တဲ့အပြင် ထက်မြက်အစွမ်းရှိဆိုတာတွေ ဖြစ်ချင်ခဲ့တယ်။
အခုခေတ်ကလေးတွေမှာ အဲဒါတွေ ပျောက်နေကြတယ်။
အတုယူစရာ ကိုရီးယားကားတွေပဲ ရှိတော့ ဒါပဲ အတုယူမှာပဲ။ ဆိုဂျူ သောက်တာ ဘီယာသောက်တာ၊ရည်းစားနဲ့ အတူနေတာ မဆန်းဘူး၊ဂုဏ်ယူစရာလို့ ထင်လာတဲ့ ပါရာဒိုင်းကို ပြောင်းနိုင်ရင် ပြောင်း၊မပြောင်းနိုင်ရင်တော့ အန္တရာယ်လျှော့ချမယ့် လိင်ပညာပေးတွေ နိုင်အောင်ပေးရမှာပဲ၊
ကွန်ထရိုးပေးလ် ဆေးတွေ အခမဲ့ ပေးတန်လည်း ပေးရတော့မယ်။
အဲဒါလေး စဉ်းစားမိတာ ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ်။ကိုစံလှကြီး ပို့စ်နဲ့ ချော်သွားရင်တော့ ခွင့်လွှတ်ပါ။
ဆရာမကိုတော့ ကျနော် နည်းနည်း ရှည်ရှည်လေး ပြောပါ့မယ်။ ကျနော် ပြောမယ့် အထဲမှာ အရေးကြီးတဲ့ အချက်တခု ပါလိမ့်မယ်။ ဒီအချက်က နောက်ကွန်မန့်ကိုလည်း ဆက်သွားလိမ့်မယ်။ အားလုံးဖတ်ပြီးတာနဲ့ စာတွေ ကွင်းဆက်လို ဖြစ်သွားမယ်လို့ မှန်းထားပါတယ်။
ဆရာမရေ အပျိုကြီး လူပျိုကြီး ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းများစွာ ရှိပါတယ်။ ဆရာမကို ကျနော် အပြင်မှာ မသိလို့ အကြောင်းအချက် ဘယ်နှစ်ခုကြောင့် အပျိုကြီး ဖြစ်တယ် ဆိုတာ မသိပါဘူး။
အဲဒီထဲက အချက်တခုကတော့ ဆရာမက ဆရာဝန် ဖြစ်နေပါတယ်။ ဆရာဝန်တောင် ဆမလက်မှတ် နည်းနည်း ရှေ့ရောက်မယ့် လူမျိုး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဟာ ဘာဆိုင်လို့လည်းလို့ မေးစရာ ရှိပါတယ်။ ဆိုင်ပါတယ် ဆရာမရေ။ ဆရာမ သိမှာပါ။ ကျနော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ဆရာဝန် လူတန်းစားဆိုတာ လွတ်လပ်ရေးရပြီးတဲ့ အချိန်ကတည်းက စပြီး လူတိုင်းက အထင်ကြီးတာ ခံရတဲ့ လူတန်းစား ဖြစ်ပါတယ်။ အခုလည်း ရှေ့တန်းမှာ ရှိနေဆဲပါ။
အဲဒီမှာ မြန်မာယောကျာင်္းလေးတွေရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ စိတ်အခြေခံ လာပါပြီ။ ယောကျာင်္းလေးတိုင်းတော့ ဒါကို သတိထားချင်မှ ထားမိမယ်။ ကျနော်ကတော့ သတိထားမိပါတယ်။ မြန်မာယောကျာင်္းလေး အများစုက ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်သည် အစစ အရာရာ ကိုယ့်ထက် အရည်အချင်းသာသူ ဖြစ်နေရင် သိပ်စဉ်းစားပါတယ်။ မနာလိုတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်မိသားစုကို ကိုယ်ဦးဆောင်ချင်စိတ်ဟာ ယောကျာင်္းတိုင်း စိတ်ထဲမှာ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့် အိမ်ထောင်ဖက်ကိုလည်း ကိုယ်ပဲ ဦးဆောင်ချင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သူဘာလုပ်မလည်း။ ဆရာမရယ် ရှင်းရှင်းလေးပဲ သူ ဦးဆောင်နိုင်မယ့် လူကို ရှာတော့မှာပေါ့ စိတ်ကြိုက်ရွေးခွင့် ရှိတယ် ဆိုတာက အမျိုသားရဲ့ သဘာဝ အခွင့်အရေးပဲကိုး။ ဒီဘက်ခေတ်ကျတော့ သိပ်ပြီး ညံ့လွန်းရင်လည်း မကြိုက်တော့ဘူး။ ဆိုတော့ အများစုက ကိုယ့်နဲ့ မကွာမလှမ်း ကိုယ့်ဦးဆောင်လို့ ရမယ့်လူကို အလိုလိုရွေးတယ်။
မြန်မာမိန်းကလေးကျတော့ ပြောင်းပြန်လေ။ စပြီး ချစ်ပြီ ဆိုကတည်းက များသောအားဖြင့် အထင်ကြီးမှပဲ ချစ်တယ်။ အထင်ကြီးပြီ ဆိုကတည်းက သူ့ထက် နည်းနည်း သို့မဟုတ် များများ သာတဲ့လူပေါ့။
ဆရာဝန်မ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဆရာမထက် သာမယ့်လူဟာ ဘဝတူ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အနီးစပ်ဆုံး သိပ်တော်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာ အဲဒီလို လူတယောက် ဖြစ်မှပဲ ရပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီလို လူကလည်း သိပ်မများတော့ တချို့ သိပ်တော်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ အပျိုကြီးဖြစ်တာ အဲဒါကြောင့်ပါ ဆရာမရေ။ အဲဒီလိုလူကလည်း ကိုယ့်ဆီကို လာဦးမှကိုး။ လျှော့ဈေးနဲ့ ယူဖို့ ကျတော့လည်း မြန်မာမိန်းကလေး အများစု ဘယ်စဉ်းစားမလည်း။ ဆရာမရေ အသက် သိပ်ကြီးတဲ့ ဆရာဝန်မကြီးကို မသင့်တော်တာ ပြောမိရင်တော့ ခွင်လွှတ်ပါ။ ဒီကိစ္စက အရေးကြီးပါတယ်။
ချွင်းချက်တော့ ရှိတယ် ဆရာမ။ ထူးဆန်းတဲ့အတွဲ အကြောင်း နောက်မှ ပြောပြမယ်။
ဆရာမရေ တကိုယ်လုံး ဖော်ပြီးသား celebrity တွေကို ကျနော် ဒီကိစ္စမှာ ချွင်းချက်ထားတယ် ဆိုတာ အပေါ်က ကွန်မန့်တွေမှာ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒီနေရာမှာ celebrity ဆိုတာ သရုပ်ဆောင် celebrity တွေကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ လူမှုရေးနဲ့ နိုင်ငံရေး celebrity တွေ လုံးဝ မပါပါဘူး။
ကျနော် နည်းနည်း ဥပမာ ပေးပါရစေ။ အဖြူအမည်း ရုပ်ရှင်ခေတ်က မင်းသမီးကြီး တယောက်ဟာ(အဲဒီအချိန်က မင်းသမီးလေး မော်ဒယ်လေး) သူ့ ခင်ပွန်း မင်းသားကြီးနဲ့ ခိုးပြေးပါတယ်။ နောက်ရက်ကျတော့ နှစ်ယောက်တွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ပြီး သတင်းစာထဲမှာ လူတွေက ကိုကို မီးကို ခိုးပြေးတယ်လို့ ပြောနေကြတယ်။ မဟုတ်ပါဘူး မီးက ကို့ကို့ကို ခိုးတာပါဆိုပြီး ကြော်ညာ ထည့်တယ်လေ။ သူလုပ်သလို တခြား သာမန် မြန်မာမိန်းကလေး တယောက်က လိုက်လုပ်ရင် ဘာဖြစ်မယ်လို့ ဆရာမ ထင်လည်း။ မိဘတွေရော ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်းရော မျက်နှာမပြရဲအောင် ရှက်ရမှာ သေချာတယ်။ မတူဘူး ဆရာမရေ။
အခု မင်းသမီးတွေ အင်တာနက်ပေါ်မှာ တကိုယ်လုံး ဖော်တာရော အသံစုံ ထွက်တာရော ဘယ်လိုဟာမျိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့က ဘာမှ မဖြစ်ဘူး။ သူတို့အချင်းချင်းကြားမှာ သိပ်မဆန်းသလို သီးသန့် အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ နေတဲ့လူတွေ ဆိုတော့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုကို စိုက်စရာ မလိုဘူး။ သာမန် မြန်မာမိန်းကလေးက သူတို့ ဘာမှ မဖြစ်လို့ ကိုယ်လည်း မဖြစ်ဘူးထင်ရင် မှားသွားမှာပေါ့။ ဦးကျောက်ခဲကို ကျနော် ရေးပေးတဲ့ ကွန်မန့်ထဲက မိန်းကလေးဟာ တကယ် ဖြစ်ခဲ့တာ ဆရာမ။ အဲဒီ မိန်းကလေး အခု ဘယ်မှာနေပြီး ဘာတွေ လုပ်နေသလည်း ဆိုတာ တွေးမိတယ်။ သူ သူ့ရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတွေ အဲဒီလို ပြန့်နေတာကို သိသိချင်း ထွက်စာတောင် မတင်နိုင်တော့ပဲ အလုပ်ကနေ အိမ်ကို တန်းပြန်ပြေး အိမ်ကနေ ရရာလေယာဉ် လက်မှတ် ဝယ်ပြီး အဲဒီနေ့ပဲ ထွက်ပြေးရရှာတယ်။ လုပ်တဲ့လူဟာ သိပ်အောက်တန်းကျတာ မှန်ပါတယ် ဆရာမ။ ဒါပေမယ့် ဒီ မိန်းကလေးဟာ အတည်တကျ လက်ထပ်ထားတာ ဆိုရင် သူ ဒီလို ဘယ်လုပ်ရဲမလည်း။ နောက်ပြီး စကတည်းက LT နေတာဆိုတော့ သူက အစကတည်းက တချိန်မှာ တခုခု ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆိုပြီး ကြိုပြီး ပြင်ထားပုံ ရတယ်။ စိတ်ထင် စနေတဲ့ အချိန်ကတည်းက ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကို လုပ်လိုက်တာ။
ဆရာမ အမြင်က ပါရာဒိုင်းက ပြောင်းနေတော့ မကောင်းဘူးဆိုလည်း လုပ်မှာပဲ။ ဒီတော့ သင့် မသင့် ငြင်းမယ့်အစား အရှိကို အရှိအတိုင်း ခံယူပြီး လုပ်သင့်တာ လုပ်ဖို့ပြောတယ်။
ဒီနေရာတော့ ဆရာမနဲ့ ကျနော် အမြင်ချင်း ခြားနားတယ်။ ဆရာမ စကားကို ကျနော် သဘောပေါက်တာတော့ မကောင်းဘူး ပြောလည်း လုပ်မယ့် အတူတူ လုပ်သင့်တာပဲ လုပ်ပေးဖို့ပေါ့။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်သလိုပဲ။ ဆရာမက တခါတလေ တရားစာတွေ ဘာတွေ နည်းနည်း ကိုးကားတော့ ကျနော်လည်း ဒီလို စဉ်းစားကြည့်မယ်။
ဆရာမရေ မြတ်စွာဘုရားရှင် ပါဏာတိပါတာ ဝေရာမဏိ ဆိုတဲ့ တရားကို ဟောတုန်းကတည်းက ဝက်တွေကို သတ်နေတဲ့ စုန္ဒဝက်သတ်သမားလိုလူ တံငါသည်တွေ ကွက်မျက်တဲ့အလုပ် လုပ်တဲ့ လက်မရွံ့ လူသတ်သမားတွေ ရှိနေခဲ့တာပဲ။ သူတို့ကတော့ ဟောလည်း လုပ်မှာပဲ။ ဒီနေ့ခေတ်လည်း ပြောကြပါတယ်။ တချို့ပေါ့ ဗုဒ္ဓတရားက ကောင်းပေမယ့် ဒီ သူများအသက် မသတ်နဲ့ ဆိုတာကြီးက လိုက်နာဖို့ ခက်လို့ မတတ်နိုင်ပါဘူးတို့ ဘာတို့ပေါ့။ မြတ်စွာဘုရားလည်း သိမှာပေါ့။ ငါ မလုပ်နဲ့ မကောင်းဘူး ပြောလည်း သူတို့ လုပ်ကြမှာပဲ ဒီတော့ အများ လိုက်နာနိုင်အောင် လျှော့ပေါ့ပြီး လူ့အသက်ပဲ မသတ်နဲ့ တိရ စ္ဆာန်တွေ သတ်လို့ရတယ်လို့ တခြား အယူတွေလို လျှော့လို့ရတာပဲ။ အဲဒါဆို ဟိုဒင်းဂိုဏ်း ဖြစ်သွားမယ် ဆရာမရေ။ မပြောတော့ဘူး ကျနော် တံဆိပ်ကပ်တယ် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ နောက်ပြီး မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ ဥဏ်တော်မှာက ဒီအပြစ်တွေကို မြင်နေတာ မြင်တဲ့အတိုင်း ပြောမှ ရမှာပေါ့။ နားထောင်တယ် မထောင်ဘူးဆိုတာကတော့ ကာယကံရှင် အပိုင်းပဲ။ ပြောသင့်တာတော့ ပြောရတာပဲ။
တယောက်တည်း နာမယ့် လူရှိလည်း ဟောရမှာပဲ။
ဆရာမရေ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ဥပမာလို့ မထင်ပါနဲ့။ ကျနော် ဒီကေ့စ်ကိုလည်း ဒီလိုပဲ မြင်တယ်။ နားထောင်တယ် မနားထောင်ဘူးဆိုတာ မတတ်နိုင်ဘူး။ ပြောသင့်တယ်လို့ ထင်လို့ ပြောပါတယ်။ မနားထောင်လို့ တခုခု ဖြစ်လည်း ဆရာမ ပြောသလို ဆေးပညာပိုင်းက တခုခု လုပ်ပေးဖို့ စဉ်းစားသင့်တာပေါ့။
ဆရာဝန်တွေလည်း ဒီလိုပဲလေ ဆရာမရယ်။ ဒီရောဂါကို ဒီလိုနေရင်တော့ ဖြစ်တတ်တယ် ဆိုပြီး အရင်ဆုံး ပညာပေးရတယ်။ အဲဒီလိုနေပြီး နားမထောင်လို့ ဖြစ်လာရင်သာ ကုထုံးကို စဉ်းစားရတာ မဟုတ်လား။ ကဲ ငါပြောလည်း မတဲ့တာ စားမယ့် အတူတူ မပြောတော့ပါဘူး။ ဆေးပဲ ပြင်ထားလိုက်မယ် ဆိုပြီး လုပ်လို့မှ မရတာလေ။ ပြောတာကတော့ ပြောသင့်တဲ့ လူရဲ့ တာဝန်ပဲ။
အဲ.. တစ်ခုဝင်ပြောဦးမယ်.. အနော်က တစ်ချင်ရင်တစ်.. လစ်ချင်ရင်လစ် ဆိုတော့.. အခုက လစ်တဲ့ဘက်ကပြောမှာပေါ့နော်..
သူငယ်ချင်းတွေထဲမှာရှိပါတယ်.. ရည်းစားသက်တမ်းကြာသွားတဲ့အခါ.. (၄ နှစ်ကျော်လို့ ၅ နှစ်ပေါ့).. ဒီကိစ္စက မပေးလို့မရတဲ့အရာအဖြစ်နဲ့ ပေးလိုက်ရပါတယ်တဲ့.. သူ့ချစ်သူကို ချစ်လွန်းလို့၊ ချစ်သူ စိတ်ချမ်းသာပါစေတော့ရယ်ပေါ့.. ဒါပေမယ့် အခုကျတော့ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး သည်းမခံနိုင်တာတွေ ရှိလာတဲ့အခါ သူကတော့ ဒီကိစ္စနဲ့ ချည်နှောင်မခံဘဲ ရအောင်ဖြတ်ပါတယ်.. ကောင်လေးဘက်ကတော့ ဒီလိုဖြစ်ထားတာဆိုတော့ သူ့ကို ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပဲ ထင်တာပေါ့.. မိန်းကလေးကတော့ ချစ်လို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့တော့ ငါသည်းမခံနိုင်တဲ့သူကို လက်မထပ်နိုင်ဘူး… တစ်ယောက်တည်းနေလို့လည်းဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ ခံယူချက်နဲ့ လုံးဝလမ်းခွဲပစ်လိုက်ပါတယ်..
ပြောရရင်တော့ အဲလို ဆုံးဖြတ်လိုက်တာကို လက်ခံတယ်.. ချစ်လွန်းလို့ ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တောင် ဒီကိစ္စအတွက်နဲ့တော့ တစ်သက်လုံးစိတ်ဆင်းရဲမခံသင့်ဘူးလို့ မြင်ပါတယ်.. ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တစ်ခါတစ်ခါ ယောက်ျားတွေက ချည်နှောင်ချင်တဲ့အနေနဲ့… အသာစီးရချင်တဲ့အနေနဲ့.. ဒီလိုဖြစ်သွားရင်တော့ သူ့ဘက်က တစ်ပန်းရှုံးသွားပြီဆိုတဲ့အနေနဲ့ လိုချင်ကြတာကိုး..
မူရင်းပို့စ်ရှင် ကစံလှကြီးဘာပြောဆွေးနွေးမလည်း.. သိချင်သား..။
ဒီကိစ္စကတော့ အမှန်တော့ ရှေ့တိုးလည်း ထမ်းပိုး နောက်ဆုတ်လည်း လှည်းထုပ် ဆိုတာမျိုး အပြတ်ပြောဖို့ ခက်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အမှန်တော့ အကို သိသလောက် ရည်းစားသက်တမ်း ကြာရင် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ တယောက်နဲ့ တယောက် သိပ်ရင်းနှီးလာပြီး ခဏ ခဏတွေ့တာ လက်ချင်းထိတာ ဖက်တာ နမ်းတာမျိုးလောက်နဲ့ တအား ရင်းနှီးလာရင် ဒီကိစ္စကို ရောက်သွားတတ်ပါတယ်။ အမှန်တော့ ကိုကြောင်ကြီး ပြောသလို မညှာတမ်း ပြောရရင် နှစ်ဖက်စလုံးကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဆေးပညာအရလည်း လူတိုင်း သွေးနဲ့ကိုယ် သားနဲ့ကိုယ်မှာ ခဏ ခဏ ထိတွေ့ရင် မိန်းကလေးရော ယောကျာင်္းလေးပါ သာယာပါတယ်။ ယောကျာင်္းလေးက တောင်းဆိုပေမယ့် ဆေးပညာအရ မိန်းကလေးလည်း စိတ်ယိုင်နေပါပြီ။ ရင်းနှီးလာရင်တော့ ဆိတ်ကွယ်ရာသွားတာမျိုး ဆင်ခြင်သင့်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စ မဖြစ်ချင်ရင်ပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီကိစ္စအတွက် ယောကျာင်္းလေးမှာ တာဝန်ရှိပါတယ် ဟုတ်ပါသလားလို့ အပြတ်မေးရင်တော့ အကို့အနေနဲ့ yes လို့ဖြေပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ယောကျာင်္းသားဆိုတာ မိန်းကလေးရဲ့ အရှက်ကို ကာကွယ်ပေးဖို့ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ယုံကြည်လို့ ဒီအပြစ်ကို အမျိုးသားဘက် ပို့လိုက်တာပါ။
မှားတယ် မှန်တယ် ဆိုတာထက် ဒီကိစ္စတော့ ရလဒ်အပေါ်မှာ တည်ပြီး ဆုံးဖြတ်ရတော့မှာပါ။ အင်း မိန်းကလေးက သူ့ကို သည်းမခံနိုင်မှတော့ တသက်လုံး မခံနိုင်ဘူးဆိုရင် လမ်းခွဲလိုက်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တခု ရှိတာက ဒီလို နယ်ကျော်တာမျိုး ဖြစ်ပြီးသား ဖြစ်တဲ့အတွက် မိန်းကလေးအတွက်တော့ အစွန်းအထင်း အမှန်ပဲ ရှိသွားပါတယ်။ လုံမလေးမွန်မွန် ဘယ်လို ထင်သလည်း။ ညီမ သူငယ်ချင်းက နောက်ထပ် သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ ရွေးချယ်ချင်တဲ့ ယောကျာင်္းလေးတွေ့ရင် ဒီကိစ္စကို ဖွင့်ပြောနိုင်မယ်လို့ ထင်လား။ အကို သိပ်မထင်ပါဘူး။ သူပြောရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တတ်နိုင်သမျှ ဖုံးထားရတော့မယ်။ အဲဒီထဲက ကိုယ်က ရှုံးနေပြီ။ နောက်ပြီး ခုနပြောသလို ဓါတ်ပုံတွေ လိုက်ဖြန့်မယ့် အောက်တန်းကျတဲ့လူနဲ့ တွေ့ရင် ဒီထက် နစ်နာဦးမယ်။
အဲဒီလို နစ်နာရင်တော့ လမ်းခွဲတာ မှန်သလား မှားသလားဆိုတာ မရှိတော့ပဲ လက်မထပ်ခင် လွန်သွားတာ မှားတယ် ဆိုတာပဲ ပြောရတော့မယ်။ အကို ထင်ပါတယ်။ လမ်းခွဲရတာတောင် ဒီကိစ္စ ပါသလား မသိပါဘူး။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောရတာ ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဒီကိစ္စက စမိရင် တခါတည်းနဲ့ မရပ်တတ်ပဲ အကြိမ်ကြိမ် ဆက်တတ်ပါတယ်။ သိပ်အကြိမ်ရေ များသွားရင် တယောက်အပေါ် တယောက် သိပ်စိတ်မပါတော့ပဲ ရိုးသွားတတ်ပါတယ်။ လက်ထပ်တာ ကြာနေတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေ ပိုသိပါတယ်။ လင်မယားက ရိုးသွားလည်း သားသမီးတွေ တခြားသံယောဇဉ်တွေ ရှိတတ်လို့ ရိုးသွားတာနဲ့တော့ ကွဲမသွားတတ်ပါဘူး။ သမီးရည်းစားကျတော့ အဲဒီ အပို ချည်ထားတဲ့ ကြိုးတွေ မရှိလို့ အလွယ်ကွဲပါတယ်။ မိန်းကလေးကလည်း ယောကျာင်္းလေးအပေါ် အရင်လို စိတ်မပါတော့ အပြစ်မြင်လာတာ ယောကျာင်္းလေးကလည်း ရိုးသွားတော့ တမင် လုပ်တာ မဟုတ်ပေမယ့် အရင်လို သူ့ရှေ့မှာ သူမကြိုက်တာတွေ ရှောင်ပြတတ်တာတို့ နည်းလာလို့ ဖြစ်မယ်။
LT … ဆိုတာနဲ့ ဘာလို့များ Sex ပဲ ပြေးပြေးမြင်နေကြတယ် မသိ။ စဉ်းစားရ ခက်၏။
LT ဆိုတာ Sex Partner မှ မဟုတ်တာ။
LT မှာ Sex ထက်ပိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေ အများအပြားမို့ အကျယ်တ၀င့်၊ တစ်ဖက်တည်း မရောက်ပဲ
ကို winds လား မ winds လား မသိတဲ့ စာဖတ်သူရေ။ တဖက်တည်း မရောက်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ ပို့စ်ရော ကွန်မန့်တွေရော ဖတ်ကြည့်ပါဦ။ လိင်ကိစ္စရော သဘာဝတရားရော စိတ်နေစိတ်ထားပိုင်းရော ဆေးပညာရော ဘာသာရေးတောင် နည်းနည်းပါပြီး ဒီထက်စုံဖို့ တော်တော့်ကို မလွယ်ပါဘူး။
ကို Winds ပါ ခင်ဗျာ။ တကယ်တော့လည်း ကိုစံလှကြီးပြောတဲ့ စာဖတ်သူဆိုတာက ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။ ကျတော်က ဖတ်ပဲ ဖတ်နေတတ်တာကိုးဗျ။ ဒီဆိုက်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်များစွာကတည်းက ဖတ်နေတာမို့ ပို့စ်များကို အရှေ့အနောက် အကုန်နီးပါး ဖတ်ထားပါတယ်လို့ … ။ ဘာပဲပြောပြော ဒီလို Comment ကောင်းတွေ အများကြီးထွက်လာအောင် အစပြုပေးတဲ့ ကိုစံလှကြီးကိုလည်း ကျေးကျေးပါလို့။
အမှန်တော့ ကျတော် ၀င်ရေးဖြစ်တာက …
ကျတော် LT နေလာတာ ရှေ့လဆို ၆ နှစ်ပြည့်ပါပြီ ခင်ဗျာ။ နှစ်ယောက်စလုံး အကြောင်းကြောင်းကြောင့် လက်မထပ်ပဲ တိုက်ခန်းတစ်ခုတည်းမှာ နေလာတာပါ။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်ကြတယ်၊ ကိစ္စအကုန်လုံးကို 50% – 50% လုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ 100% အပြည့်လုပ်ပေးတတ်ကြတာဆိုလို့ လက်ဆောင်ဝယ်ပေးတဲ့ နေရာတစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေပြည့်နေတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့… သာယာလှပတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ အချိန်ကာလတွေပါပဲ။
အခုလိုနေတာ နှစ်ဖက်မိဘ အကုန်သိပါတယ်။ မသိပဲနေတယ် ထင်မှာစိုးလို့ပါ။
ဟီး … စာတွေတော့ သိပ်မရေးတတ်လို့ ဒီလောက်ပါပဲဗျာ။
ကို Winds ဆိုတဲ့ မိတ်ဆွေရေ ခင်ဗျားကလည်း အခုမှ ဝင်လာလို့ ကျနော်က မသိပါဘူး။ ခင်ဗျား LT နေတာ ၆ နှစ်လောက်ရှိတာ သာယာလှပ ပြည့်စုံတဲ့ အချိန်ကာလလေး ဆိုတော့ နည်းသေးတာပေါ့ဗျာ။ ဟိုတလောက အမြင်မတော် ယောကျာင်္းကြီးနှစ်ယောက် လက်ထပ်ပွဲ လုပ်တဲ့ အတွဲဆို ၁၀ နှစ်ပြည့် မင်္ဂလာ နှစ်ပတ်လည်တောင် လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတော့ သူတို့က ပိုပြီး သာယာလှပ ပြည့်စုံတာပေါ့ဗျာ။ သူတို့ သာယာလှပ ပြည့်စုံတာနဲ့ သူများတွေ အဲဒီလို လိုက်လုပ်လို့ ရတယ်ဆိုရင် ခက်ကုန်မှာပေါ့။ နောက်ပြီး ဒီမှာ ဖြိုးချစ်သူဆိုတဲ့ လိင်တူချစ်သူ တယောက်လည်း ရှိတာပဲ။ သူလည်း သူ့ဟာနဲ့သူတော့ သာယာတဲ့ ဘဝလေးပဲဗျ။ အပေါ်က ကျနော့်ပို့စ်ထဲမှာ ရေးထားတဲ့ ပိုလီယန်ဒရီ သမားတွေလည်း သူတို့ဘဝနဲ့ သူတို့တော့ သာယာတဲ့ ဘဝလေးတွေပဲဗျ။
နောက်ပြီး ပိုလီယန်ဒရီ စနစ်သမားတွေအပြင် group marriage ဆိုတဲ့ အုပ်စုလိုက် လက်ထပ်ခြင်းတမျိုး အမေရိကားမှာ ပေါ်ခဲ့ဖူးဆိုပဲဗျ။ လူ ၂၀၀ လောက် အိမ်ကြီးတအိမ်ထဲမှာ စုနေကြပြီး ဘယ်လိုခေါ်မလည်း ဝိုင်းလုပ် ဝိုင်းစားပေါ့ဗျာ။ အပိုင်လင်မယားရယ်လို့ မရှိဘူးတဲ့။ ဆက်ဆံချင်တဲ့ အချိန်မှာ ဆက်ဆံချင်တဲ့လူနဲ့ ဆက်ဆံကြတယ်။ ဘာပြဿနာမှ မတတ်ဘူးတဲ့။ ကလေးရရင်လည်း ဘယ်သူ့ကလေးလို့ မရှိပဲ အားလုံး စုတာဝန်ယူကြတယ်။ ကဲ ဘယ်လောက် သာယာလှပတဲ့ ဘဝကြီးလည်း။ စုပေါင်းဘုံလယ်ယာမြေစနစ်လို့ ခေါ်မလား ဝိုင်းကြီးချုပ်စနစ် ခေါ်မလား စုပုံရှင်း ခေါ်မလားပေါ့။ သူတို့ဘာသာသူတို့ သာယာလှပပေမယ့် အမေရိကန် အစိုးရက မရဘူးဆိုပဲဗျ။ အဲဒါလုပ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကို ဝရမ်းထုတ်ပြီး ဖမ်းတာပဲ။ မက္ကဆီကိုဘက် ထွက်ပြေးရတယ်။ သူမရှိတော့ သူ့ရဲ့ သာယာလှပတဲ့ အရိပ်အမြုံလေးလည်း တိမ်ကောသွားတယ်။ ယူအက်စ်ရဲ့ ဘယ်တရားရုံးမှာမှ အဲဒီ အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းလုပ် ဝိုင်းစား စနစ် တရားမဝင်လို့ ဆိုတယ်။
ဟာ သူများ လူ ၂၀၀ လောက်စုပြီး သာယာလှပပြည့်စုံတဲ့ အချိန်ကာလလေး ထူထောင်နေတာ ဘာလို့ ဖမ်းရတာလည်း ဆိုရင် ပတ်ဝန်းကျင်ကို အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေလို့ဗျ။ အမှန်တော့ လူတိုင်းက ဘယ်လောက် မူမမှန်ဘူးပြောပြော ကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ကတော့ သာယာတဲ့ ဘဝတွေချည်းပဲ။
မညှာဒန်း ပေါရလျင် လက်ခုပ်ဆိုဒါ နှစ်ဖက်တီးမှ မြည်ဗာသကွယ်… ဖြောင်း ဖြောင်း ဖြောင်း.. .နာနာတီးကွ… သုံး သုံးလီ ကိုး………………………………..
အကြမ်းဖျင်းတော့ ကြောင်ပြောတာ လက်ခံရတော့ မလိုလို။
အမှန်တော့ တူဂယ်သား(together)ဆိုတာက (separate) စပရိတ်တို့ (lonely) လုံးလီးတို့ (alone) အလုံးတို့ထက် ကောင်းတယ်ဟုတ်ဘူးလားးးး
၂ ယောက်ဆို ရှင်လူ ဆိုတဲ့စကားတောင်ရှိသေးးး
အဲတော့ တူဂဲသား ဆိုတဲ့ စကားလုံးလေးက သိပ် ကောင်းတယ်။
အိတင်း တူဂဲသားးးး (Eating together)
လစ်ဘင်းတူဂဲသားးး (living together)
စလိပင်းတူဂဲသားးးး (sleeping together)
ဖေ့စင်းသလိုက်(ဖ) တူဂဲသားးးး (facing life together)
ဒိုင်း တူဂဲသားးး (die together)
မကောင်းတာက တူဂဲသားပြီးမှ (apart) အပါတ် ဖြစ်သွားတာမကောင်းတာ။
ဆိုး၊ ဝန့်(စ) ဘီးရင်း တူဂဲသားးး၊ ထရိုင်း တူဘီ ကွန်တင်းနူး တူဂဲသားးးးး၊
(so, once being together, try to be continue together)
လစ်ဘင်း တူဂဲသားကိစ္စ (LT) က ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးးး
လူတွေက ပြဿနာ၊ လူတွေ အတွေးတွေက ပြဿနာ။။
ကိုယ်မလုပ်တိုင်း သူများလုပ်တာ မကောင်းဘူးလို့ ပြောလို့လည်း မရဘူးးးး
ကိုယ့် လုပ်ရပ်တိုင်းကလည်း မှန်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးးးး
အဲတော့ ဘာဟာမှားတယ်၊ မှန်တယ်လည်း ပြောမရဘူးးး၊ မပြောရဲဘူးးးး
လောက မှာ အမှန်တရားအယောင်ဆောင်တွေ များလွန်းလို့ ဘယ်ဟာမှားတယ် ဘယ်ဟာမှန်တယ်လို့ မပြောရဲတာကြာပေါ့။
အမှန်တော့ ဘာကို တစ်တယ် တို့ လစ်တယ်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘောင်ခတ်ထားတာ လို့ ကျနော်တော့ထင်တာပဲ။
အတွေးအခေါ်တို့ လက်ခံမှုတို့ဆိုတာ အရွယ်ရယ်၊ အခြေအနေရယ် ပေါ် မူတည်ပြီးပြောင်းလဲသေးတယ်။
အဲတော့ ဘောင်မခပ်ဘူးးး အနော်ဟာ တစ်လည်း မဟုတ် လစ်လည်းမဟုတ်။
ဦးစံလှကြီးပြောသလို သက်သာရာသက်သာကြောင်းနေတတ်တဲ့ ကြားနေလို့ပဲ မှတ်ပေါ့ဗျာ။
တစ်ကိုယ်ရည် ကိုယ်တိုင် အတွေးကတော့ မှားမှားမှန်မှန် ကိုယ်စိတ်ပါတာ ကိုယ်လုပ်တတ်တဲ့သူပါ။
ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မှားတဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်း သူများကို အပြစ်မပြောပါဘူးးးးးး။
အဲဒီ ဘောင်မခပ်တဲ့ ဘောင်ထဲမှာနေသော ဇီ
die together တော့ ကောင်းဘူးထင်တယ်နော့်..
ဘောင် မ ခတ်
ရှောင် တတ်သော ကေ ဇီ
အရင်က သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်သုံးနှစ်လောက်ကပေါ့။ သူ့ရီးစားနဲ့ LT နီးပါးနေကြတယ်။ မိဘတွေတော့မသိဘူး။ လင်မယားတွေလိုနေကြတယ်။ နောက်သူနဲ့ကွဲသွားကြတယ်။ အခုပြန်တွေ့တော့ အဲကောင်လေးနဲ့မယူဖြစ်ဘူး တဲ့။ ကွဲသွားကြတယ်တဲ့။ သူလဲ ဘယ်ယောင်္ကျားလေးကိုမှ လက်ထပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဲတော့ LT ဟာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက် လင်ကောင်းသားကောင်းရနိုင်တဲ့စနစ်မဟုတ်တာတော့ သေချာ တယ် ထင်ပါတယ်။ ရည်းစားသဘာဝ အတူနေတာကတော့ လူမသိသူမသိဆိုတော့ နောက်ထပ်ယော င်္ကျားကောင်း တွေ့နိုင်ပေမဲ့ ခုလိုလူသိရှင်ကြား LT ကတော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှု့နဲ့ကွာနေတာကိုတော့ ခံစားမိပါတယ်။
ပိုလီယန်ဒရီ စနစ် ကတော့ နှစ်နိုင်ငံလောက်ကျင့်သုံးနေတယ်ကြားဖူးတယ်။ တရုတ်လိုနိုင်ငံဆိုရင်တော့ အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရှေးစွန်းစွဲ မြန်မာယောင်္ကျားတွေရဲ့ သူ့တို့ဇနီးအပေါ်ခံယူ ချက်တွေကြောင့်အဆင်ပြေမယ်မထင်ဘူး။
အဲ အဲ အခုလို မြင်တဲ့အတွက် ဝမ်းသာပါတယ် TNA ရယ်။ အခုလို ထင်တောင် မထင်မိဘူး။ အမှန်တော့ လစ်ဗင်းတူဂဲသားဟာ မြန်မာမိန်းကလေးတွေအတွက် ကြောက်စရာ ကောင်းတာတွေ ရှိတယ်။ ရည်စားဘဝ လူမသိ သူမသိ အတူနေတာကတော့ ကျနော့် ဆောင်းပါးထဲမှာ ပြောခဲ့ပါပြီ။ အတတ်နိုင်ဆုံး မလုပ်မိအောင်ရှောင် မတတ်နိုင်လို့ လုပ်မိရင် သိုသိုသိပ်သိပ်လုပ် ဆိုလိုတာက လက်စလက်န မကျန်စေနဲ့။ ဒါပေမယ့် ဒါလည်း ရာနှုန်းပြည့်တော့ စိတ်မချရဘူးလို့ ပြောပြီးသားပါ။
ကျုပ်ငယ်ငယ်တုန်းက အိမ်နားက မိန်းမကြီး နှစ်ယောက် ရန်ဖြစ်ကြတယ်။ အဲဒီတုန်းက ကျုပ်တောင် လူပျိုပေါက် မဖြစ်သေးဘူး။ အဲဒီတုန်းက သူတို့က မိန်းမကြီးတွေ။ အခုတော့ အဘွားကြီးတွေ ဖြစ်ပြီး တယောက်ဆို ကွယ်လွန်ရှာပါပြီ။ ဖြစ်တာက သိပ်တော့ ကြီးကြီးမားမား မဟုတ်ဘူး။ ကလေးချင်း ရန်ဖြစ်ရာက အမေတွေ ပါကုန်တဲ့ သဘောပါ။ အဲဒါ ရန်ဖြစ်တော့ တယောက်နဲ့ တယောက် ဒေါသနဲ့ အော်ကြ ဟစ်ကြ အပြန်အလှန် လုပ်ရင်းကနေ မိန်းမကြီးတယောက်က ဒေါသထွက်လာပြီး ကျိန်းတယ်ဗျ။ သူကျိန်းတာက “ငါ့ကို ဘာမှတ်သလည်း။ မိလှတဲ့ တလှတည်း ရှိတယ်။ ဇတ်ကြောင်းကို မြေလှန်လိုက်မယ် ဟေ့နော်” အဲဒီလိုဗျ။ အဲဒါလည်း ကြားရော တဘက်က မိန်းမကြီးခမျာ ခုန ဒေါသတွေ ပျောက်ပြီး မီးကို ရေနဲ့သတ်လိုက်သလိုပဲ။ ငြိမ်သွားလိုက်တာ။ သနားစရာ။ အဲဒါ ကျုပ်က အသက် သိပ်မကြီးသေးတော့ အဲဒီ မြေလှန်မယ့် ဇတ်ကြောင်းဆိုတာ သိချင်လိုက်တာမှ။ အခုတော့ ဒီဇတ်ကြောင်းပဲ ဖြစ်မယ် ဆိုတာ သဘောပေါက်ပါတယ်။
တတ်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိပ်ပြာလုံအောင် နေနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာ။ တော်ကြာ အသက်ကြီး ကြီးကာမှ ဇတ်ကြောင်းကို မြေလှန်လိုက်မယ်ဟေ့နော် ဆိုတဲ့ လူနဲ့ တွေ့ရတာ သိပ်တော့ ပျော်စရာ မကောင်းဘူး။
အော်မေ့လို့ TNA ရေ။ ပိုလီယန်ဒရီကို ထည့်ပေးတာက ကျင့်သုံးဖို့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကောင်းတယ်ဆိုတိုင်း ကျင့်သုံးရင် ဒီစနစ်မှာလည်း ကောင်းကွက်တယ် ရှိတယ်လို့ ပြချင်တာပါ။ အဲဒါသာ ကျင့်သုံးရင် မြန်မာပြည် ပျက်သွားမှာပေါ့။
ဘယ်လောက် လွတ်လပ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်နဲ့ ကိုက်မှ ကျင့်သုံးတယ် ဆိုတာကို သိစေချင်တာပါ။ ခဏစောင့် အပေါ်က ကွန်မန့်မှာ ရေးစရာ ရှိသေးလို့။
ရေးထားတာ ရမ်းကြိုက်ပဲ …သတိထားဖို့ စေတနာရှေ့ထား ပြောထားတာတွေအားလုံး လက်ခံပါတယ်ရှင်
ဘယ်လိုပြောရမလဲ Good ပေါ့နော် …ပိုလီယန်ဒရီဆိုတာကီးကတော့ ဗဟုသုတအနေနဲ့ပဲ ဖတ်လိုက်ပါတယ်…
LT ဆိုတာကြီးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအနေနဲ့
ရှောင်ကျဉ်စရာ သီလတစ်ပါးအဖြစ်နဲ့ကို ရှိနေတာပါ…
ဘယ်လိုကံများပဲဖြစ်ဖြစ် ကျူးလွန်မိသူ အားလုံးဟာ (အထူးသဖြင့် မမှားအပ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေ)အပေါ်မှာ ပြစ်မှားမိတဲ့ ထိုထိုသော အမျိုးသားတွေရဲ့  ဘ၀မှာ ကိုယ်ပြုသောကံအတိုင်း အကျိုးပေးမှာ အသေအချာပင်ဖြစ်ပါလေသတည်း…..
မ myat pearl phyu ရေ လူသစ်လို့ ထင်ပါတယ်နော်။ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုပဲ မိန်းမသားဟာ မာန်တင်းတင်း သဘာဝအားဖြင့် သူက ပိုပြီး အမျိုးသားထက် ထိရှလွယ်တဲ့အတွက် ပိုသတိထားဖို့ ရေးရတာပါ။ ကျနော် အမှန်တော့ LT ကို မြန်မာ့လူ့ဘောင်အတွက် သိပ်မကြိုက်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ အယ်တီနေပြီ ဆိုရင် သူက အစကတည်းက အကဲခတ်ဖို့ဘက်ကို စဉ်းစားထားပြီး မသေချာသေးတဲ့အတွက် တယောက်နဲ့ တယောက် သည်းခံဖို့ သိပ်ခက်ပါတယ်။ လူနှစ်ယောက် အတူနေပြီ ဆိုကတည်းက စိတ်သဘော မတိုက်ဆိုင်တာတွေကတော့ ရှိမှာ အမှန်ပဲ။ ကိုယ်တိုင်ပဲ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကိုယ့်သွေးသားရင်းချာ ညီအကို မောင်နှမချင်းတောင် တအိမ်ထဲမှာ မကြာခဏ ကတောက်ကဆ ဖြစ်တတ်တယ်လေ။ လက်ထပ်ထားတဲ့ အတွဲကျတော့ အဲဒီလို ပြဿနာ အသေးလေးတွေ ဖြစ်လည်း အလွယ်တကူ မကွဲချင်ဘူးဆိုတဲ့ စိတ်ကို အခြေခံလို့ တတ်နိုင်သမျှတော့ ဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားတတ်တယ်။ ဘယ် လင်မယားမှ စ မင်္ဂလာဆောင်ကတည်းက တနေ့ ဒီအိမ်ထောင်ကြီး ပြိုကွဲရမယ်လို့ မစဉ်းစားဘူးလေ။ ပြဿနာကြီးလို့ မဖြေရှင်းနိုင်မှ ကွဲလည်း ကွဲပေါ့လေ။ LT သမားကျတော့ အစကတည်းက အကဲခတ်မယ်လို့ စဉ်းစားထားတော့ ပြဿနာအသေးလေးတွေ တွေ့တာနဲ့ ဖြေရှင်းဖို့ထက် ဒါက ပိုကြီးမားမယ့် ပြဿနာလို့ မြင်ဖို့များတယ်။ ပိုဆိုးတာက နှစ်ဘက်စလုံးက ဝှက်ဖဲတွေ ထားလာနိုင်တယ်။ လူဆိုတာ ကိုယ့်ဘက်တော့ တကွက် ချန်ထားတာချည်းပဲ။ ဟို ကျုပ် ဥပမာပေးတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ လျှောက်ဖြန့်တဲ့ ငနဲဆိုရင် ဒီကိစ္စကို အစောကြီးကတည်းက ပြင်ဆင်ထားပုံ ရတယ်။
အဲဒီလိုကွဲတာနဲ့ ယောကျာင်္းလေးရော မိန်းကလေးရော မြန်မာ့လူမှုထုံးစံအရ အိမ်ထောင်ပျက် စာရင်းထဲ ဝင်သွားလိမ့်မယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး အမည်းစက် ဖြစ်သွားတယ်။ မိန်းကလေးကတော့ အရမ်း နစ်နာသွားလိမ့်မယ်။ မိန်းကလေးအတွက်ကျတော့ ဒါက စံနှုန်းကြီးကိုး။
စာတွေ အရှည်ကြီးရေး…ကွန်မန့် တွေအရှည်ကြီး ပြန်ရေးနဲ့ပို့စ်အပေါ်တင်မကဘဲ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အပေါ်မှာ စေတနာထားပြီး
ရေးထားတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးစကားအရင် ပြောရင်း အခုလက်ရှိနေထိုင်နေတဲ့ နိုင်ငံမှာ ကျနော်မြင်တွေ့ နေတဲ့ LT စနစ်လေးကို
ဒီနိုင်ငံမှာ မူကြိုကျောင်းတက်နေကတည်းက “ ငါ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်…အဖေနဲ့ အမေ ပြောစရာ မလိုဘူး ” ဆိုတဲ့
အယူ အဆလေးတွေက စနေပါပြီ….
မိဘက ကလေးအမှားလုပ်လို့ ရိုက်မိ ဆူမိရင် မူကြို ဆရာမတွေက ချော့မေးပြီး ရဲကို တိုင်ပါပြီ…
အဲဒီအရွယ်လေးတွေ ပြသနာလုပ်လို့မျက်နှာတွေ နီရဲနေအောင် ငိုခဲ့ရတဲ့ အမေတွေ ခဏခဏတွေ့ ရတယ်..
၉ လလွယ် ၁၀ ဖွားခဲ့တဲ့ အမေ…နော်..။
လိုချင်တာ ဝယ်ပေး၇တယ်.. ခလေး အတွက် ကိုယ်ဝန်ရှိကတည်းက ခရိုနာ ၃၀၀၀၀..( ၆၀၀၀၀..ဆိုရင် မြန်မာငွေ သိန်း ၁၀၀)
ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ အပြင် အလုပ်လဲ ခွင့်ရပါတယ်…
( စကားချပ်…။ ရိုင်း၇ိုင်း ပြောရရင်.. LT နေလို့ ကိုယ်ဝန်ရရ… ပံ့သကူ ပစ်လို့ ဘဲ ရရ… နိုက်ကလပ်က တစ်ညနဲ့ဘဲ ရရ…
ဘယ်လိုဘဲရရ….ကိုယ်ဝန်ရှိကြောင်း ဆေးခန်းက အတည်ပြုတာနဲ့ …၃၀၀၀၀..ရပြီ…။
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာ…မိန်းကလေးတစ်ယောက် အထက်က လို ကိုယ်ဝန်ရှိလာရင်..ဘယ်သူက ထောက်ပံ့ငွေ ပေးမလဲ)။
အဲဒီ ၃၀၀၀၀က ခဏနဲ့ ကုန်တာနော်…။
ခလေးမွေးပြီးတာနဲ့ ခလေးအတွက် ၁လကို ခရိုနာ ၇၀၀…သို့ မဟုတ် ၉၀၀ ပေးတယ်…။
မူကြိုကျောင်းက ၁လ ၂၅၀၀ ပေးရတယ်..
ခြေအိပ်ကအစ ခေါင်းစွပ်…အကုန် အကုန် ၀ယ်ပေးရတာ….
ဒါပေမယ့် သိတတ်ကတည်းက သူတို့ လေးတွေက အစွယ်လေးတွေနဲ့ … ၁၀ နှစ်အရွယ်ကတည်းက ရည်းစားထားချင်…
ကဲ ချင်နေပြီ…အဲဒါကို အဖေနဲ့ အမေ ဘယ်သူ သတ္တိကောင်းပြီး ဆူရဲလဲ…ဆူကြည့်ပါ..
အဖေ နဲ့ အမေ ဆူတဲ့သူ..သေချာတယ်..ထောင် ၁လ…၃လ။
အဲဒိတော့ ၉လလွယ် ၁၀လဖွားရတဲ့ မာတာမိခင် ဖခင် တို့ မှာ…ကျေးဇူးရှင်လေးတွေကို ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီး အိမ်က မြန်မြန် ထွက်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းကြတာ အမော…။ ပြောမရ..ဆိုမရ..ထိမရ..ငေါက်မရ….။ ကျနော့် အသိ နော်ဝေဂျင်တွေ
သားသမီး ၁၈နှစ်ပြည့်ပြီး အိမ်က ထွက်ကြမှာကို ပျော်နေလိုက်ကြတာ…ကိုယ်က နင့် သမီးလေး ငယ်သေးတယ်..
စိတ်မပူဘူးလားလို့ပြောရင်…
“ ငါ့ ခေါင်းက ဆံပင် ထပ်ကျွှတ်တာ ကြည့်ချင်လို့ လား” တဲ့…။
အဲဒီက စ တာပါ LT ဆိုတာကြီး…။ သူတို့ လေးတွေက ၁၄ ..၁၅ ထဲက ဆေးလိပ်ခိုးသောက်တယ်..
၁၆ လောက်ဆို စုံ ( sex + အစုံတတ်) နေပြီ… ကလပ်တက်ချင်..မူးချင် ရမ်းကားချင်နေပြီလေ…..
အဲတော့ သူတို့ ကိုက ထွက်ချင်လွန်းလို့ပြသနာ ရှာနေတာ… မိဘတွေ ခမြာ အနေအထိုင် အပြောအဆို အတော်ဆင်ချင်ရတယ်..
တော်ကြာ ထွက်ခတ်ခတ်ပြီး အချုပ်ထဲ ထည့်မှာကြောက်လို့ မျက်နှာချို သွေးနေရတဲ့ဘဝ..။
၁၈ နှစ် ပြည့်တဲ့နေ့ သောက်ပွဲ စားပွဲနဲ့ပါ.. နုတ်ဆက်တာ…။
၁၈နှစ်ပြည့်ပြီးလို့မိဘအိမ်မှာဘဲ ဆက်နေမယ် ဆိုရင်…လာထား…အိမ်လခ ၁လ ၄၀၀၀ ခရိုနာ ( ခရိုနာ ၆၀၀၀။ မမ ၁၀ သိန်း)
မီးလခ သုံးရင် သုံးသလောက်ပေး…
( လိမ်မာတဲ့ ကလေးတွေ အများကြီး ရှိတယ်နော်… ခုက ကဲချင် ရမ်းချင် LT ချင်တဲ့ ဟာတွေကို ပြောတာ..။
အဲဒီ ဟာလေးတွေ အပြင်ရောက်တာနဲ့စပါပြီ..
နိုင်ငံတော်က ကျောင်းစားရိတ် ထောက်ပံ့ငွေက စားစရိတ် အိမ်စား၇ိတ်နဲ့မလောက်တော့…ချစ်ချစ် မချစ်ချစ် ကောင်ကလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူနေ..စား၇ိတ်မျှပေး…ပြသနာတက်လို့လမ်းခွဲရင် နောက်တစ်ယောက် အိမ်ရောက်..။
သူတို့ အတွက် ခဏတာ အဆင်ပြေဘို့LT ကြတာပါ…
နောက် LT က တစ်မျိုးပါ…
ငယ်ကတည်းက ချစ်ခဲ့တယ် ချစ်ဦးသူဘဲ ဖြစ်ဖြစ်…ဖဲဝိုင်းဆေးလိပ်တိုမဘဲ ဖြစ်ဖြစ်…ချစ်တယ်..လက်ထပ်ချင်တယ်..
ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံ မရှိကြဘူး ( ကျနော်သိတဲ့ ကျောင်းအုပ်ဆရာမ ဆိုရင် ကလေး ၄ ယောက်ရပြီးမှ နိုင်ငံတော်က ပညာသင်စားရိတ် ချေးထားတာ ကျေတာ… အကြွေးတွေ များတာ..)။ လက်ထပ် စားရိတ်က အရမ်းကြီးတယ်..
အဲတော့ ပိုက်ဆံစုနေစဉ်မှာ အတူနေတယ်… LT ပေါ့.. ခလေးတွေ ရပြီး ကြာမှ လက်ထပ်တယ်…
လက်မထပ်ဖြစ်ဘဲ လမ်းခွဲပြီး ကိုယ်တော်က နောက်တစ်ယောက်နဲ့ အတူသွားနေရင် အမျိုးသမီးက ဘာမှ ပြောခွင့် မရှိဘူး..
သွား…လူမှုရေးရုံးကို ..ခလေးစားရိတ်တောင်း( ကျနော်တို့တိုင်းပြည်က ခလေးစားရိတ် ထောက်ပံ့ရဲ့လား)။
နောက်လင်ကွဲ မယားကွဲတွေကလည်း များမှများ…. တန်ဘိုးထားပြီး လွမ်းနေစရာမှ မရှိတာ…
ထောင်းထောင်း ညက်ညက်ကျေ ထည်လဲတွဲပြီး LT နေလာတဲ့… ဆရာမဂျီးဘဲ…( အဲဒီမှာ…လာပြီ မြန်မာ မိန်းကလေးတို့ 
တန်ဘိုးထား၇မယ့် အပိုင်း.. မိဘ မောင်နှမတွေက အမုန်းခံပြီး အရိပ်တကြည့်ကြည့် ပိုးမွေးသလို မွေးခဲ့ရတဲ့ တန်ဘိုး)
LT တွေ လမ်းခွဲ သွားတဲ့ အခါ မျက်နှာငယ်တာက ခလေးဘဲ…။
ဘယ်သူနဲ့LT နေလို့ဘယ်သူနဲ့ဗိုက်လိုက်မှန်းတောင် မသိတော့ ကလေးက အဖေ မရှိဘူး.. LT အဖေကလဲ သိပ်စာရင်း မသွင်းတော့…ကျောင်းမှာ နေရာ တစ်ကာမှာ ပြောခံထိတော့….မူကြို တက်ကတည်းက ကလန်ချင်နေပြီ…
အဲဒီ LT လည်ပတ်မှုဟာ.. မိဘနဲ့ သားသမီး ထားရမယ့် ဂါရဝ တရားတွေ ဆိတ်သုဉ်းကုန်တယ်..
မေတ္တာတွေ သံယောဇဉ်တွေ ပြတ်တောက်ကုန်တယ်..
ကျနော်တို့တိုင်းပြည်မှာဗျာ…
၁၈ နှစ် မက ပါဘူး ၄၀ ကျော် ၅၀ ဖြစ်နေပါ့စေ…မိဘအိမ် မှာ ကပ်နေလို့ ရတယ်..တက်စားလို့ ရတယ်..
၄၀ ..၅၀ ဖြစ်နေပါစေ အသက် ၈၀ အဖေက နား၇င်းအုပ်လဲ ရယ်နေတယ်…
ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်က ရွှေ ငွေ ကျောက်သံ ပတ္တမြား ကျွှန်းသစ် ရေနံ ဓါတ်ငွေ့ထွက်ပေမယ့်
ကျနော်တို့ချမ်းသာတာ မဟုတ်ပါဘူး..
ကျနော်တို့ချမ်းသာတာ ကိုယ်တိုင်တန်ဘိုးထားမှ ကိုယ်တိုင် တန်ဘိုးရှိမယ့် ယဉ်ကျေးမှုလေးဘဲ ရှိတာပါ..
သူများနိုင်ငံကို အထင်ကြီးပြီး LT ချင်ပါတယ် ဆိုရင်တော့ သဘောပေါ့လေ…
သူများက နိုင်ငံက ရပိုင်ခွင့်တွေ ရှိလို့အပူမရှိနေချင်သလိုနေတာ….
ကိုယ်က သူ့ လို နေလို့ …တခုခု ပြသနာဖြစ်ခဲ့ရင် ဘာထောက်ပံ့မှုတွေ ရနိုင်မလဲ စဉ်းစားပေါ့…
ကိုယ့်မွေးတဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေး ကို ဆင်းရဲလို့ထမင်းရည် တိုက်ချင်တိုက်ရပါစေ
အဖေ ခေါ်စရာမရှိတဲ့… ကလေး ဖြစ်အောင်တော့ မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ…။
ရိုင်းတာပါရင် နားလည်ပေးပါ…ကိုစံလှကြီးနဲ့ ရွာသူရွာသားတို့ ရေ…
ဟုတ်ပါတယ် ကိုကျော်စွာခေါင်ရေ ကျနော်ကလည်း ဓလေ့ထုံးစံ မတူတာကို အဓိက ပြောချင်တာပါ။ ဟိုဘက်က သူ့စနစ်နဲ့သူ ကျင့်သုံးလို့ ရတာကို သူရတိုင်း ကိုယ်လည်းရမယ် ထင်ပြီး လိုက်လုပ်ရင် မှားမယ်လို့ ထင်တာပဲ။
ကျုပ်အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၂၀ ကျော်လောက်က ချင်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာကို ရေပေးရေးစီမံကိန်း လယ်ဆည်ကအဖွဲ့တွေနဲ့ရောက်သွားဖူးတယ်၊ အဲဒီရွာဟာ တစ်နယ်နှင့်တစ်နယ် ပေါင်းကူးဆက်ဆံရေးက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းမှုကြောင့် မထွန်းကားသေးခင်အခြေအနေပေါ့ဗျာ။ ဘယ်လောက်ထိ ခေါင်လွန်းတဲ့ဒေသဖြစ်သလဲဆို မြို့ပေါ်မှာ ဦးနေ၀င်း မဆလ အစိုးရကနေ န၀တ စစ်အစိုးရပြောင်းလဲသွားတာ ၄ နှစ်ကျော်ရှိပေမယ့် အဲဒီဒေသကသူတွေ မသိကြသေးဘူးဗျ။ အဲဒီလောက် အခြားတစ်နယ်နဲ့တစ်နယ် ကူးလူးဆက်ဆံမှုနည်းလွန်းတော့ အခြားဒေသရဲ့ ယာဉ်ကျေးမှုတွေ ဓလေ့စရိုက်တွေ နေထိုင်မှုတွေ စိမ့်ဝင်မှု မရှိ အတုခိုးမှုမရှိ အမြင်လည်းမကျယ်ကြဘူးပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်ရောက်ခဲ့တဲ့ အဲဒီဒေသမှာ သောက်ရေ၊သုံးရေ ဆိုတာအလွန်ရှားသမို့ အခုကျွန်တော်လယ်ဆည်အဖွဲက ယူနီဆက်ထောက်ပံမှုနဲ့ အ၀ိစိတွင်းတူးဖို့သွားတာမို့ အခုမှရေရဖို့ တွင်းတူးတဲ့အလုပ်စလုပ်ရမှာလေ။
သူတို့ဆီမှာ ရေကို ၅ မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ တောင်ကျချောင်းက တစ်ခါတစ်ခါ သွားခတ်ကြရတာမို့ ဟင်းထမင်း ချက်ဖို့နဲ့ သောက်ရေလောက်ဘဲရေချွေတာသုံးရတာမို့ အိမ်တစ်အိမ်မှာ ထမင်းစားပုဂံ(၃/၄)ခုရှိတယ် အဖိုး၊ အဖွား စားပြီးရင် ရှော်ဖတ်(သစ်ပင်ကိုထုထောင်းဖွထားကာ ရှော်ဖတ်ရှည်လုပ်ပြီး တိုင်မှာချီထားတာ)နဲ့ ပုဂံကို သုတ်လိုက်ပြီး အဖေ၊အမေနဲ့ ကလေးတွေ အဲဒီပုဂံနဲ့ထမင်းဆက်စားတယ် အဲ အိမ်ရှိတဲ့သူတွေစားပြီးရင် ဟင်းကျန်ထမင်းကျန်တွေကို အဲဒီပုဂံထဲထဲ့ပြီး ခွေးစာချကျွေးထားလိုက်တယ် ခွေက ပုဂံနဲကချထားတဲ့ ထမင်းကိုစားလိုက်တာ ပုဂံနခမ်းပါနားလျှာနဲ့ယပ်တော့ ပုဂံကိုပြောင်နေတာဘဲ အဲဒီခွေးစားပြီးတဲ့ ပုဂံကို လာယူပြီး ခုနရှော်ဖတ်နဲ့သုတ်ပြီး ထောင်ထားလိုက်ကာ ညနေစာစားတော့ အဲဒီပုဂံထဲထဲ့ပြီး စားပြန်ရော အဲဒီလို လူစားလည်းဒီပုဂံ ခွေးစားလည်းဒီပုဂံ သူစားလဲဒီပုဂံ ကိုယ်စားမယ်ဆိုလည်းဒီပုဂံ သုံးစွဲနေကြတာလေ။ သူတို့ဒေသ သူတို့အကျင့်နဲ့တော့ ရွံလည်းမရွံကြသလို ထူးလည်းထူးဆန်းမနေဘူးပေါ့။ ကျုပ်တို့မှာသာ ခုနက လူခွေးသူသူဌာဌာ လှည့်လည်စားနေတဲ့ပုဂံကိုကြည့်ပြီး မသတီစရာ ရွံရှာစရာ မသင့်တော်စရာဖြစ်နေတာ ပေါ့ဗျာ။ အဲလို သူတို့ဒေသဓလေ့ကို ခဏသွားကျုပ်တို့ လက်မခံနိုင်လို့ ကျုပ်တို့အဖွဲ့ထမင်းစာရင်း ဖတ်ခူးပြီး ဖတ်ကိုအ၀တ်နဲ့သုတ်ကာ စားခဲ့ရတာလေ။ သူတို့ကတော့ အရင်ကထဲက အခုလိုနေထိုင်ပြုမူလာခဲ့တော့ သူတို့ဓလေ့ သူတို့စရိုက် သူတို့အမူအကျင့် အတွက် ပျော်လို့ပါးလို့ နေထိုင်ကျင့်လိုပေါ့။ သူတို့ကို အဲလိုပြုမူ နေတာမှားနေတယ်လို့လဲ သွားပြောလို့ရဘူးလေ သူတို့မှာရေရှားလေတော့ ခေတ်အဆက်ဆက်ဒီလိုဘဲနေ သားကျနေပြီမို့လေ။
ဒီမြင်ကွင်းလေးကို ဘာလို့ရေးတာလဲဆိုရင် အခု LT တဲ့ကိစ္စလည်း အဲလိုသဘောပါဘဲ နိုင်ငံရပ်ခြား အနောက် နိုင်ငံများကတော့ သူ့ဓလေ့ သူ့အကျင့် ခုနထမင်းပုဂံကြီးလို အရင်ထဲက ကျင့်ကြံနေခဲ့လေတော့ မထူးမဆန်း ပျော်ပျော်ပါးပါးနေတတ်ကြပေမယ့် လက်ရှိမြန်မာအနေအထားအရတော့ ခဏရောက်ခဲ့ကျုပ်တို့လို့ သူတို့ ဓလေ့ စရိုက်ကို လက်မခံနိုင်သေးဘဲ ရွံရှာသလိုဖြစ်နေကြတာပေါ့ဗျာ။
ဒါကြောင့် မိမိကျင်လည်ကြီးပြင်းရာဒေသအရ နေထိုင်ကျင့်ကြံမှုစရိုက်မတူညီခြင်းကို တူညီစွာလက်ခံကြဖို့ ဆိုတာ လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်သလို လက်ခံကြဖို့ဆိုရင်လည်း အချိန်အတော်ကြာပေလိမ့်မည်လို့…….။
အခုလို အကြောင်းအရာ အစုံအလင်နဲ့ comment တွေ ဝိုင်းဆွေးနွေးလိုက်ကြတာ အနော်တောင် ဘာပြောရမှန်းမသိအောင်ဖြစ်သွားတယ် နေဦးဗျာ။ အနော်ပြောမလို့ စဉ်းစားထားတာတောင် အစအနပျောက်သွားတယ် ပြန်စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ကိုရင် စံလှကြီးရေ……။
ကို Paing Lay ရေ
ပြောစရာ မရှိရင်လည်း ဖတ်ပြီးတော့သာ ကျေနပ်ပါတော့။ ပြောတာကတော့ တော်တော့်ကို စုံနေပါပြီ။
ဝင်ဖြည့်ပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ယာဉ်ကျေးမှု မတူတာ ရုတ်တရက် ကြည့်ရင် ဘာမှ မဟုတ်သလိုပဲ။ အမှန်တော့ ပြဿနာကြီးပါတယ်။ အမှန်တော့ ချင်းတောင် မတိုးတတ်ရတာ အစိုးရကြောင့် လမ်းပန်းကြောင့်ချည်းပဲ မဟုတ်ပဲ အဲဒီ ယာဉ်ကျေးမှု မတူတာတွေကြောင့် အများကြီးပါတယ်။ ပြည်မက အစိုးရက ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းတွေ လွှတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကုန် ပြန်ပြေးရတယ်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းတာရော ပြည်မရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံကို သူတို့ ကျင့်သားမရသေး မသိသေးတာရော ပါတယ်။ ကျနော် အစကတည်းက ပြောချင်ပါတယ်။ ချင်းတိုင်းရင်းသားတွေ ဖတ်မိရင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီး တမျိုးထင်မှာ စိုးလို့ပါ။ နောက်ပြီး သူတို့ဟာ ပြည်ထောင်စုအစိုးရ အကျပ်အတည်း ဖြစ်ပြီး ရန်သူတွေ ဝိုင်းနေချိန်မှာ ခွဲထွက်မယ်တို့ အခွင့်အရေးတို့ ဘာမှ မတောင်းဆိုပဲ တာဝန်ကျေကျေ စစ်တိုက်ပေးခဲ့တယ်။ အခုလည်း အားလုံးထဲမှာ သူတို့က အခွင့်အရေး မတောင်းဆိုပါဘူး။ အခုတော့ ကျုပ်သိသလောက် ချင်းတွေ တော်တော်များများ ပြည်မမှာ လာနေကြတယ်။ သိပ်ကောင်းတယ်လို့ ပြောချင်တယ်။ ပြည်မရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံတွေကို သူတို့ ကျင့်သားရသွားမယ်။ နောင် တိုင်းပြည်ကောင်းလာရင် ဒါက အများကြီး အထောက်အကူ ပေးလိမ့်မယ်။ ချင်းအမျိုးသားတွေ ဖတ်မိရင်လည်း စေတနာကောင်းနဲ့ ပြောတယ် ဆိုတာ သိမှာပါ။
-ကိုယ့်ကို သိပ်မကြည်တဲ့သူရဲ့ ပို့စ်ထဲ ကွန်မင့်ဝင်ရေးရမှာ လက်တွန့်တယ်တော့။ ပို့စ်ကော ကွန်မင့်တွေကော အကုန်လုံးကောင်းပါတယ်။ ကျမ LTကို ထောက်ခံပေးချင်တာ တကယ်တော့ ဒီသဘောသွားပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ LT နေတဲ့ မိန်းကလေးတွေ သိပ်မျက်နှာငယ်တာ။ ဒါကြောင့် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းကြီးက လက်ခံပေးစေချင်တာပါ။ မြန်မာ့လူနေမှု အ၀န်းအ၀ိုင်းမှာ LT ကို လက်ခံပေးမှု လုံးဝနီးပါး မရှိတဲ့အတွက် LT နေတာ လူသိသွားရင် ဒီမိန်းကလေးသွားပြီ။
မြန်မာပြည်မှာ အိမ်ထောင်ရေးကံဆိုးတဲ့ မိန်းမတွေ တော်တော်များပါတယ်။ မိန်းမက အသာစီးရနေတာမျိုး သိပ်မရှိလှပါဘူး။ တကယ်ချစ်လို့ယူကြတဲ့ သူတွေထဲမှာသာ မိန်းမက အသာစီးရတာပါ။ ဒီနေရာမှာ LT ရဲ့ အနှစ်သာရက စကားပြောပါတယ်။
သားသမီးထိန်းသိမ်းတဲ့နေရာမှာကျတော့ လျှော့ပေးလည်း မကောင်း၊ တင်းလွန်းလည်း မကောင်း၊ လျှော့ပေးလွန်းအားကြီးတော့လည်း လူကနေခွေးဖြစ်၊ တင်းလွန်းအားကြီးတော့လည်း ခိုးစားရတဲ့အသီး ပိုချိုဆိုတာလို နင်းကန်။ လိင်ပညာပေးမှာ အန်တီပဒုမ္မာ ပြောတဲ့ သန္ဓေတားကိစ္စကို ကျမ မဆိုလိုပါ။ ဆရာအတ္တကျော်ရေးတဲ့ လိင်ပညာပေးအဆင့်မျိုး ထိ လိုအပ်တယ်လို့တော့ မထင်ပါ။ ကျမပြောတာက မိန်းမအဆင့် ဒီလောက်ထိ ချပစ်လိုက်တဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ဆိုလိုတာပါ။ အင်တာနက်တန်ခိုးနဲ့ အဲဒါတွေ အခု အရမ်းကြီးထွားနေတယ်။ ပန်းခြံထဲတောင် မရှောင်ကြဘူး။ အဲဒီလောက် အောက်တန်းကျအောင် မ်ိန်းမတန်ဖိုး ဒီလောက်ထိ ချမပစ်ဖို့က အဲဒီလုပ်ရပ်တွေကို အမေကိုယ်တိုင် ကိုယ့််သမီးကိုယ် ဆုံးမတာကောင်းတယ်။ တစ်ဖက်ကလည်း သိပ်တင်းလွန်းရင် မကောင်းဘူး။ ချုပ်ချယ်လွန်းရင် ခိုးစားတဲ့အသီး ပိုချိုတယ်မှတ်ကုန်ကြလိမ့်မယ်။
ကိုစံလှကြီးနဲ့ ကျမ တွေးခေါ်ပုံမတူပေမယ့် မိန်းကလေးတွေ တန်ဖိုးမကျစေလိုတဲ့ စေတနာကတော့ အတူတူပါပဲ။
မဝင်းပြုံးမြင့် မှားနေတယ် ထင်တယ်။ ကျနော်က ခင်ဗျားကို အမြင်မကြည်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျနော့်ပို့စ်ထဲမှာ ခင်ဗျားရဲ့ တချို့အယူအဆတွေကို လက်မခံတဲ့ သဘော ရေးသွားတာ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်က လူကို တိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိကက မူကို တိုက်ချင်တာပါ။
တကယ်တော့ ကျနော့် မူရင်းဆောင်းပါးက LT စနစ် ကောင်းတယ် မကောင်းတယ် ပြောတာထက် ဒါကို ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် မိန်းကလေးအတွက် မြန်မာ့လူ့ဘောင်မှာ လက်တွေ့ ဆိုးကျိုးတွေ ရဖို့များတယ်လို့ ပြောတာပါ။ ဒါပေမယ့် မူရင်း ဆောင်းပါးထဲမှာလည်း LT စနစ်ကို မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံပေးစေချင်တဲ့ သဘောမျိုး မရေးသလို ကျနော်ကိုယ်တိုင်က မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းကို အဲဒီစနစ် လက်ခံပြီး ရှင်သန်ထွန်းကားမှာ မလိုလားပါဘူး။ မဝင့်ပြုံးမြင့်မှာ LT စနစ်ကို မြန်မာတွေ လက်ခံပေးစေချင်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရှိရင်တော့ ကျနော်နဲ့ ကွာပါတယ်။ ကျနော် ရေးတာက သိပ်မအောင့်နိုင်လို့ အယ်တီ လုပ်ချင်နေကြရင်တော့ မြန်မာ့လူ့ဘောင်က လက်ခံတဲ့အထိစောင့် အခုလုပ်ရင် လက်တွေ့ အန္တရယ်များတယ်လို့ ပြောတာပါ။ မဝင်းပြုံးမြင့်ကတော့ LT နေမယ့် မိန်းကလေးတွေ သိပ်နစ်နာနိုင်လို့ အယ်တီကို လက်ခံစေချင်တယ်။
ကျနော် မြင်တာတော့ ဒီလိုပါ။ ဥပမာ ပြောရရင် မဝင်းပြုံးမြင့်ရယ် အရက်သမားကို အရက်သောက်တတ်တဲ့ လူကပဲ နားလည်တယ်။ ဖဲသမားကို ဖဲကစားတဲ့ လူကပဲ နားလည်တယ်။ အရက်သေစာ မသောက်တတ်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တခုမှာ အများနဲ့ ကွာနေလို့ အရက်ကို ရဲရဲ မသောက်ဝံ့ပဲ ခိုးသောက်နေတဲ့ အရက်သမား ၃ ၄ယောက် ရှိတယ် ဆိုပါစို့။ အဲဒါ တိုက်တွန်းမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီ ၃ ယောက်လောက် နေရမခက်ပဲ လွတ်လွတ်လပ်လပ် နေနိုင်အောင် ကျန်တဲ့လူတွေလည်း သူတို့လိုပဲ အရက်လိုက်သောက်ပါလို့ ပြောရမလို ဖြစ်နေတာပေါ့။ ကျနော်သာဆို အဲဒီလို မတိုက်တွန်းဘူး။ LT လည်း ဒီလိုပါပဲ။ အယ်တီစနစ်ကို မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းက လက်ခံပါလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးတွေ မင်္ဂလာ မဆောင်ပဲ အစမ်းနေကြည့်ကြ လိင်ကိစ္စ အိမ်ထောင်မပြုပဲ လုပ်ကြည့်လို့ တိုက်တွန်းရာ ရောက်နေလို့ အဲဒီလိုတော့ မတိုက်တွန်းပါဘူး။
နောက်ပြီး မဝင်းပြုံးမြင့် စာတွေကို အစက ကျနော် မဖတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကျနော်က မသိတဲ့လူရဲ့ စာကို တခါတလေ ကျော်သွားတတ်တယ်။ ငါးစိမ်းသည်ဗားရှင်းတို့ ဘာတို့ပေါ့။ အခုမှ ဆူဆူညံညံ ဖြစ်လာလို့ ဖတ်ကြည့်တာ အဲဒီတော့မှ သိတာ။ ပြောရရင် မဝင်းပြုံးမြင့်ရေ ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ဆိုတာက မိန်းမ ယောကျာင်္းဆိုတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ အဲဒီလူရဲ့ အတွင်းစိတ်နဲ့ ဆိုင်ပါတယ်။ ယောကျာင်္းထဲက ကျနော် ပြခဲ့ဖူးတဲ့ ယောကျာင်္းလို မိန်းကလေးရဲ့ ဝတ်လစ်စလစ်ပုံတွေ လိုက်ဖြန့်တဲ့ ယောကျာင်္းရှိသလို မိန်းမထဲကလည်း မယူရသေးတဲ့ ချစ်သူကို ရအောင် နားသွင်းပြီး အိမ်ခန်းကြီးကို သူ့နာမည်နဲ့ ဝယ်ခိုင်းပြီးမှ ရလည်းရရော အဲဒီလူကို ကန်ထုတ်ပြီး နောက်တယောက်နဲ့ ကောက်ယူတဲ့ မိန်းမတွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီလို မိန်းမကို မြင်လို့ မိန်းမတွေ မကောင်းဘူးပြောရင် အစွန်းရောက်သလို မကောင်းတဲ့ ယောကျာင်္းကို ပြပြီး ယောကျာင်္းတွေ အောက်တန်းကျတယ် ဆိုရင်လည်း အစွန်းရောက်တယ်။ မဝင်းပြုံးမြင့်ရဲ့ မြန်မာပြည်က ယောကျာင်္းများ အပျိုစင်နဲ့ မတန်ဆိုတာလည်း အစွန်းရောက်တဲ့ အမြင်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုမိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ဘုရေ လာလည်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါ။
ဟုတ်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ယောက်ျားများ အပျိုစင်နဲ့မတန် ဆိုတာ အစွန်းရောက်အမြင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမက ဖိုက်တာကောင်းတယ်လေ။ ဒါကြောင့် အပြတ်ဖိုက်ပြီးရေးထားတာပါ။ တင်းနစ်ကွင်းထဲမှာဆိုရင် လက်ခမောင်းတောင်ခတ်လိုက်ဦးမယ် ဟီး။
ဆရာမပြုံးရယ် ကိုစံလှကြီးရယ်ကို လက်ဘက်ရည်နဲ့
ကျနော်နဲ့ ကိုကျောက်တို့ကတော့ ဘေးကထိုင်ပြီး ရေနွေးကြမ်းငှဲ့ပေးမယ်ဗျာ ။
ကဲ ဘယ်လိုလဲ … တစ်ကြိမ်လောက်ဆုံကြမလား
ရှေ့လထဲ ကိုကျောက်လည်း ပြန်လာမှာဆိုတော့ …
အဲဒီ တွေ့ဆုံပွဲလေးဖြစ်မြောက်ရင် အစအဆုံး ကျနော်စပွန်ဆာပေးမယ်ဗျာ
ခုလို အလည်ရောက်တဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်း စာတွေ ထပ်သလို ဖြစ်နေတဲ့ ကြားကပဲ ကမန်းကတမ်း ပြောလိုက်ပါတယ်။
ဘရန်းဒက်ကေဇီရေ အခုလို ရောက်လာပြီး ဟိုလိုလည်းမဟုတ် ဒီလိုလည်းမဟုတ် ကြားထဲကနေ လွတ်အောင် ပြောသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပါ။
ဦးစံလှကြီး မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မလဲ ဂဇက်မှာ စာဖတ်သူ တစ်ယောက်ပါ။ ကွန်မင့်တွေ ဘာတွေလဲ သိပ်မရေးဖြစ် ပါဘူး။ ဒီပို့စ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ သဘောကျပါတယ်။ မြန်မာပြည်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ စဉ်းစားကြည့်ရင် အတွေးအခေါ်တွေ အရမ်း နိမ့်ကျလာတယ်လို့ ခံစားရတာ ကြာပါပြီ။ မှန်တာပြောတဲ့သူကို ဆိုရင် လိုလိုလားလား လက်ခံတဲ့သူတွေ နည်းလာသလိုပါပဲ။ အများ မိုးခါးရေ သောက်တိုင်း ကိုယ်လိုက်သောက်စရာ မလိုဘူးဆိုတာ လက်ခံတဲ့သူ ရှားလာသလိုပါပဲ။ ကျွန်မအမျိုးသား ဖေ့ဘွတ်မှာ ဆရာတော် တစ်ပါး ကာတွန်းပုံလေး တစ်ပုံ ပို့ပေးထားပါတယ်။ မျက်လုံးထဲမြင်အောင်ပြောရရင် လူရုပ်ပုံလေး တွေ တစ်ဖက်တစ်ချက် 20 လောက်ရှိတဲ့ အလယ်မှာ လူရုပ်လေး တစ်ရုပ်က ပြုံးပြီး ကိုယ်လမ်းကိုယ် လျှောက်သွားနေတဲ့ပုံပါ။ ဘေးက အရုပ်လေးတွေက သူ့ကို တီးတိုးပြောချင်ရာပြောနေတာကို သူက လုံးဝ ဂရုမစိုက်ပါဘူး။ အဲဒီလိုပါပဲ။ အခု ဒီပို့စ်ကိုရေးတင်တဲ့ အတွက် အများကြီး သဘောကျပါတယ်။ ဦးစံလှကြီး ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ဆရာတော် အရှင်ဆေကိန္ဒ ပြောထားတဲ့ စကားစုလေးကို ပြန်ပြီး မျှဝေခဲ့ပါမယ်။ “မှန်တဲ့လူနဲ့ မှားတဲ့လူ ဘယ်ဘက်မှာ ကိုယ်နေမလဲတဲ့။ ကြားမှာ နေမယ်လို့ ရွေးချယ်တယ်ဆိုရင် ကိုယ်ဟာ မှန်တဲ့သူကို စော်ကားလိုက်တာပါတဲ့။”
အေးဗျာ မ myatpone nya ရေ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ ဝမ်းသာပါရဲ့။ ပထမဆုံးအကြိမ် စာရေးတာကိုလည်း ကြိုဆိုပါတယ်ဗျာ။ ကျနော့်ပို့စ်က အောက်ပိုင်းကွန်မန့်တွေတော့ ထပ်သလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် သဂျီး ပြောသလို မိုဘိုင်းဖုန်း အင်တာနက်နဲ့ကျတော့ ကောင်းနေပြန်ရော။ တကယ်တော့ ကျနော့် အနေနဲ့ ဒီပို့စ်ကို ကြိုက်တဲ့လူရှိမှာ ဖြစ်သလို တချို့ နိုင်ငံခြားမှာ နေတဲ့လူတွေ ကြိုက်ချင်မှ ကြိုက်မယ်လို့ တွေးထားပါတယ်။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ နိုင်ငံခြား ရောက်နေတဲ့ တချို့လူငယ်တွေက မြန်မာ့အသိုင်းအဝိုင်းနဲ့ ကင်းကွာလို့ ဖိအားမရှိတာရယ် မိဘနဲ့ ဝေးနေပြီး ကိုယ့်ပိုက်ဆံ ကိုယ်ရှာနိုင်တာတွေကြောင့် LT နေနေကြတယ်လို့ ကြားထားပြီးသားပါ။ ဒီပို့စ်ကို ကျနော် စိတ်မှန်းနဲ့ ရေးတယ်လို့ မထင်ပါနဲ့။ ဒီပို့စ် မရေးခင် LT နေနေတဲ့ အသိတယောက်ကို တကူးတက ဖုန်းဆက်ပြီး မေးထားပြီးမှ ကျနော် ရေးတာပါ။ ကျနော်မေးတုန်းက သူက မမေးစဖူး တကူးတက မေးလို့ အံ့သြနေတယ်။ သူမဖြေတတ်ပဲ ဖြစ်နေလို့တောင် ကျနော်က ရှေ့ကမေးခွန်းတွေ မေးပေးသေးတယ်။ အင်တာဗျူးပေါ့။ ပထမဆုံး မေးတာက သူ့ကို ငွေပိုစုဖြစ်လားမေးတော့ သူက မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ အကုန်အကျက အကုန် လင်မယားနဲ့ အတူတူပါပဲ။ ဘာမှ ထူးပြီး သက်သာမသွားပါဘူးတဲ့။ ဒါဖြင့် အချိန်ပိုရလားဆိုတော့ အဲဒီလိုလည်း မရပါဘူးတဲ့။ လင်မယားလို နေကြတာဆိုတော့ ကျောင်းတတ်မယ်ဆိုလည်း လင်မယားဘဝနဲ့ ကျောင်းတတ်တဲ့ လူနဲ့ အတူတူပါပဲတဲ့။ ဒါဖြင့် ဘာထူးလည်းဆိုတော့ မင်္ဂလာမဆောင်ရတာပဲ ထူးပါတယ်တဲ့။ အကုန်အကျ သက်သာတာ အဲဒီအတွက်ပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော် ထင်ထားတဲ့ အတိုင်းပါပဲဗျာ။ အမှန်တော့ ကျနော်အမြင့် လေ့လာလို့ရအောင် LT နေမယ်တွေ ဘာတွေသာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ပြောနေတာပါဗျာ။ တကယ်က မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာနေမယ် တယောက်နဲ့တယောက် တွေ့မယ်။ ကြိုက်မယ်။ အဲဒီမှာတင် မီးပွင့်ပြီး အထိအတွေ့မှာ သတိမေ့ကြပြီ။ ပြည်တွင်း ဆိုရင်တော့ ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတော့ မယူသေးပဲနဲ့ ပေါ်ပေါ်ထင်ထင် နေလို့မရတော့ တည်းခိုခန်းမှာတွေ့မယ်။ နိုင်ငံခြားကျတော့ အဲဒီလို ဂရုစိုက်ရမယ့် ပတ်ဝန်းကျင် မရှိတဲ့အခါကျတော့ လွယ်လွယ်လေးနဲ့ သမီးရည်းစားသက်တမ်း မကြာသေးပဲ အဲဒီလို နေလိုက်ကြတာပါဗျာ။
LT နေပြီးရင်တော့ မိဘသိချင်လည်း သိမယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့ မြန်မာပြည်က မိဘကျတော့ ပြောဖို့ခက်သွားပြီ။ သူက သူ့ပိုက်ဆံနဲ့သူ အဝေးမှာ နေနေတာကိုး။ မိဘက သိပေမယ့် ပတ်ဝန်းကျင်က မမြင်ရဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ပြောလို့ မနိုင်တဲ့ နှစ်ဘက်မိဘကလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်လို့ ရတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ဖိအားမှ မရှိပဲကိုး။ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ အဲဒီလို နေတာနဲ့ တွေ့တဲ့ အသိက မိဘကို သားလေး ဒါမှမဟုတ် သမီးလေးက ဘယ်တုန်းက လက်ထပ်လိုက်တာလည်း။ တို့ကို မဖိတ်ဖူးနော် ဆိုတာနဲ့ မိဘလည်း အရှက်ရပြီ။ မြန်မာပြည်မှာ ဆိုရင်တော့ မိဘတွေ အနေနဲ့ လက်ခံမှာ မဟုတ်တာ သေချာတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာကျတော့ မြန်မာပြည်က လူတွေ မသိတဲ့ အခါကျတော့ မိဘ အနေနဲ့လည်း မသိချင် ယောင်ဆောင်နေလို့ ရတာကိုး။ ဘာမှ မဖြစ်ရင်တော့ ကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ။ ဖြစ်ရင်တော့ မိန်းကလေးက ဥပဒေအစောင့်အရှောက်ရော လူမှုရေး အစောင့်အရှောက်ပါ ရှိမထားလို့ ယုတ်မာတဲ့လူနဲ့ တွေ့ရင်တော့ သွားပြီပဲ။
နောက်ပြီး အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ ပြောရရင် နိုင်ငံရေးလိုပဲ။ တဘက်နဲ့တဘက် ညှိနှိုင်းရတာတွေ ရှိတယ်။ အလျှော့အတင်း လုပ်ရတာတွေ ရှိတယ်။ အိမ်ထောင်သည်ဆိုတော့ ပိုသိမှာပါ။ LT နေလို့ အဆင်ပြေမယ်ချည်း ထင်မနေပါနဲ့။ မြန်မာထဲမှာ မိဘရွေးပေးတာ ယူတဲ့လူနဲ့ ကိုယ်ကြိုက်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လေ့လာပြီးမှ ယူတဲ့ အတွဲတွေထဲမှာလည်း တသက်လုံး မကွဲမကွာနဲ့ ပျော်ရွှင်တဲ့ အိမ်ထောင်တွေ အောတိုက်ပါဗျာ။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်။
အူးစံလှဂျီး ကြိုးစားအချိန်ပေး စေတနာတွေထားပီးရေးထား…
မန့်တာလဲ ၈၅ ကျော်နေဘီ..
ဂလောက် လူကြိုက်များတဲ့ပို့စ်ကို ဒဂျီးဘာလို့ စတစ်ကီ မပေးတာလဲ ညော်…
အဲလာပေါ့ တဂျီး သဘောထား အမှန်တွေ ဘူးပေါ်သလို ပေါ်တယ် ဆိုတာ။
မြန်မာအမျိုးသမီးဒွေကို ဒဂျီးက စေတနာမထားတဲ့သဘောပေါ့ ညော်…..